ကြှမျးကငျြပညာရှငျ – My Blog
ကြှနျမနာမညျက အေးမို့မို့။ ကြှနျမဟာ ဧရာဝတီတိုငျး ပုသိမျခရိုငျက ကြေးရှာလေးတဈခုမှာ နထေိုငျပါတယျ။ အဖအေမတေို့က ဆနျစကျထောငျထားတဲ့သူတှပေါ။ ကြှနျမတို့ ဧရာဝတီတိုငျးဟာ တိုငျးပွညျရဲ့ထမငျးအိုးဟငျးအိုးလို့တော့ လူတှပွေောတာ ကွားဖူးပါတယျ။ နထေိုငျသူအမြားစုက လယျယာစိုကျပြိုးတယျ။ ငါးဖမျးထှကျကွတယျ။ ကနျတှေ အငျးတှနေဲ့ တဈခွားကူးသနျးရောငျးဝယျရေးတှေ လုပျကိုငျစားသောကျကွတာပါ။ မွနျမာတဈနိုငျငံလုံးမှာ ကိုယျပိုငျရဟတျယာဉျ စစီးတာလညျး ကြှနျမတို့ ပုသိမျခရိုငျက သူဌေးကွီးတဈယောကျပါပဲ။
အဖိုးရှိစဉျအခါတုနျးက ‌ပွောပွတော့ ကွားဖူးတာပါ။ တကယျ ဟုတျမဟုတျကတော့ ကြှနျမလညျး မမီလို့ မသိလိုကျဘူးရှငျ။ ဆနျစကျသူဌေးတဈယောကျရဲ့ တဈဦးတညျးသောသမီးဘဝမှာ ကြှနျမလညျး တျောတျောကွီးကို အလိုလိုကျခံရပွီး၊ တဈမြိုးလုံးမှာလညျး တဈဦးတညျးသော မိနျးကလေးမို့ ကြှနျမရဲ့ဝမျးကှဲအကိုတှမေောငျတှရေဲ့ အသညျးကြျော အခဈြတုံးကွီး ဖွဈခဲ့ပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမဟာ ပညာရေးမှာတော့ ကံမပါပါဘူး။ကြှနျမ ဆယျတနျးကို သုံးနှဈဖွတောတောငျ ကလြို့ နောကျဆုံး စာမကကျြခငျြတော့တာနဲ့ ကြောငျးပညာရေးကို နားလိုကျရတယျ။ မွို့မှာ ကြောငျးသှားတကျပွီးသုံးနှဈကြ၊ နောကျဆုံး ရှာပွနျရောကျလာတော့ ကြှနျမအသကျက ဆယျ့ရှဈကြျောလို့ ဆယျ့ကိုးနှဈတောငျပွညျ့ပါတော့မယျ။
မွို့မှာ အတနျးထဲက ကောငျလေးတှနေဲ့ ရညျးစားသနာထားခဲ့ဖူးပမေယျ့ ရှာရောကျတော့ ကြှနျမဘယျလိုမှ ရညျးစားထားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကြှနျ‌မကို စာလိုကျပေး ပနျးလိုကျပေး၊ ရညျးစားစကားလိုကျပွောတဲ့ ကာလသားတှမှေနျသမြှ ကြှနျမအကိုဝမျးကှဲတှရေဲ့ ဝိုငျးဝနျးထိုးကွိတျခွငျးကို ခံရတာနဲ့ အုတျအျောသောငျးတငျးတှဖွေဈကုနျလို့ နောကျဆုံး ကြှနျမအဖကေ ကြှနျမကို အိမျထောငျခပြေးမှပဲ အားလုံးငွိမျကုနျကွတော့တယျရှငျ။ ကြှနျမအိမျထောငျကတြော့ ကြှနျမအသကျက နှဈဆယျ့တဈနှဈပဲရှိပါသေးတယျ။ အဖရေဲ့စီမံနရောခထြားပေးမှုအောကျမှာ အဖနေဲ့စီးပှားဖကျ လယျပိုငျရှငျကွီးတဈယောကျရဲ့သားနဲ့ ကြှနျမဖူးစာဆုံခဲ့ရပါတော့တယျ။ ကြှနျမယောကျြားနာမညျက ကိုညိုမငျးလှငျတဲ့။ နာမညျကသာ ညိုတာပါ။
လူကတော့ အသားဖွူပွီး အရပျရှညျရှညျ ဒေါငျကောငျးကောငျးနဲ့ပါ။ ဘာကို သဘောကလြို့လဲတော့မသိဘူး၊ သူက ဆံပငျကို အရှညျကွီးထားတာမို့ ဆံပငျက ကြောလယျလောကျနဲ့ဆိုတော့ ခါးအောကျပိုငျးလောကျရှိတဲ့ကြှနျမဆံပငျတှလေောကျနီးနီးကို ရှိပါတယျ။ လူက အရပျရှညျရှညျ ဒေါငျကောငျးကောငျး၊ မကျြနှာသှယျသှယျ၊ နှာတံကလညျး ဖွောငျ့စငျးပွီး မကျြခုံးထူထူနဲ့ဆိုတော့ သူ့ပုံစံနဲ့သူ ကွညျ့ကောငျးပါတယျရှငျ။ ထူးခွားတာက သူ့မကျြလုံးတှေ။ သူ့မကျြလုံးတှကေ တကယျ့ကို တညျငွိမျပွီး စူးရဲတယျ။ သိမျးငှကျမကျြလုံးဆိုတာ ဒါမြိုးကို ပွောတာနမှောပါ။ နားနှဈဖကျမှာလညျး စိနျနားတောငျးနဲ့၊ လူက နှုတျခမျးမှေးစစနဲ့ဆိုတော့ အဖကေ သူ့ကို မွနျမာ့ယောကျြားကောငျးလို့ အသိအမှတျပွုပါတယျ။ ဘယျအခြိနျကွညျ့ကွညျ့ ရှပျအကငြ်္ီလကျရှညျနဲ့ ပုဆိုးကို ညီနအေောငျ‌ဝတျထားပွီး သပျသပျရပျရပျနတေတျတယျ။ စကားပွောလညျး ပွတျတယျ။ အလုပျလုပျရငျလညျး တိကပြွီး လူကွီးမိဘပျေါ‌လညျး ရိုသတေော့ အဖတေို့အမတေို့က သိပျကိုသဘောကကြွပါတယျ။
သူတို့သဘောကလြို့လညျး ကြှနျမနဲ့ လကျထပျပေးခဲ့တာ မဟုတျလား။ ညားကာစကတော့ ကြှနျမက သူ့ကို ကိုညိုမငျးလှငျလို့ပဲချေါတာပါ။ နောကျကွာလာတော့မှ လငျမယားသံယောဇဉျရယျ၊ ကြှနျမက ကိုယျ့ယောကျြားကိုယျ ပွနျကွှနေခေဲ့တာကွောငျ့ ကိုကို လို့ပဲ သူ့ကိုချေါပွီး ‌အမွဲတမျးခြှဲနရေတော့တာပါပဲရှငျ။ ကိုကိုဟာ ကြှနျမထကျ ခွောကျနှဈလောကျကွီးပါတယျ။ ကြှနျမကို သိပျအလိုလိုကျပွီး ကြှနျမရဲ့ ဒုတိယဖခငျတဈယောကျလို ကြှနျမဆိုးသမြှ အနှံအတာလညျး ခံရှာပါတယျ။ ပညာအရညျအခငျြးနဲ့ပကျသကျရငျလညျး သခငြ်္ာအထူးပွုနဲ့ ကြောငျးပွီးထားတာပါ။ အဲ့လိုယောကျဖမြိုးကတြော့ အမွဲတမျးနီးပါး ထနျးရညျမူးအရကျမူးနတေဲ့ ကြှနျမအကိုဝမျးကှဲတှဟော ရနျလုပျဖို့နနေသောသာ သူ့ရှရေ့ောကျရငျ အပိုးကို ကြိုးလို့ပါပဲ။
အမွဲတမျး ယောကျဖ၊ ယောကျဖနဲ့ သူ့တို့သောကျသမြှ အရကျဖိုးအကွှေးတှေ လာလာဆပျခိုငျးတာ။ သူတို့ပိုကျဆံပွတျရငျ အိမျရောကျလာပွီး ယောကျဖရေ ဘာညာနဲ့ မကျြနှာခြိုသှေး။ ပွီးရငျ ပိုကျဆံခြေးတော့တာပဲ။ တဈခါမှလညျး ပွနျမရပါဘူး။ ကိုကိုကသာ သဘောကောငျးပွီး တောငျးသမြှပေးနတော၊ ကြှနျမကတော့ စိတျကို တိုလိုကျတာဆိုတာ။ ဟုတျတယျလေ၊ ကြှနျမကိုကိုက ပိုကျဆံရှာဖှနေတော ကြှနျမအတှကျပဲလေ။ သူတို့ အရကျသောကျဖို့မှ မဟုတျတာ။ ကိုကိုမရှိခြိနျ ရောကျလာရငျ ကြှနျမက အျောလှတျတာပဲ။ အဲ့ဒီ့ကရြငျ “နငျက ငါ့ညီမဖွဈပွီးတော့ ငါ့ယောကျဖလောကျတောငျ ငါတို့ကိုမခဈြဘူး၊ ငယျငယျတုနျးက ငါတို့ ခြီပိုးပွီးထိနျးခဲ့သမြှကို ကြေးဇူးကနျးတယျ” ဘာညာနဲ့ ဗဈြတောကျဗဈြတောကျပွောပွီး ပွနျသှားတာပဲ။
အငျး. . . သူ့ယောကျဖပွနျရောကျလာပွီဆိုရငျတော့ တနျးပွီးရောကျခလြာပါလိမျ့မယျ အဲ့ဒီ့မှာ။ ပွီးရငျ ကိုကိုကလညျး တောငျးသမြှထုတျပေး၊ “အရမျးကွီးတော့ မသောကျပါနဲ့အကိုတို့ရာ” လို့တဈခှနျးတညျးပွောတာ။ အဲ့ဒီ့အခြိနျကရြငျ သူတို့တှကေ ” ငါသိပါတယျယောကျဖကွီးရာ၊ အကိုကွီးတို့က နညျးနညျးပါးပါး ပြျောစပေကျြစသေောကျတာပါ။ ငါ့ယောကျဖကွီးက အဲ့ဒါတှေ ခဈြဖို့ကောငျးတာ။ ကိုကွီးတို့ကို စိတျပူပွီး အမွဲ မှာရှာတယျ။ ဟိုအငယျမနဲ့မြားကှာပါ့။ အကိုတှတေဈခါတလေ လာလညျတာကို အျောလှတျဖို့ပဲစဉျးစားနတော၊ ဟှနျး။ သှားတော့မယျ ယောကျဖကွီးရေ။ တျောကွာ ငါအကွာကွီးစကားပွောနလေို့ မကွညျဘဲ ထလာပွီး ပှစိပှစိလုပျနပေါဦးမယျ။ နောကျကမြှ တို့ညီကိုတှေ အေးဆေးစကားပွောကွမယျ။
သှားပွီဟေ့ ယောကျဖကွီး။ ငါ့ညီကွီးလညျး ကနျြးမာရေးလညျး ဂရုစိုကျကှာ” ဆိုပွီး ပွောခငျြရာပွော၊ အရညျသောကျဖို့ တနျးလဈတော့တာ။ ကြှနျမကိုကိုက ကနျြးမာရေးကောငျးတယျ။ သူတို့သာ အဲ့ဒီ့အရညျတှသေောကျပွီး အစောကွီးသမှော။ ကြှနျမလညျး ကိုကို့ကို အားနာရပါတယျ။ မကျြနှာတှလေညျး ပူပါတယျ။ အဲ့ဒီ့အခါတိုငျး ကိုကိုက ကြှနျမနှာဖူးလေးကို နမျးပွီး “အေးမို့လေးရယျ၊ ကိုကိုက ပိုကျဆံလေး မုနျ့ဖိုးပဲဖိုးလောကျပဲ ပေးတာပါ။ ကိုကိုရှာသမြှက ဟော့ဒီ့က ကိုကို့မိနျးမ အေးမို့လေးအတှကျ” ဆိုပွီး ကြှနျမကို ခြော့မွှူကာ ကြှနျမနဲ့ ခဈြရညျလူးတော့တာပဲရှငျ။ ကြှနျမလညျး ကြှနျမနှဲ့ဆိုး ဆိုးသမြှ၊ ကြှနျမအကိုဝမျးကှဲတှေ ညာလှိုငျးဖားလြားပွီး ဆိုးသမြှအတိုးကိုရော ကြှနျမရဲ့အခဈြတှရေော တိုးရငျးပေါငျးပွီး ကိုကို့ရဲ့အလိုကြ ကာမဆန်ဒဖွညျ့ဆညျးပေးရပါတော့တယျရှငျ။ ကိုကို့မှာ အတနျးပညာရေးအပွငျ နောကျထပျ အထူးပွု ကြှမျးကငျြတာ တဈခုရှိပါသေးတယျ။ အဲ့ဒါက ကာမသြှတ်တရပညာ တဲ့။
ရှီးးးးအအာ ကိုကို့ ဟငျးးး အို ကိုကိုရေ အားးး‌ ကောငျးလား ‌မိနျးမ။ အငျး ကောငျးတယျကို ဆောငျ့။ ကိုကိုနဲ့ကြှနျမ ညဘကျမအိပျခငျ၊ ခွငျထောငျထဲမှာ ဆကျဆံနခွေငျးဖွဈသညျ။ ကိုကို့ရဲ့ ခုနှဈလကျမလောကျရှိတဲ့ လိငျတံကွီးက ကြှနျမရဲ့ အင်ျဂါစပျထဲမှာ ဝါးလြားရှညျတဈလုံးနဲ့ထိုးသှငျးထားသလိုပဲ။ ကြှနျမလညျး ကိုကို့ဟာကွီးကို ခံနိုငျရညျရှိနပေါပွီ။ ညားခါစက တဈဆုံးထိ မခံနိုငျဘူး။ အသားကုနျ အျောဟဈညညျးညူရငျး သူ့ကို အသနားခံရတာ။ ကိုကိုလညျး ကြှနျမကို သနားလို့နဲ့တူပါတယျ။ တဈဝကျလောကျ မရှိတရှိလေးပဲထိုးသှငျးရငျး ကြှနျမကို သာသာလေးဆကျဆံပေးရရှာတယျ။ အဲ့ဒီ့နောကျပိုငျး အိမျထောငျသကျကွာလာတာနဲ့အမြှ တဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ဟာကွီးကို တဈနှဈလောကျ အကွာမှာ ခံနိုငျရညျရှိလာခဲ့တယျ။
ဒါပမေယျ့ ကိုကိုက ကြှနျမနဲ့အခု အိမျထောငျသကျ လေးနှဈကြျောတဲ့အထိ၊ ကြှနျမကို ဖွေးဖွေးပဲလိုးပေးပါတယျ။ တဈကိုယျလုံးကို ကွငျကွငျနာနာနမျးရှုံ့ရငျး တဈအိအိနဲ့လိုးပေးတာမြိုးကို ကြှနျမတဈကယျကို ကွိုကျနှဈသကျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့လညျး ကွာလာတော့ ကြှနျမလညျး တဈခွားပုံစံမြိုးနဲ့ခံစားခငျြလာတယျ။ ကိုကိုကတော့ ကြှနျမကို ပွောပါတယျ။ သူက နညျးမြိုးစုံနဲ့လုပျတတျတယျတဲ့။ မွို့ပျေါတကျ၊ ရနျကုနျတကျ၊ နယျတှခေရီးသှားရငျ သူ့စီးပှားဖကျတှနေဲ့ကိုကိုဟာ သောကျတတျစားတတျပွီး မိနျးမတှလေိုကျစားပါတယျ။ ရှာပွနျရောကျရငျတော့ မမေ့ပြေ့ောကျပြောကျထားပွီး ကြှနျမကို ခဈြခဈြခငျခငျကွငျကွငျနာနာ ပွနျနပေေးပါတယျ။
ကြှနျမကိုပွောတာတော့ သူ့ရဲ့တငျးနတေဲ့ကာမစိတျကို ဖွလြေော့တာပါ၊ ခဈြတာက ညီမကိုပဲခဈြတာတဲ့။ တဈသကျလုံးရိုးမွကေပြေါငျးသငျးသှားမှာပါ၊ အဲ့ဒီ့ဟာတှကေ တဈခဏပဲ၊ ပွီးတာနဲ့ ခေါငျးထဲကရှငျးထုတျလိုကျပွီး ဘာမှ ပကျသကျဆကျနှယျမှုမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ ကြှနျမနဲ့အိမျထောငျရေးကို လုံးဝအစှနျးထငျးမခံဘူးတဲ့။ ကြှနျမတို့အိမျထောငျရေးလညျး ဒီလိုနဲ့ နားလညျမှုရှိရှိ ရှဆေ့ကျခဲ့ကွပါတယျ။ တဈခါတဈခါ ကိုကို့ကို အပွငျက ကောငျမတှနေဲ့ဆကျဆံတာ အလိုမကစြိတျဖွဈမိပမေယျ့ သူပွနျရောကျလာရငျ အိပျယာထဲမှာ ကြှနျမကို ပှတျသပျနှိုးဆှရငျး သူနညျးလမျးပေါငျးစုံနဲ့ဆကျဆံလာခဲ့တဲ့မိနျးမတှအေကွောငျး ပွနျပွောပွတော့ ကြှနျမလေ ကိုကိုလိုးတာခံခငျြတဲ့စိတျတှေ ထကွှသောငျးကနျြးလာတာ ထိနျးမနိုငျသိမျးမရပါပဲ။
ကြှနျမက ကိုကိုရယျ အေးမို့မနနေိုငျတော့ပါဘူး လိုးပေးပါတော့ လို့တောငျးဆိုမှ ကြှနျမကို သူ့ဟာရှညျရှညျကွီးနဲ့ တဈအိအိလိုးပေးပါတော့တယျ။ အရသာ သိပျကိုထူးတာပါပဲရှငျ။ အိမျထောငျစကကြတညျးက အခုခြိနျအထိ ပုံမှနျနညျးရိုးကွီးနဲ့ပဲ မှောကျခုံလုပျလရှေိ့ပွီး တဈခါမှ တဈခါတညျးသာ ကြှနျမတောငျးဆိုလှနျးလို နညျးလမျးအသဈနဲ့ တဈပေါငျကြျော တဈခါလိုးပေးဖူးပါတယျ။ အဲ့ဒီ့တုနျးကဆိုရငျလေ ကြှနျမမှာ ကောငျးလိုကျတာမှ အရညျတှကေို အိုငျထှနျးပွီး၊ ပွီးသှားတာတောငျ ငါးမိနဈလောကျ တဈဇတျဇတျတုနျယငျပွီး အရသာခံစားနရေတဲ့အထိကို ကောငျးတာရှငျ။ နောကျကတြော့ ကြှနျမတောငျးဆိုပါသေးတယျ။
ကိုကိုက အဲ့လို လိုးမပေးဘူး။ အဲ့ဒီ့အခါကရြငျ ကြှနျမက စိတျကောကျတော့တာပဲ။ ဟုတျတယျလေ။ အပွငျကဟာမတှနေဲ့ကြ နညျးလမျးမြိုးစုံအကှကျမြိုးစုံနဲ့အားရအောငျလိုးပွီး အိမျကအတိအလငျးယူထားတဲ့မိနျးမကတြော့ အကှကျစုံထုတျဖို့နနေသောသာ တဈပေါငျကြျောတောငျ တဈခါပဲလိုးပေးရတယျလို့၊ စိတျတိုစရာကောငျးလိုကျတာ။ ဒီလိုအခါမြိုးကရြငျတော့ ကိုကိုက သသေခြောခြာဖွရှေငျးတတျပါတယျ။ “အေးမို့ရယျ၊ ကိုကိုတို့က ခဏတာတှပွေီ့း ကာမဆကျဆံတာမှ မဟုတျတာ။ တဈသကျလုံးအတူနသှေားရမယျ့ လငျမယားတှလေေ” တဲ့။ “နညျးမြိုးစုံနဲ့ဆကျဆံပေးလို့ လေးငါးခွောကျနှဈနဲ့ အကုနျစုံပွီးရိုးသှားရငျ ကွာလာတဲ့အခါ ကာမစိတျခမျးပွီး နောကျပိုငျးသိပျမလုပျခငျြဖွဈသှားတတျတော့ အိမျထောငျရေးကို တဈထောငျ့တဈနရောက အဖုအထဈဖွဈစတေယျ”တဲ့လေ။ “အိမျထောငျသကျ ကွာလာတာနဲ့အမြှ တဈမြိုးတဈမြိုး တိုးကာပေါငျးစပျရငျး အေးမို့ကို တဈသကျလုံးမရိုးအောငျ စှဲစှဲမွဲမွဲလိုးပေးခငျြတာပါ။
အဲ့ဒီ့အခါကရြငျ သူလညျး တဈခွားဟာမတှနေဲ့ မလုပျတော့ပါဘူး။ အပွငျရောကျ‌ရငျလညျး အသောကျအစား တဈခါ‌တလတေောငျမလုပျဘဲ ကနျြးမာရေးလိုကျစားပွီး အေးမို့ကို အတိုးခလြိုးပေးပါ့မယျ”တဲ့။ ကြှနျမလေ ကနြေပျလိုကျတာ။ ကိုကိုက သိပျကို အမြှျောအမွငျကွီးတာပဲရှငျ။ လုပျနညျးပေါငျးစုံကြှမျးကငျြပါလကျြနဲ့ ကြှနျမကို အသကျငယျတုနျး စိတျပိုငျးဆိုငျရာနဲ့ပဲ နှိုးဆှပေးမယျတဲ့။ နောကျပိုငျး မရတော့မှ ရုပျပိုငျးဆိုငျရာနညျးစနဈတှနေဲ့ တဈဖနျပွနျလညျနှိုးဆှပွီး တဈသကျမရိုးအောငျ ထပျလိုးပါ့မယျတဲ့ရှငျ။ အဲ့ဒီ့လိုပွောလိုကျတိုငျး ကြှနျမလေ စိတျတှအေရမျးဖွဈပွီး သူ့ကို ပေးလိုးတော့တာပဲ။အောကျကနေ ခါးလှုပျပွီးပဈကော့ပေးမိတာ။ အရမျးကောငျးတာပါပဲရှငျ။ တကယျတော့ ကိုကိုဟာ ကာမနညျးပညာကို ပါရဂူတနျးအထိ ကြှမျးကငျြတတျမွောကျထားတဲ့ ပညာရှငျစဈစဈတဈယောကျပါ။
ကြှနျမကို တဈသကျတာစီမံကိနျးနဲ့ သသေခြောခြာကို လိုးပေးနတောပဲကွညျ့လေ။ ကိုကို့ရဲ့ကာမစိတျပညာကို ကြှနျမ အလှနျပငျ ဩခရြလောကျပါတယျရှငျ။ ဒါပမေယျ့လညျး တဈခါ‌တဈလေ ကိုကိုနဲ့ကြှနျမ လငျနဲ့မယား လြှာနဲ့သှားဆိုသလို အကွောငျးကိစ်စတဈခုကွောငျ့ စကားနညျးနညျးမြားတဲ့အခါ ကြှနျမက စိတျတိုရငျ နောကျယောကျြားနဲ့လငျငယျနပေဈမယျ ဆိုပွီး စကားလုံးနဲ့ တိုကျခိုကျတော့ ကိုကိုက ကြှနျမလကျကိုဆှဲပွီး အိမျခနျးထဲချေါသှားတယျ။ ပွီးရငျ သူ့ရဲ့ ငှကျကွီးတောငျဓားကွီးကို အရှခေ့ပြွီး “ငါမသိဘဲနငျအပွငျမှာ ကလကေဝကောငျ‌နဲ့ခံရငျ နငျ့ကို ဒီဓားနဲ့ ငါကိုယျတိုငျခုတျမယျ။ နငျအလိုးခံခငျြရငျပွော။ နငျ အပွငျယောကျြားနဲ့လိုးတာ ခံခငျြလား။ ငါချေါလာပေးမယျ။ ငါကွညျဖွူတယျ။ ငါမသိဘဲနဲ့တော့ နငျဘယျသူနဲ့မှ မခံနဲ့” တဲ့။ သူ့အပျေါအခဈြမလြော့နဲ့တဲ့။ သူနဲ့ကြှနျမ အိမျထောငျရေးကို လုံးဝအထိမခံနိုငျဘူးတဲ့။ “နငျလိုးခငျြတာ ဘယျသူနဲ့လိုးခငျြလဲ၊ ဘယျလိုလီးမြိုးနဲ့လိုးခငျြလဲပွော” ဆိုတာနဲ့ ကြှနျမလေ တဈကိုယျလုံးကို ဖဉျြးတငျးတငျးဖွဈသှားပွီး ဒေါသတှဘေယျရောကျမှနျးမသိ၊ ကြှနျမဟာလေးထဲက အရညျတှထှေကျလာပွီး ကြှနျမမှာ တှနျ့လိမျနတောပဲ။ အဲ့ဒီ့အခြိနျ ကိုကိုက ကြှနျမမကျြလုံးကို အရိပျဖမျးတတျတယျ။
ကြှနျမကို ပှတျသပျနမျးနယျရငျး လိုးပေးတော့တာပဲ။ ကြှနျမမှာ ခံလို့ကောငျးလိုကျတာရှငျ။ အရှိနျတဈဝကျလောကျရောကျရငျ “အခု မငျးကို ငါမဟုတျဘူး အပွငျလူ မငျးမသိတဲ့ သူစိမျးတဈယောကျက လာလိုးပေးနတော သိလား” လို့ ပွောတော့ ကြှနျမရငျထဲ တုနျတုနျယငျယငျကွီးဖွဈလာပွီး ပါးစပျကလညျး ညညျးမိညညျးရာ ‌ညညျးညူလကျြသားနဲ့ အလိုးခံရတာ သိပျကောငျးတာပဲ။ အဲ့လိုမြိုးဆို ကြှနျမက နှဈခြီလောကျကို တနျးပွီးတတျတာ။ ဆကျဆံလို့လညျး အပွီး၊ ကြှနျမတို့ရနျဖွဈထားတာလညျး ဘယျပြောကျလို့ပြောကျမှနျးမသိ၊ ကြှနျမထှကျနတေဲ့ဒေါသတှရေော စိတျဆိုးတာတှရေော အရာအားလုံးပွပြေောကျပွီး အားရကနြေပျလိုကျတာရှငျ။ နောကျပိုငျးကတြော့ ကြှနျမနဲ့လုပျဖွဈတိုငျး တဈခါတဈခါ သူမဟုတျဘဲ တဈခွားသူက လိုးနပေါတယျဆိုပွီး ပွောရငျး သူ့ဟာကွီးနဲ့လုပျတတျတာ။ အဲ့လိုမြိုးဆို သူ့ဟာကွီးက တငျးမာလာပွီး ရှာမှာငရုတျထောငျးတဲ့ ခွနေငျးမောငျးတံက ကညျြပှကွေီ့းလို ကြှနျမရဲ့ခါးကဉျြကဉျြလေးကိုကိုငျကာ၊ တဈဇောငျ့ဇောငျ့နဲ့ ဆောငျ့ခတြော့တာပါပဲရှငျ။ ကြှနျမလေ ကိုကိုမဟုတျဘဲ တဈခွားလူတဈယောကျ ကြှနျမကိုဆောငျ့ခနြတေယျဆိုတဲ့ အာရုံတဈမြိုးရပွီး အရညျတှပေိုရှဲလာတတျတယျ။
သူ့ကြောကိုအတငျးဆှဲဖကျကာ အောကျကကော့ထိုး၊ မခြိတငျကဲ အလိုးခံနရေတော့တာပါပဲရှငျ။ ကိုကိုက နောကျပိုငျးကတြော့ အဆငျ့ပိုပိုတိုးလာတယျ။ ကြှနျမကို တဈခွားယောကျြားနဲ့ တဈခါလောကျ ခံဖူးခငျြလားတဲ့။ ကြှနျမ ဘာပွောကောငျးမလဲ လိုးနတေဲ့အခြိနျဆို သူ့ကိုပွနျပွောပဈခငျြတာ။ “အခုခကျြခငျြး အေးမို့ကို ဆှဲလိုးမယျ့သူရှိရငျချေါလာခဲ့၊ အလိုးခံပါ့မယျ” လို့ စိတျထဲကပဲ ကွိတျ‌ပွီးပွောနရေပါတယျ။ တကယျ့အပွငျမှာတော့ “မကောငျးပါဘူး ကိုကိုရယျ မသငျ့တျောပါဘူး” လို့ပဲ ပွနျပွောမိတယျ။ ကိုကိုက တဈခါပဲလေ တဲ့။ အထူးအဆနျးဖွဈအောငျ ဆကျဆံကွညျ့ပါ့လား လို့ ပွောတယျ။ “ကိုယျတို့အိမျထောငျရေးမထိခိုကျပါဘူး။ တဈခါ‌ပဲတှပွေီ့း နောကျတဈသကျလုံးမတှရေ့တော့မယျ့လူမြိုးဆိုရငျ မကောငျးဘူးလား” တဲ့။ အဲ့လိုကတြော့ ကမြစိတျဝငျစားသှားတယျ။ ပွီးမှ ကိုကိုက အေးမို့ကို မခဈြလို့လား ဆိုတော့ “ခဈြလို့အေးမို့လေး တဈသကျမှာ တဈခါလောကျအသဈအဆနျးကွုံဖူးအောငျ၊ အေးမို့ကို ‌နောကျပိုငျးထုတျသုံးလာမယျ့ နညျးလမျးတှအေတှကျ ကွိုပွီး မွစေမျးခရမျးပြိုးတာပါ” တဲ့။
သူမကျလုံးပေးနတောပါ။ ကြှနျမသိသားပဲ။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျမစိတျထဲကလညျး သူပွောသလို နောကျတဈယောကျက လုပျတာခံခငျြလာမိသလို နောကျပိုငျးသူထုတျသုံးလာမယျ့ ကာမနညျးပညာတှကေို မွနျမွနျပိုပွီး မြှျောလငျ့မိပါတော့တယျရှငျ။ အဲ့ဒီ့အခါမြိုးကတြော့ သူနဲ့ဆကျဆံနလေကျြသားကမြကိုယျလေး အသားကုနျယားတကျလာကာ ရှီးးးးကိုကိုရယျ မွနျမွနျလုပျပါလို့ အာ့ အားးရှီးးး ကောငျးလိုကျတာ ကိုကိုရယျ။ “အေးမို့” “ရှငျ ကိုကို” “ကိုကိုပွောတာ လကျခံလား” “အေးမို့စိတျထဲ ဇဝဇေဝါဖွဈနတေယျ ကိုကိုရယျ” “ဘာလို့လဲ။ အေးမို့ လုံးဝစိတျမဝငျစားလို့လား။ အေးမို့စိတျမပါရငျ ကိုကိုဘာမှမလုပျဘူးနျော။” “အဲ့လိုလညျး မဟုတျပါဘူးကိုကိုရယျ။ အေး‌မို့လေ။ အေးမို့ ဟို နညျးနညျး၊ နညျးနညျးတော့ စိတျပါပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အေးမို့ ကွောကျ ကွောကျနတေယျ ကိုကို။” “ကိုကိုသိပါတယျ အေးမို့ကွောကျနတေယျဆိုတာကို။ ဒါပမေယျ့ ဟိုရောကျရငျ အစစအရာရာ အဆငျပွသှေားမှာပါ။ ကိုကို စီစဉျတာ ဘယျနှဈခါ ဖွဈကတတျဆနျးလုပျလို့လဲ။” “ကိုကို့ကို အေးမို့ယုံပါတယျ။
ဒါပမေယျ့ ရငျထဲ တမြိုးကွီးပဲ ကိုကိုရယျ။ အားးကိုကို လုပျလုပျ လကျကမွနျမွနျလုပျပေး။ ” “အားးအအားးး ဟငျးဟငျး သှကျသှကျလေးကိုကို အေးမို့ ပွီးတော့မယျ။ နမျးမယျ နမျးခငျြတယျကိုကို အားးး ရှီးးး” ပလှတျ ပလှတျ ရှီး အအာအား ကိုကို့ လကျ လကျက မွနျ မွနျမွနျလေး လေး ရှီး အားးး “ကောငျးလိုကျတာကိုကိုရယျ။” စကားပွောနရေငျး အငွိမျမနတေတျတဲ့ ကိုကို့လကျကွောငျ့ အေးမို့ရဲ့ပိပိလေး အရညျတှေ ရှမျးရှမျးစိုပွီး ပွီးဆုံးခွငျးကို ရောကျခဲ့ရပွနျတယျ။ ………… “ဖွဈပါ့မလား ကိုကိုရယျ။ အေးမို့တော့ လနျ့တယျ ကြောခမျြးနသေလိုပဲ။ နောကျပွီး ဒီလူက ဒီမှျောဘီဘကျမှာ နတောဆို ဘယျလိုလုပျမလဲ။ ” “အေးမို့ရယျ။ အဲ့လူက စဈကိုငျးဘကျကပါ။ လကျဖကျရညျဆိုငျတဈခုမှာ ဒီလူ့ကို ကိုကိုမွငျဖူးပါတယျ။
နောကျပွီး လူပြိုကွီးပါ။ ကိုကို သခြောမှ စီစဉျတာ။ ” “အဲ့လူကရော ကိုကို့ကို သိလား။” “သူကတော့ မသိဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဒီလူ့ဖုနျးနံပါတျကိုစုံစမျးထားတာ။ သူ့အကွောငျးတှကေိုလညျး ကိုကို အကုနျသိပွီးသား။ ဖုနျးထဲမှာ ရငျးနှီးတယျ။ ကိုကို့ကိုသာ သူမသိတာ။ ” “အငျးပါ ကိုကို။ အခု ဒီအိမျက ဘယျလိုရလာတာလဲ။ ” “အလုပျကိစ်စရှိလို့ တဈလလောကျပဲနမှောဆိုပွီး ဈေးလေးနညျးနညျးပိုပေး ငှားထားတာပါ။ ဒါပွီးရငျ အေးမို့ကို ကိုကို ရှာပွနျလိုကျပို့မယျ။ နောကျတဈပတျလောကျနမှေ ကိုကို ဒီပွနျလာပွီး အလုပျကိစ်စ၊ တှစေ့ရာရှိတဲ့ လူတဈယောကျနဲ့တှမေ့ယျ။ လေးငါးရကျပါပဲ။ ဒီမှာ လုပျစရာတှပွေီးတာနဲ့ ရှာကို ပွနျလာခဲ့မယျ။
အခု ဘယျလိုလဲ အေးမို့။ ကိုကို သှားချေါရတော့မလား။ ” “အငျး ကိုကို။ ဟို ဟိုလေ မနကေ့တညျးက ဒီအိမျရောကျနတော။ ကိုကိုပွောသလို မလုပျခငျ ဒီ ဒီမှာ ကိုကိုနဲ့ အရငျ” “ဟားဟား ငါ့မိနျးမရယျ။ ခဈြစရာလေး။ ပွောနတောလေးက ကိုကို အသညျးတှေ ယားလာပွီ။ ” ပွှတျ ပွှတျ “အငျး ကိုကိုရယျ ကိုကို့နှုတျခမျးက ပိုခြိုလာသလိုပဲ။ အှနျ့အှနျး ရှီးးး ကိုကိုရေ ဘယျလိုလုပျနတောလဲ အားးး” ………… ကြှနျတေျာ့နာမညျ ညိုမငျးလှငျပါ။ ကြှနျတေျာ့အကွောငျးတော့ ခငျဗြားတို့ သိလောကျရောပေါ့။ ကြှနျတျော ကိုယျ့မယား သူမြားလိုးခွငျးကို စိတျဝငျစားတဲ့လူတဈယောကျဖွဈမှနျးလညျး ရိပျမိလောကျပွီ။ အိမျထောငျသကျကွာလာတော့လညျး ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အလုပျခံနရေတာမြိုး သသေခြောခြာကွညျ့ခငျြလာတယျဗြာ။
ဘေးနားကနေ အပွာကားကွညျ့သလိုမြိုး‌ပေါ့။ ပွီးတော့ မငျးသမီးနရောမှာက ကိုယျ့မိနျးမ၊ မငျးသားနရောမှာက သူစိမျးတဈယောကျ၊ ကြှနျတျောက ဇာတျကားကွညျ့တဲ့သူပေါ့။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမရဲ့ ကာမဆကျဆံအပွီး အဆိပျတကျနတေဲ့ပုံစံကို ကွညျ့နရေတာမြိုး ကြှနျတျောလိုလား လာတယျ။ ကြှနျတျောနဲ့လုပျနခြေိနျကြ ပှဲကွညျ့ပရိသတျတဈယောကျရဲ့ ခံစားမှုမြိုးမရဘူးလေ။ နောကျပွီးတော့ ကိုယျလုံးခငျြး အရမျးနီးကပျပူးနတေော့ ဘေးနားက လူတဈယောကျ ကွညျ့ရတဲ့ မွငျကှငျးလို အစစအရာရာ သခြောပိုငျနိုငျမှု မရှိဘူး။ မိနျးမကို တဈဖွညျးဖွညျးနဲ့ ကြုံးသှငျးလာခဲ့ရတာပါ။ နောကျပိုငျးကရြငျတော့ ကြှနျတျောလညျး ဒီကိစ်စတှပွေနျပွောနှိုးဆှရငျး သူနဲ့ နညျးမြိုးစုံ ဆကျဆံမယျလို့စိတျကူးထားတာပဲ။ တဈခါတလကြေ အေးမို့ကို ကြှနျတျော ပုံစံအစုံနဲ့လုပျခငျြပမေယျ့ စိတျကို မနညျးထိနျးထားရတယျ။ ကွာလာရငျ လငျမယားခငျြး ရိုးသှားမှာစိုးလို့ပါဗြာ။ တဈသကျလုံး သူနဲ့ ကာမအရသာကို မရိုးအီလှအောငျ ခံစားခငျြတာပါ။
ဒီနေ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ ဝတျထားတာလေးကလညျး တျောတျောလေးယဉျပွီး မကျြလုံးထဲ စှဲမကျဖှယျကောငျးနတောဗြာ။ အေးမို့က အသားဝငျးတယျ။ ဖွူတာလညျးမဟုတျ ညိုလညျးမညို အသားလတျလတျလေးနဲ့ ဝငျးနတောမြိုး။ အဝါခပျရငျ့ရငျ့ နနှငျးညိုရောငျ ခညျြသားဝမျးဆကျလေးနဲ့၊ ဆံပငျလေးတှကေို သိမျးစုစညျးပွီး အနောကျကို လြားခထြားတာ။ ဆံပငျလေးက ခါးအောကျပိုငျးလောကျရှိတာဆိုတော့ မွငျးမွှီးလေးကနြတောပဲ။ သူက နှာတံစငျးစငျး မကျြနှာသှယျသှယျ မကျြခုံးပါးပါး ရေးရေးလေးကို ပိုငျဆိုငျထားတာပါ။ မကျြဝနျးသှယျသှယျ နှုတျခမျးဖူးဖူး မေးခြှနျးခြှနျးလေးနဲ့ဆိုတော့ သူဝတျထားလေးနဲ့က တကယျကွညျ့လို့ကောငျးပါတယျ။ ခါးလေးက ကဉျြပွီး အနောကျကိုကော့နတော၊ သူ့အိုးလေးက ကားနတောမြိုးမဟုတျဘူး။ အိုးကွီးမြိုးလညျးမဟုတျဘူး။ တငျးတငျးပွညျ့ပွညျ့နဲ့ လုံးလုံးလေး။
အတှငျးခံလေးဝတျထားတာရယျ အပျေါက ထဘီကိုလညျး ကပျြကပျြလေး စညျးနှောငျထားတော့ အိုးလေးမှာ အစငျးကွောငျးနှဈခု ထငျးနရေုံဘယျကမလဲဗြာ အပျေါဗိုကျသား ခါးသားရညျကွိုးလေးကအစ ထငျးနတောပဲ။ အဲ့ဒီ့အပျေါ လကျသုံးလုံးလောကျအကှာကမြှ ထဘီလေးက အထကျဆငျအနကျလေး ရေးတေးတေးနဲ့ ခါးသိမျသိမျလေးထဲ နဈမွုပျဝငျနပွေီး တငျးတငျးကပျြကပျြစညျးနှောငျထားတော့ သူ့အတှငျးခံအောကျက အိုးလေးက လုံးတဈပွီး အတှငျးခံအရှယျအစားကအစ အကုနျလုံး ပုံစံအတိအကြ ပျေါနတောပဲဗြာ။ အထဲက အတှငျးခံဝမျးဆကျ မိုးပွာရောငျလေးဟာ ခပျရေးရေး မှိနျမှိနျလေးပျေါနတော တကယျ့ကို လိငျစိတျကွှဖှယျရာလေးပါ။ အဲ့ဒီ့အပျေါမှာ ခါးလေးက အပျေါကို ပွပွေလေေးတကျသှားတာ။
ကြောလယျညှပျရိုးအောကျနားလေးမှာလညျး သူ့ဘရာအရာလေးကို အကငြ်္ီကပျြကပျြလေးက ပုံဖျောထားတယျ။ နို့လေးကလညျး ဘရာအုံ အမာစားလေးအောကျမှာ လုံးဝနျးဝနျးလေးဆိုတော့ သူ့လကျမောငျးသှယျသှယျ ပေါငျတံစငျးစငျးလေးတှနေဲ့ တှဲဖကျမွငျရတာ သိပျကို အသညျးယားပွီး ကိုငျဆောငျ့ပဈခငျြစရာလေး ဖွဈနတောပါ။ ကြှနျတေျာ့မှာ စိတျကို မနညျးထိနျးထားနရေတယျ။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အေးမို့တော့ ခဏနရေငျ အပွငျလူတဈယောကျ လိုးတာခံရတော့မယျ။ ကြှနျတျောလညျး ဒီရကျပိုငျး သူ့ကို မဆကျဆံထားဘူး။ တဈပတျကြျောလောကျရှိမယျ ထငျတယျ။ နှုတျခမျးလောကျပဲ နမျးပွီး လကျခလယျနဲ့ ပွီးအောငျ ဆှပေးထားတာ။
အခု အပွငျထှကျပွီး ဟိုလူနဲ့ခြိနျးထားတာ သှားချေါမလို့ကို သူစိတျနညျးနညျးထနတောနဲ့ အသာလေး နှုတျခမျးဆှဲစုပျပွီး မခငျြ့မရဲဖွဈအောငျ လကျနဲ့ကလိထားခဲ့ရတယျ။ ဟိုလူကတော့ မှျောဘီဈေးရုံရှနေ့ားမှာ စောငျ့နတေယျလို့ ဖုနျးလှမျးဆကျပွောတာပဲ။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမနဲ့ လိုးမယျ့လူပေါ့ဗြာ။ ………… နှငျးမို့ ကိုကိုထှကျသှားတော့မှပဲ တဈယောကျတညျးပငျြးနတောနဲ့ ဒီအိမျအနအေထားကို လိုကျကွညျ့မိတယျ။ ဒီအိမျလေးက မှျောဘီဘကျမှာပါ။ ခွံကတော့ ကယျြကယျြဝနျးဝနျးလေးပါပဲ။ ပခွေောကျဆယျပတျလညျလောကျရှိတယျ။ တိုကျပုလေးတဈလုံးပဲ ဆောကျထားတာပါ။ ခွံက အုတျတံတိုငျးကာထားတာ အမွငျ့ခွောကျပလေောကျရှိမယျထငျတယျ။ အပျေါမှာ သံဆူးကွိုးခှတှေနေဲ့။ အိမျဘေးမှာ စိုကျခငျးလေးရှိတယျ။ ခရမျးခဉျြသီးတို့ ခဉျြပေါငျတို့ စိုကျပြိုးထားပါတယျ။ ခွရေငျးဘကျ ခွံစညျးရိုးနားမှာလညျး မာလကာပငျလေး နှဈပငျ၊ အနောကျဘကျထောငျ့မှာ သရကျပငျကွီးတဈပငျနဲ့ ဗူးစငျခပျကွီးကွီးတဈခုရှိ‌ပါတယျ။
အိမျရှမှေ့ာတော့ သပွပေငျ‌ခပျလတျလတျလေးတှရေယျ အလှစိုကျပနျးအိုးတှေ တှရေ့တယျ။ ဂမုနျးတို့၊ နှငျးဆီတို့၊ သဈခှပနျး လေးငါးမြိုးလောကျနဲ့ တကယျတော့ ဒီခွံလေးဟာ နခေငျြစဖှယျလေးပါ။ ကိုကိုက စိတျကူးသိပျကောငျးတာပဲ။ သူလညျး ဒီခွံနဲ့အိမျကို ငှားရတာ ဈေးကတော့ ‌တျောတျောပေးရမယျ ထငျတယျ။ ခွံလေးက သာယာအေးခမျြးသလောကျ ကြှနျမရငျထဲတော့ ဆူပူနတောပါပဲရှငျ။ တဈလှပျလှပျခံစားမှုမြိုးနဲ့ ရငျတှတေုနျလို့ ကြှနျမရဲ့ ပိပိလေးထဲမှာလညျး အရညျလေးတှကေ နညျးနညျး စိုတိုတိုနဲ့ ကြှနျမရငျထဲ ကာမဂုဏျမီးအပြိုးတှေ ဖှဲမီးလို တဈငှငှေ့လေ့ောငျမွိုကျနဆေဲပေါ့ရှငျ။
ခုနှဈနာရီထိုးကာနီးကတြော့ ကိုကိုနဲ့အတူ လူတဈယောကျပါလာတယျ။ အရပျပုပု အသားမညျးမညျးနဲ့ ရုပျက အညာသားရုပျလိုပဲ။ ကြှနျမရှကျနလေို့ သူ့မကျြနှာကို သခြောမကွညျ့ရဲခဲ့ပါဘူး။ တီရှပျအနကျရောငျနဲ့ ဘောငျးဘီကဂငျြးအပြော့သား အုတျခဲကြိုးအရောငျ ကှာတားဘောငျးဘီလိုမြိုး ဝတျထားတယျ။ သူ့ခွထေောကျမှာလညျး ခွသေလုံးမှေးတှကေ ထူလပဈြကွီး။ လူက ကိုယျလုံးတုတျတုတျ သနျသနျမာမာနဲ့ဆိုတော့ ကြှနျမစိတျထဲ ဒီလူက ခဏနရေငျ ငါ့ကိုလိုးမှာပါ့လား ဆိုတဲ့အတှေးဝငျလာတော့ ကြှနျမဒူးတှေ ညှတျခှကေခြငျြလာသလိုပဲ ကတုနျကယငျကွီးဖွဈနတေယျ။ ကြှနျမလေ ကြှနျမ. . . …….. ကြှနျတေျာ့မိနျးမကတော့ ရှကျနတေယျနဲ့တူပါတယျ။
ဟိုလူနဲ့ မကျြနှာခငျြးမဆိုငျဘူး။ သူအနောကျခနျးထဲဝငျနမေယျလို့ပွောနတောနဲ့ ရဲရဲတငျးတငျးဖွဈလာအောငျ ကြှနျတေျာ့ဘေးနားချေါထားပွီး စပဈြဝိုငျနညျးနညျး တိုကျထားရတယျ။ ဟိုလူကလညျး အဲ့ဒါကို အကဲခတျမိတယျနဲ့ တူပါတယျ။ မသိလိုကျ မသိဘာသာပဲနတောပါ။ စိတျထဲတော့ ဒီလူ မဆိုးပါဘူးလို့ အမှတျပေးမိတယျ။ တကယျတော့ ဒီလူနဲ့ ကြှနျတျော ဘီယာဆိုငျတဈခုမှာ သောကျစားရငျးနဲ့ ရငျးနှီးသှားတာပါ။ သူနဲ့အတူတူ အဲ့ဒီ့ညက သောကျစားပွီး စျောသှားခကြွတာ။ အဲ့‌ဒီ့နောကျပိုငျး ဖုနျးနံပါတျခငျြး လဲလာခဲ့တာ။ နောကျပိုငျး ဒီလူနဲ့ တဈခါနှဈခါလောကျ ထပျဆုံဖွဈပါတယျ။ ကြှနျတျောက အဲ့ဒီ့ဘကျကို တမငျစိတျပွလေကျပြောကျသှားလညျရငျး ရောကျခဲ့တာဆိုတော့ နောကျလညျး ကွုံစရာမလိုဘူးလေ။ တှစေ့ရာလညျး မလိုတော့ဘူးပေါ့။ ဒီကိစ်စပွီးရငျလညျး ဒီလူ့ဖုနျးနံပါတျကို ဘလော့ရုံပါပဲ။ ဒီလူက ရညျရညျမှနျမှနျနဲ့မို့ နညျးနညျးတော့စိတျခရြပါတယျ။
အဆငျပွလေောကျမယျထငျတာပဲ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရညျရညျမှနျမှနျနထေိုငျတဲ့ယောကျြားတှကေ ပိုထနျတတျတာမဟုတျလား။ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျလညျး ဒီလိုပဲလေ။ တကယျတမျးကြ မိုးလားကဲလား အပွောကွီးတဲ့ကောငျတှသော အဖွဈမရှိတာပါ။ ကြှနျတျော ဒါကိုကောငျးကောငျးသုံးသပျမိတယျ။ အဲ့ဒါကွောငျ့ ဒီလူ့ကိုချေါလာတာပါ။ ဒီလူကလညျး လူမှူရေးမညံ့ဖငျြးပါဘူး။ အရကျကောငျးကောငျး နှဈလုံးလကျဆောငျဝယျလာတယျ။ တနျဖိုးကတော့ မနညျးပါဘူး။ နောကျ ရမျတဈလုံးဝယျလာတယျ။ ဒီည ကြှနျတျောတို့သောကျဖို့တဲ့။ အဲ့ဒါနဲ့ပဲ အေးမို့အမွညျးလုပျနရေမှာစိုးရိမျတာကွောငျ့ လမျးမှာ စားသောကျဆိုငျတဈဆိုငျထဲဝငျ၊ အမွညျးလေးဘာလေးမှာရငျး နညျးနညျးကွာသှားတာ။ ဒီရောကျတော့ တဈခါတညျး တနျးသောကျရငျး စကားလေးဘာလေးပွောတော့ မိနျးမနဲ့သူနဲ့လညျး သကျတောငျ့သကျသာဖွဈသှား‌တာပေါ့ဗြာ။ အခုဆို မိနျးမက နညျးနညျးရှကျနတေော့ ကြှနျတေျာ့ဘေးနားမှာ ကြှနျတေျာ့လကျကိုကိုငျရငျး သူ့အတှကျထားပေးထားတဲ့ဝိုငျလေး နညျးနညျးပါးပါးသောကျရငျး ကြှနျတျောတို့စကားပွောတာကို နားထောငျနတေယျ။
ဟိုလူကလညျး အစက အိုးတို့အမျးတမျးဖွဈနပေမေယျ့ အခုတော့ သောကျရငျးစားရငျး စကားတော့ နညျးနညျးဖောငျဖှဲ့လာပါပွီ။ လူကတော့ နညျးနညျးအေးတယျဗြ။ “ကိုထှနျး၊ ခငျဗြားက အခုလူပြိုကွီး‌ဆိုတော့ အရငျတုနျးက ရညျးစားတှဘောတှတေော့ ထားဖူးမှာပေါ့” “ဟုတျ၊ ထားဖူးတာပေါ့ အကိုရာ။ အားလုံးပေါငျး လေးယောကျအထိကိုထားဖူးတယျ။” “ဟားဟား။ ပွောစမျးပါဦးဗြ။ ခငျဗြား ရညျးစားတှနေဲ့ အကွောငျးလေးတှေ” “ကြှနျတျော ပထမရညျးစားဦးနဲ့က ဘာမှ မဖွဈခဲ့ဘူးဗြ။ မဖွဈခဲ့ဘူး ဆိုတာက ဟိုကိစ်စကို ပွောတာပါ။ အဲ့ဒီ့တုနျးက လူကလညျး ငယျသေးတော့ သူကလညျးရညျးစားဦးဆိုတော့ အသညျးပေါကျမတတျ ဖူးဖူးမှုတျပေါ့ဗြာ။မထိရကျ မကိုငျရကျနဲ့။ အခုမြားကတြော့ အဲ့ဒီ့မိနျးကလေးလညျး ကလေးသုံးယောကျနဲ့ဗြို့။ အငယျလေးတောငျ လေးနှဈသားရှိနပွေီ”
“ဟားဟား။ ဟား တကယျပဲဗြာ။ အခုတော့ ခငျဗြားရညျးစားဦးက တဈခွားလူကို သှားမှုတျနတောပေါ့ ဟားဟား” “ဟား ဆိုပါတော့ဗြာ ဟီး” ဟိုလူက ခေါငျးကုတျ‌ပွီး ရယျကြဲကြဲ‌နဲ့ဆိုတော့ ဘေးနားက ကြှနျတေျာ့မိနျးမလညျး ခှိကနဲ အသံထှကျလာတယျ။ ကြှနျတျောလိုခငျြတာ ဒါမြိုးလေ။ “နောကျတဈယောကျ ကတြော့ရော ” “အငျးနောကျတဈယောကျကတြော့ ဂပြုမလေး။ ဝဝလေးပါ။ သူနဲ့တော့ ဖွဈခဲ့တယျ။ သူ့အိမျကလညျး အဲ့တုနျးက ပိုကျဆံရှိတော့ သဘောမတူတာနဲ့ ကှဲခဲ့ရပွနျပေါ့” “ရငျနာစရာလေးတှပေေါ့” “နောကျတဈယောကျကတြော့ဗြ၊ သူက စိတျကွီးတယျ။ တဈခုခုဆို အျောဟဈသောငျးကနျြးတတျတော့ ကွာတာနဲ့ ကြှနျတျောလညျး ဒဏျမခံနိုငျတော့ ထားခဲ့ရပွနျတာပဲ။ နှဈနှဈလောကျနဲ့တောငျ ဒဏျမခံနိုငျတာ။ တဈသကျလုံးဆို ကြှနျတေျာ့ဘဝ ခါးပွီပေါ့ဗြာ။
“အငျး ဟုတျပါတယျ ခငျဗြားပွောတာ” “လေးယောကျမွောကျရညျးစားကတော့ဗြာ” “အငျး ဘာဖွဈလဲ” “ထနျတာ ထနျတာဆိုတာ ကြှနျတေျာ့မှာ မနညျးဖွိုရတယျ။ သူနဲ့ကမြှပဲ ကြှနျတျောလညျး လုပျနညျးပေါငျးစုံ အကုနျစုံတော့တယျ။ သူ့ကွောငျ့ ဘယျမိနျးမမဆို မကွောကျဘဲနဲ့ တဈဝကွီးလုပျနိုငျတာဗြ။” ဒီစကားလညျး ကွားရော ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို ကွညျ့လိုကျတော့ မကျြလုံးလေးပွူးပွီး ကွကျသီးမှေးညှငျးလေးတှထေနတော အဖုလေးတှတေောငျမွငျရတယျ။ “ခငျဗြား သူနဲ့ ဘယျနှဈခါလောကျ လုပျဖူးခဲ့လဲ။” “တှဲခဲ့တဲ့သကျတမျးတဈလြှောကျ မှနျးခွေ အကွိမျ ခုနှဈဆယျထကျတော့ မနညျးလောကျဘူးထငျတာပဲ။
သူက ပိုကျဆံရှိတဲ့ ဗိုလျတဈယောကျနဲ့ညားသှားတာ။ အခုတော့ ကတျောဖွဈနပေါပွီ။” “ဟားဟား။ လောကကွီးက ဒီလိုပါပဲဗြာ။ ခငျဗြား အခဈြနဲ့ကာမကိုရော ဘယျလိုထငျလဲ။” “ကြှနျတေျာ့အထငျကတော့ဗြာ၊ အဲ မှားရငျလညျး မှားမှာပေါ့နျော။ ဒါပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့အတှကျကတြော့ မှနျပါတယျ။ ဒီလိုဗြ။ ကြှနျတျောက အခဈြဆိုတာတော့ မပွောခငျြဘူး။ သူဟာ အငျမတနျ နကျရှိုငျးဆနျးကွယျတယျ။ လူတဈဦးတဈယောကျခငျြးစီ တူညီလမေ့ရှိဘူး။ ဒီတော့ ကာမရှူ့ထောငျ့နဲ့ပဲ ပွောခငျြတယျ။ အခဈြပါသောကာမ နဲ့ အခဈြမပါသောကာမပေါ့ဗြာ။ အခဈြပါသောကာမဟာ ပိုခြိုမွိနျပွီး အဆုံးသတျလမေ့ရှိဘူး။ အခဈြမပါသောကာမဆိုတာက တုံ့ပွနျမှု အငျမတနျမွနျဆနျတယျ။
ခကျြခငျြး ဟုနျးကနဲ ထကွှဆူပူလာပွီး ကိစ်စပွီးသှားတာနဲ့တဈပွိုငျနကျ ပွနျအေးစကျသှားတာမြိုး။ ကြှနျတျော ဒီလောကျပဲ သိတယျ။” “ဟုတျပွီဗြာ။ ကြှနျတျော ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးပဲပွောမယျနျော ကိုထှနျး။” “ဟုတျ အကို ပွောပါ။” “ခငျဗြားအနနေဲ့ ဒီည ကြှနျတျောတို့စီစဉျထားတဲ့ကိစ်စကို အကုနျလုံး သဘောပေါကျပွီး‌ဖွဈမှာပါနျော။ကိုယျ့ကိုကိုယျ ယုံကွညျမှုရှိလား။” “ဟုတျ ရှိပါတယျ။ ခငျဗြားတို့ဘကျကလညျး အဆငျပွရေငျ အားလုံး သကျတောငျ့သကျသာပါပဲ။” “ဟုတျပွီ။ ဒီတဈခါ ကြှနျတေျာ့မိနျးမအလှညျ့။ ကဲ မိနျးမ ဘယျလိုလဲ။ ခဏတာ လကျခံနိုငျလား။” အေးမို့ကို မေးလိုကျခွငျးဖွဈသညျ။ “ဟုတျ။ ဟုတျ ကိုကို။ လကျ လကျခံနိုငျပါတယျ။ အဲ့ဒါဆိုရငျလညျး ကြှနျတျောတို့ သောကျတာလညျး အရှိနျနညျးနညျး ရနပွေီဆိုတော့ လူခငျြး နရောလဲလိုကျရအောငျဗြာ။ ကိုထှနျး ခငျဗြား ကြှနျတေျာ့နရောလာ။ ကြှနျတျော ခငျဗြားနရောကို လာမယျ။” “ဟုတျ ဟုတျ အကို။” ကြှနျတျောတို့ နရောခငျြး လဲလိုကျကွပါတယျ။
ကြှနျမ ဘေးနားကို ကိုထှနျးဆိုတဲ့လူ လာဝငျထိုငျပါတယျ။ သူတို့လညျး သောကျရငျးစားရငျး အရှိနျတကျနပွေီ‌ဆိုတော့ ပှငျ့ပှငျ့လငျးလငျးရှိလာကွပါပွီ။ ကြှနျမလညျး ဝိုငျတနျခိုးကွောငျ့ သှေးကွောတှေ နှေးထှေးလာပွီး သကျတောငျ့သကျသာတော့ ဖွဈလာခဲ့ပါပွီ။ ကိုထှနျးက ကြှနျမကို အမ အဆငျပွရေဲ့လားတဲ့။ “အငျးးး ” လို့ပဲ စကားတဈလုံးတညျး ပွနျဖွရေငျး ကြှနျမ သူ့ကို ပွုံးပွလိုကျလား မပွုံးလိုကျဘူးဆိုတာဇဝဇေဝါပါပဲရှငျ။ ခဏကွာတော့ သူက ကြှနျမလကျလေးကို လာကိုငျပါတယျ။ ကြှနျမလေ မကွောကျဘူးဆိုပမေယျ့ နညျးနညျးလေးတော့ တှနျ့သှားပါတယျ။ သူကတော့ ကြှနျမကိုကိုနဲ့ စကားပွောရငျး ‌သူတို့ပါလာတဲ့အရကျတှကေို ရခေဲတုံးလေးတဈတုံးစီထညျ့ရငျး အရသာခံသောကျနကွေပါတယျ။ သူ့လကျက ကြှနျမလကျကလေးကို မလှတျဘဲ ဆကျကိုငျထားတော့ ကြှနျမလေ ရငျတှေ တဈဒိနျးဒိနျးနဲ့။ သူ့အောကျကို အသာငုံ့ကွညျ့တော့ ဘောငျးဘီထဲက သူ့ဟာကွီးက ဖုထှကျနတေယျ။ ကြှနျမ ရအေရမျးငတျတာပဲရှငျ။ အာခေါငျတှေ ခွောကျလာသလိုပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ရှမှေ့ာရှိတဲ့ ဝိုငျတဈခှကျကိုပဲ အရသာခံအာရုံစိုကျလို့ အသာမော့လိုကျရပါတယျ။
ကြှနျတျောတို့ သောကျရငျးစားရငျးနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို ကိုထှနျးက လကျကိုငျလိုကျတော့ မိနျးမကိုယျလုံးလေး တဈခကျြတုနျသှားတာ သတိထားမိလိုကျတယျဗြ။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲ ဇာတျလမျးတော့ စပွီ ဆိုပွီး ခန်ဓာကိုယျထဲလညျး သှေးတှဆေူလာတယျ။ ကာမစိတျတှလေညျး နိုးကွှလာခဲ့တယျဗြာ။ အောကျက ငပဲကလညျး တငျးမာပွီး ခေါငျးထောငျထလာပွီ။ ဆကျသောကျရငျး စကားပွောရငျးနဲ့ ကိုထှနျးက ကြှနျတေျာ့မိနျးမမကျြနှာနားလေးကို တဈခကျြတိုးကပျသှားတယျ။ မိနျးမပါးလေးကို တဈခကျြနမျးလိုကျတာ တှရေ့တယျ။ မိနျးမက ခေါငျးလေးငုံ့ပွီး ပါးပွငျမှာ သှေးကွောလေးတှကေ ရဲကနဲပဲ။ သူ့ယောကျြားရဲ့အရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ သူစိမျးတဈယောကျက သူ့ကိုနမျးလိုကျတာဆိုတော့ ရှကျသှားလို့ထငျတယျ။
ခေါငျးလေးငုံ့သှားတယျ။ ကြှနျတေျာ့စိတျထဲလညျး ဒိနျးတလိနျးနတျဝငျပူးသလို အသံစုံမွညျဟီးပွီး ဗလောငျဆူကာ မိနျးမောတဲ့အရသာတဈမြိုးကို ခံစားနရေတယျဗြာ။ အားအငျတှေ ယုတျလြော့သှားတာလား ဖိနျးတိနျးရှိနျးတိနျးဖွဈသှားတာလားတော့ ကှဲကှဲပွားပွား မသိရပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမနဲ့ ကိုထှနျး နှဈယောကျသား ခရီးထပျဆကျ‌နိုငျဖို့ကို ကြှနျတျော ပိုလို့ မြှျောလငျ့နမေိတယျ။ ကုနျသှားတဲ့အရကျခှကျကို သသေခြောခြာထပျငှဲ့၊ ရခေဲတဈတုံးထပျစပျပွီး လကျတဈဖကျနဲ့ ခှကျကိုလှုပျရမျးရငျး အအေးဓါတျပြံ့နှံ့သှားအောငျ ‌ခလှောကျလိုကျပါတယျ။ စီးကရကျတဈလိပျထုတျ၊ မီးညှိရငျး ရှိုကျကာ မီးခိုးငှတှေ့ေ ဟူးက‌နဲ မှုတျထုတျရငျး အပျေါကို ခေါငျးပွနျမော့ကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အေးမို့ဟာ ကိုထှနျးရဲ့ရငျခှငျထဲမှာ ပြော့ခှနေုနျးကရြငျး ကိုထှနျးရဲ့နှုတျခမျးခငျြးနမျးစုပျမှုတှအေောကျမှာ လူးလှနျ့နတောကို တှလေို့ကျရပါတယျ။
တကယျ့ကို စိတျတှေ ထကွှစရာပါပဲ။ ကိုထှနျးဟာ အေးမို့ရဲ့နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးကို အားမနာလြှာမကြိုး ကြှနျတေျာ့ရှတေ့ညျ့တညျ့မှာ နမျးစုပျရငျး အေးမို့ရဲ့ခါးကိုဖကျကာ လကျတဈဖကျက အေးမို့ရဲ့တငျသားလုံးလုံးလေးကို ဖဈြညှဈနပေါတယျ။ အငျး ဟငျး ဟငျးးအှနျးး ဆိုတဲ့ အေးမို့ရဲ့ညညျးသံလေးတှရေယျ ပွှတျ ပွှတျ ပွှတျ ဆိုတဲ့ သူတို့နှဈယောကျနှုတျခမျးခငျြး ဆှဲစုပျယူနတေဲ့အသံလေးတှကွေောငျ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့လိငျစိတျတှေ တဈရိပျရိပျ အရှိနျထိုးတကျလို့လာပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့ အေးမို့လေးဟာ တဈပါးသူရဲ့လကျထဲမှာ ပြော့ခှပွေီး အရသာတှခေံစားနပေါတယျ။ စပျထားတဲ့ ရမျတဈခှကျကို တဈခကျြတညျးကြှနျတျောမော့သောကျခလြိုကျပွီး ပွနျကွညျ့လိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့အမွငျအာရုံတှဟော အရကျကွောငျ့လား၊ လိငျစိတျကွောငျ့လား၊ အေးမို့ရဲ့အရသာခံညညျးညူနတေဲ့ မွငျကှငျးကွောငျ့လား မသိ၊ တဈဖွေးဖွေး ရီဝမှေုနျမှိုငျးလို့လာပါတယျ။
အေးမို့ကို ဟိုလူက နို့အုံတှေ ညှဈနယျပေးနတော။ အေးမို့လေး လူးလှနျ့ပွီး ခပျသဲ့သဲ့ညညျးညူနတောပါပဲဗြာ။ ကာမစိတျတှေ တဈဟုနျထိုးတကျနတေဲ့ သူ့မကျြနှာလေးကို မွငျရတဲ့အရသာဟာ တကယျ့ကို သှေးသားဆူဝစေရာကွီးပါဗြာ။ ကွညျ့နရေငျးနဲ့ အားမရ‌လာတော့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ ဝငျပါလာခငျြစိတျတှေ တဈဖှားဖှားပျေါပေါကျလာပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဟိုလူအရှိနျပကျြပွီး တနျ့သှားမှာ စိုးရိမျလို့ အခွအေနကေို ငွိမျပွီးစောငျ့ရငျး ကိုယျ့စိတျကို မနညျးပွနျထိနျးနရေပါတယျ။ အှနျး အ အ ရှီးးး အေးမို့ရဲ့ထဘီကို မတငျကာ ထဘီအောကျထဲလကျနှိုကျပွီး ကိုထှနျးလကျက အေးမို့ရဲ့ အဖုတျကို နှိုကျကလိနတောဗြ။ အေးမို့ရဲ့ပေါငျတံစငျးစငျးလေးတှဟော တှနျ့လိမျလို့ ကိုထှနျးရဲ့လကျမဲကွီးက ကွားထဲဝငျကာ တဈလှုပျလှုပျနဲ့ အေးမို့ရဲ့ ခန်ဓာကိုယျလေး တဈသိမျ့သိမျ့တုနျပွီး သူ့လကျက ကိုထှနျးရဲ့လညျဂုတျကို ပွနျသိုငျးဖကျထားပါတယျ။
ပလှတျ ပလှတျ အငျ့ အား အား အှနျ့ဟှနျး အငျး ပွှတျ ဟငျး ဟားးး အပျေါမှာလညျး နှုတျခမျးတှေ တစေု့ပျရငျး အေးမို့ရဲ့ပါးစပျထဲ ကိုထှနျးလြှာကွီးက ထိုးသှငျးကလျောနတော နရောအနှံ့ပါပဲ။ အေးမို့ကလညျး အငမျးမရ ကိုထှနျးရဲ့လြှာကို ပွနျဆှဲစုပျရငျး တဈခကျြတဈခကျြ သူ့လြှာကို ပွနျထိုးပေးနပေါတယျ။ အောကျကလညျး ကိုထှနျးရဲ့လကျတှဟော ကြှနျတေျာ့မိနျးမအေးမို့ရဲ့ အဖုတျလေးထဲကို အသားကုနျထိုးဆှပှတျဆှဲ နှိုကျကလျောရငျး လကျမက တဈလှုပျလှုပျနဲ့ အစိလေးကို နှိုးဆှနသေလားမသိပါဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အောကျခံပနျတီဘောငျးဘီလေး ပေါငျလယျလောကျလြှောကပြွီး ပေါငျသားစငျးစငျးလေးတှကေ တဈလှုပျလှုပျနဲ့ ပနျတီမိုးပွာရောငျလေးရဲ့အလယျမှာ အရညျကှကျကလေးတှလေို့ကျရတယျ။ သူတို့ကတော့ ကြှနျတျောရှိတယျလို့တောငျ မထငျတော့ပါဘူး။
တဈရှူးရှူးအသကျရှုသံတှေ၊ တဈဟငျးဟငျးညညျးညူသံတှနေဲ့ တကယျ့လငျမယားတှလေို ထိုးနှိုကျဆှနမျးစုပျကွပွီး ကာမရယောဉျကွောထဲ အစုနျအဆနျမြောနကွေပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး သူတို့အသိစိတျပြောကျနတေုနျး အသာလေးလဈထှကျကာ ခွံထဲဆငျး၊ ခဉျြပေါငျပြိုးခငျးလေးဘေးနားက မွကှေကျလပျအလှတျလေးမှာ ဖြာတဈခပျြခငျး၊ စောငျနှဈထညျခငျးကာ ကြှနျတေျာ့မိနျးမအလိုးခံဖို့ စဈတလငျးကို ကြှနျတျောကိုယျတိုငျပွငျဆငျနရေပါတယျ။ ကိုယျ့မိနျးမကို သူမြားလိုးဖို့ ကိုယျကိုယျတိုငျ အိပျယာပွငျပေးရတာ အရသာကတဈမြိုးကွီးပဲဗြာ။ ညခမျြးခြိနျခါ လနေုအေးက တဈသော့သော့အပွေးနှငျလို့ လောကဓာတျခှငျ အေးခမျြးနပေမေယျ့ ဟော့ဒီ့ ကာမစဈတလငျးခွံလေးကတော့ အပူရှိနျတှေ တဈရိပျရိပျတကျနပေါတော့တယျ။
အိမျထဲကို ပွနျဝငျလာတော့ ကြှနျတျောမရှိတော့တာ သိသှားလို့ ပိုရဲတငျးသှားကွတယျနဲ့တူတယျ။ ကိုထှနျးဟာ ကွမျးပွငျပျေါ ဒူးထောကျဆငျးပွီး နှဈယောကျထိုငျ ဆကျတီပျေါမှာ မကျြစိမှိတျ ပေါငျကားထားတဲ့ အေးမို့ရဲ့ပေါငျခှကွားလေးထဲ သူ့မကျြနှာထိုးအပျရငျး အေးမို့ရဲ့အဖုတျကို သူ့လြှာကွီးနဲ့လြှကျကာ အဖုတျအခေါငျးလေးထဲ လကျနဲ့ထိုးဆှ၊ လြှာထိုးသှငျး ကလျောထုတျ၊ တဈရှုးရှုးနဲ့။ အေးမို့ရဲ့စောကျရညျလေးတှေ ရှဲလာရငျလညျး နှုတျခမျးသားတှကေို တစေု့ပျပွီး အားရပါးရ လြှာစှမျးပွနပေါတော့တယျ။ အေးမို့ဟာ အဲ့ဒီ့လူရဲ့ခေါငျးကို သူ့အဖုတျထဲ အသားကုနျဆှဲကပျရငျး ခါးလေးကော့ပြံကာ တဈအငျးအငျးတဈအားအား အသိစိတျလှတျညညျးညူးနပေါတယျ။
အအား အား ရှီး ပလှတျ ပွှတျ ဇူးးးးရှီးးး အားယားးအငျးးအှနျဟှနျး အှနျးးး အားးး အေးမို့ရယျ အစက သငျ့တျောပါ့မလားဆိုပွီးတော့ အခုကြ နငျ့အဖုတျကို ကိုထှနျးဆီကော့ပေးပွီး ဆှဲကပျထားတာ သူ့ခေါငျးတောငျ နငျ့စောကျခေါငျးထဲဝငျတော့မယျ အေးမို့ရယျ။ တဏှာတှေ ထနျပွီး အကောငျးကွီးကောငျးနတော။ နငျ့မကျြနှာကို ကွညျ့ရတာ မာနျဖီနတေဲ့ ကြားသဈမလေးလိုပဲ။ ခဏနရေငျ နငျတကယျအလိုးခံရတော့မှာပါ မပူပါနဲ့အေးမို့ရယျ။ ဟိုလူက နငျ့ကို တကယျလိုးမှာပါ။ အာ့အား ထှကျကုနျတော့မယျ။
ကို ကိုထှနျး အားးး ရှီးးးကောငျးလား အမလေး။ ကောငျး ကောငျးတယျ လုပျပါ လြှာနဲ့ အထဲကိုမှပေေး အား အာ့အို ရှီးးး တဈပွိုငျနကျတညျးမှာပဲ ကိုထှနျးက မတျတပျထရပျပွီး ဘောငျးဘီဇဈဆှဲ အောကျလြှောခကြာ သူ့လီးကို ဆှဲထုတျလိုကျပါတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဘကျကတော့ သူ့ကိုယျလုံးနဲ့ ကှယျနလေို့ မမွငျရပါဘူး။ ပွီးတော့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အေးမို့ရဲ့ ပါးစပျနားကိုထိုးပေးတယျ။ အေးမို့က “ဟငျ့အငျး ” တဲ့။ငွငျးတယျ။ “လုပျပါ ဘယျသူမှ မရှိပါဘူး။ အမယောကျြားမသိပါဘူး ခဏလေးပါ”တဲ့။ ကိုထှနျးက ပွနျပွောတာ။ အေးမို့က ပတျဝနျးကငျြကို တဈခကျြအကဲခတျတယျ။ ကြှနျတျောလညျး အိမျထဲမဝငျဘဲ တံခါးအကှယျက ခြောငျးကွညျ့နတောဆိုတော့ သူမမွငျရအောငျ အုတျနံရံနဲ့ ပွနျကှယျလိုကျတယျ။ စိတျထဲမှာ တဈဒိနျးဒိနျးနဲ့ ရငျတှေ ခုနျလိုကျတာ‌ဗြာ။
ခဏကွာတော့ ကြှနျတျောလညျး အဆငျပွလေောကျပွီအထငျနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမတို့ရှိရာကို ပွနျခြောငျးကွညျ့လိုကျတော့၊ ကြှနျတေျာ့မိနျးမအေးမို့ဗြာ၊ ဟိုလူ့လီးကို အသားကုနျဆှဲစုပျရငျး တဖွညျးဖွညျးနဲ့ သူပါးစပျအတှငျးထဲထိ မွှတေဈကောငျအစာမြိုသလိုကို ရှိုကျပွီးဆှဲစုပျနတောဗြာ။ ခေါငျးကရှေ့‌တိုးနောကျဆုတျနဲ့ တဈခကျြတဈခကျြ သူ့မကျြနှာက ဇကျကလေးစောငျးရငျး လညျလညျထှကျသှားတယျ။ အပွာဇာတျကားတှထေဲက မငျးသမီးတဈယောကျလို တကယျ့ကိုပိုငျပိုငျနိုငျနိုငျစုပျနတော။ သူဒါတှေ ဘယျလိုတတျနတောလဲ။ ငါလညျး တဈခါမှ မစုပျခိုငျးသေးပါဘူး။ ဟိုလူသငျပေးလိုကျလို့လား။ ဟိုလူသငျပေးရငျလညျး ခကျြခငျြးကွီး အခုလောကျ ကြှမျးကငျြပါ့မလား။ ဒါဆို ရှာမှာလငျငယျနတောလား။ မဖွဈနိုငျ။ ရှာနီးခြုပျစပျ ဆယျ့ငါးရှာလောကျကို ဩဇာတိက်ကမကွီးမားတဲ့ အသိုငျးအဝိုငျးတောငျ့တငျးလှနျးလှတဲ့ သူဌေးကွီးတဈယောကျသမီးကို ဘယျသူမှ လကျဖြားနဲ့တောငျ မထိတို့ရဲ။ ဒါ ဒါဆို သူကြောငျးသှားတကျတုနျးက ရညျးစားထားရငျး လုပျတတျလာတာပေါ့။
ငါနဲ့ယူတုနျးက အပြိုစဈလို့ သှေးတှထှေကျတာ တျောသေးတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ငါခှငျ့လှတျပါတယျ။ သူအပြိုရညျမပကျြဘဲ ငါနဲ့ညားတာကိုပဲ ကြေးဇူးတငျရမှာ။ နောကျဆိုရငျတော့ ငါလညျး သူ့ကို စုပျခိုငျးရမယျ။ အေးမို့ကလညျးလေ ဒီလောကျထိလီးစုပျကြှမျးတာ ကိုယျ့လငျကို မပွောဘဲ ငွိမျနရေတယျလို့။ ကွညျ့စမျးပါဦးအခုတော့ ဟိုလူကိုထှနျးရဲ့လီးကို အငမျးမရစုပျနလေိုကျတာ။ လကျကလညျး ကှငျးထုပေးရငျးနဲ့ ကာမဂုဏျ မာနျဟုနျထနလေိုကျတာ ရခေဲမုနျ့မစားဖူးတဲ့ အပြိုမလေးတဈယောကျ အားရပါးရစုပျယူလြှကျနသေလိုပဲ ဟိုလူ့လီးကို မကျမကျမောမော စုပျယူနလေိုကျတာ တျောတျောအားရနတေယျထငျတယျ။
လိုးစမျးကှာကိုထှနျး။ အဲ့လောကျ ငါးစမနျထနတေဲ့ မိနျးမကို မငျးလိုးနိုငျသလောကျ လိုးသှားစမျး။ ငါကွညျဖွူတယျ မနှမြောဘူး။ ပွီးမှ မငျးလိုးတာထကျ ခိုကျအောငျ ငါပွနျလိုးပွမယျ။ စောကျကလေးမလေး ကွညျ့စမျးပါဦး သူမြားလီးကို စုပျနလေိုကျတာ။ “ကိုထှနျးရေ ခွံထဲဆငျးမယျဟေ့။” “ဟုတျ ဟုတျ အကို။ လာပါပွီ။ ” ကြှနျတျောလညျး ခွံထဲကနေ လှမျးအျောသလို အသံပွုလိုကျတယျ။ သူတို့နှဈယောကျ ကပြာကယာထှကျလာပါတယျ။ ခွံထဲဆငျးဖို့ အိမျတံခါးဝက အထှကျ ကြှနျတျောနဲ့ အေးမို့မကျြနှာခငျြးဆိုငျတှတေ့ော့ သူခေါငျးလေးငုံ့ထားပါတယျ။
ကြှနျတေျာ့ဘေးနားကဖွတျအသှား ကိုယျနံ့သငျးသငျးလေးကို ရလိုကျတော့ ကြှနျတေျာ့ညီတျောမောငျမှာ တငျးကနဲပဲ။ သကျပွငျးတှေ ဆကျတိုကျခရြငျး အိမျထဲဝငျ အရကျထပျစပျ၊ တဈရှိနျထိုးမော့ခကြာ ကုလားထိုငျ တဈလုံးယူပွီး ခွံထဲကို ပွနျဆငျးလာခဲ့ပါတယျ။ ခွံထဲရောကျတော့ ကိုထှနျးဟာ ကြှနျတေျာ့မိနျးမအကငြ်္ီကို ခြှတျ ဘရာတှေ ပငျ့တငျပွီး မိနျးမရဲ့နို့အုံတှကေိုညှဈနယျကာ နို့သီးခေါငျးတှကေို သူ့လြှာနဲ့သိမျးလြှကျ တဈပွှတျပွှတျနဲ့စုပျနပေါတယျ။ အောကျကလညျး အေးမို့ရဲ့ ထဘီလေးကို လှနျတငျရငျး အဖုတျလေးကို သူ့လီးနဲ့ထောကျထားပါတယျ။လီးကတော့ ကှနျဒုံးစှပျထားတာ တှရေ့ပါတယျ။
အေးမို့ရဲ့အဖုတျလေးဟာ ပွောငျရှငျးခြောမှနေ့ပွေီး ကိုထှနျးရဲ့လီးကတော့ မဲနကျလို့ တုတျတုတျခဲခဲနဲ့အမှေးတှကေ အုံလိုကျကငျြးလိုကျ။ ကြှနျတေျာ့ထကျတော့ တဈလကျမလောကျ တိုမယျထငျတယျ။ ဘာပဲဖွဈဖွဈ ကြှနျတေျာ့မိနျးမ ကောငျးကောငျးအလိုးခံရဖို့က အရေးကွီးပါတယျ။ အငျး ဟငျးဟငျးးအိုး အာ့အားးး မိနျးမရဲ့ညညျးညူသံလေးဟာ အငျမတနျ နားဝငျပီယံရှိလှပါတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ကုလားထိုငျခကြာ ခဉျြပေါငျပြိုးခငျးနားက သူတို့ရဲ့ နှဈကိုယျတူလိုးကွမယျ့ မွငျကှငျးကို အားရပါးရ စောငျ့မြှျောရှု့စားနပေါတော့တယျ။
အို့ အို အားးးးကြှတျ ကြှတျ ရှီးးးးအရမျးလုပျတာပဲ အေးမို့က ကိုထှနျးရဲ့ရငျဘတျကို လကျသီးလေးဆုပျပွီးထုကာပွောသညျ။ ဟာ ဒီလူတော့ ငါ့မိနျးမကို စလိုးပွီနဲ့တူတယျ။ အေးမို့ကို ကွညျ့လိုကျတော့ ကိုထှနျးရဲ့ကြောကုနျးကို ဆှဲဖကျကာ အောကျကနေ ဟငျးဟငျး ဟငျးဟငျးနဲ့ နှာသံပေးညညျးညူရငျး ကိုထှနျးရဲ့လီးဒဏျကို ခံစားနရေရှာသညျ။ ကိုထှနျးကလညျး တဈဖွညျးဖွညျးခငျြးပွနျနှုတျ အသာလေး စီးစီးပိုငျပိုငျပွနျထိုးထညျ့ကာ မကျြလုံးမှေးစငျးလကျြ ခေါငျးမော့လကျြသားနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမရဲ့ စောကျဖုတျအရသာကို အဆိပျတကျနသေလို ခံစားနတေယျ။ အေးမို့ကိုကွညျ့ပွနျတော့လညျး ရှသှေ့ားတှစေိကာ နှုတျခမျးလေး ထျောထားရငျး ပါးပါးလလြ ညညျးညူးနတေယျ။
အငျး ငါ့မိနျးမတော့ ‌အလိုးခံရတာ ကောငျးနပွေီ။ ကိုထှနျးဖငျကွီးကလညျး မဲလို့ တငျပါးကွီးတဈလှုပျလှုပျနဲ့ ခါးကိုညှောငျ့ပွီးလိုးနတော ဂှေးဥကွီးနှဈလုံးက တှဲလဲကပြွီး အေးမို့ရဲ့ ပေါငျခှကွားကို တဈဖတျဖတျရိုကျခတျနတေယျ။ အေးမို့ရဲ့ဖွူဖွူဖှေးဖှေး ကိုယျလုံးလေးကို အပျေါကနေ သူ့ခန်ဓာကိုယျကွီး မဲမဲသဲသဲနဲ့ တကျလိုးနတောဟာ တျောတေျာ့ကို အားမနာလြှာမကြိုးနိုငျလှနျးတယျ။ ဟော ဟော အေးမို့ရဲ့ နို့တှကေို ဆှဲစို့ပွနျပွီ။ နို့သီးခေါငျးတှကေို လြှာနဲ့ထိုးပွီး ရှသှေ့ားနဲ့ကိုကျနတော ငါလိုးတဲ့မှပဲ။ ငါတောငျ ပွေးစို့ခငျြလာပွီ။ နယျနပွေီ။ နယျနပွေီဟ ငါ့မိနျးမရဲ့ နို့အုံဖှေးဖှေးလေးကို သူ့လကျကွမျးကွီးနဲ့ ဖိပွီးနယျဖတျနတောကှာ အေးမို့ကော့လူးနတောပဲ ခေါငျးလေးတောငျ ဘယျညာရမျးလို့။ တောကျ! ညဘကျလရောငျရှိတယျဆိုပမေယျ့ နဘေ့ကျလို သိပျပွီး‌လငျးလငျးခငျြးခငျြး မမွငျရတာ နာတယျကှာ။
အား ရှီးရှီးးး ဖောကျ ဖောကျ ဖတျ အငျ့ အငျ့ ကှိုကလွားးး အငျးးအာ ဘာတှပွေောနတောလဲ လုပျမှာဖွငျ့ မလုပျဘူးးအို နညျးနညျး ထပျမွနျပွီနျော ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျးးအငျးးအားးအဟာ့အာ ရှီးးး ကောငျးလားးး အမလေးးး အားးကောငျးတယျ ဆောငျ့ အငျ့ အငျ့ အောကျကပွနျကော့ပေးလေ အဲ့ဒါမှ အပျေါကလိုးတဲ့လူ အားရမှာ အငျး ဟုတျတယျ အဲ့လိုကော့ ရော့ အငျ့ အားးး အအားးအာ အို့ အငျး ဟငျး ဟငျးးး ပွီးတော့မလားး မပွီးနဲ့ဦးနျော လိုးလို့ကောငျးနတေုနျးးမငျးစောကျပတျက စီးပိုငျပွီး လိုးလို့ကောငျးတယျဟာ မပွီးနဲ့ဦးလေ ဟာ ကှာ ဒီလောကျဖွဈတာ ရော့ကှာ ရော့ကှာ ဖောငျး ဖွောငျး ဗွောငျးးရော့ အငျ့ အားးးးကြှတျ ကြှတျ အမလေးးး အားးအှနျး အှနျး အှနျး အှနျး အငျ့ အားးး ကြှနျတေျာ့မိနျးမပွီးသှားပွီနဲ့တူတယျ ဟိုလူက လိုးလို့ကောငျးနတေုနျး။
အေးမို့ကတော့ ကော့ပြံနတောပဲ။ ကိုထှနျးရဲ့အလိုကြ အောကျကနေ ပွနျကော့ပေးတာကို ဟိုလူကလညျး မာနျတှတေကျပွီး အေးမို့တဈခြီပွီးသှားတာတောငျ ဆကျတိုကျ လိုးနတော တဈဖွောငျးဖွောငျးနဲ့။ ငါ့မိနျးမ စကျဖုတျတော့ ဆုံထဲထညျ့ထောငျးခံနရေသလိုပဲကှာ။ လီးထဲမှပဲ။ တဈအားအားနဲ့ အကောငျးကွီးကောငျးပွီး လီးဒဏျခံနရေတာ။ အသိစိတျလှတျပွီး လုပျမိလုပျရာ လုပျတယျနဲ့တူပါတယျ၊ ကိုထှနျးကြောကုနျးကို လကျသညျးတှနေဲ့ ဆှဲကုပျထားတာ အစငျးရာကွီးတှေ ထငျးနတောပဲ သှေးတှတေောငျ စို့လို့။ ဟိုလူက အသား‌နာလေ မာနျတှတေငျးပွီး အသားကုနျစှတျလိုးမှာကို ငါ့မိနျးမ မသိဘူးလား။
အား အား အားးအိုး ဖွောငျး ဗွောငျး အငျ့ အား ဖတျဖတျ ဖတျဖတျ ဖောကျ ဗွောငျး အငျ့ အား အရှိနျတကျလာပွီ ‌ပွီးတော့မယျ။ အောကျက ကွိတျခံတော့ ရော့ အငျ့ အားးဆောငျ့ ဆောငျ့ အမလေးလေး ဆောငျ့ အား အား ဟိုလူက မိနျးမရဲ့လညျဂုတျကို သိုငျးဖကျပွီး တရစပျကို ဆကျတိုကျဆကျတိုကျဆောငျ့တော့တာ အေးမို့တော့ မရှု့မလှပဲ။ ပထမအခြီနဲ့တငျ မကျြဖွူလနျနပွေီ။ အခကျြ ခွောကျဆယျကြျောလောကျလဲ ထပျဆောငျ့ခအြပွီး ကိုထှနျးတဈယောကျ တှနျ့လိမျ့ပွီး ပွီးသှားတယျဗြာ။ အောကျက ‌ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အေးမို့ကတော့ တဈဇတျဇတျတုနျယငျနတော။
ဟိုလူက ပွနျဆှဲနှုတျပွီး ကှနျဒုံးကို ခြှတျတယျ။ ပွီးတာနဲ့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို ပေါငျပွနျဖွဲပွီး စောကျပတျကို မကျြနှာအပျ၊ တဈပကျြပကျြနဲ့ လြှာကိုပငျ့ကျောထိုးလြှကျတော့တာပဲဗြာ။ အမလေး လေ။ အားးအအားးရှီးးး ကြှတျ ကြှတျ ကြှတျ အာဟာအာ ရှီးးး မိနျးမခမြာ အောကျကခငျးထားတဲ့ စောငျတှကေို လကျနဲ့ကုပျဆှဲ တှနျ့လိမျပွီး ညညျးညူနတော။ တျောတေျာ့ကို ကွညျ့လို့ကောငျးတာပဲဗြာ။
ကြှနျတေျာ့မိနျးမက သိပျကို လိုးခငျြစရာကောငျးတာပါပဲလား။ ဟိုလူက အေးမို့ရဲ့ စောကျပတျက အရညျတှကေို အကုနျပွောငျစငျအောငျလြှကျပွီးမှ အေးမို့ပါးစပျပျေါ တကျခှပွီး နှုတျခမျးကို လီးနဲ့ထိုးတယျ။ အေးမို့က သူ့ဒဈကို လြှာနဲ့ဝိုကျပွီး လြှကျပေးနတေယျ‌ဗြာ။ ကွညျ့လို့ ကောငျးလိုကျတာ။ အေးမို့ရဲ့နှုတျခမျးဖူးဖူးလေးထဲကို အဖုတျကို လိုးသလို သူ့လီးတုတျတုတျခဲခဲနဲ့ လိုးနတေယျဗြာ။ ကဲ ကွညျ့တော့။ အဲ့ဒါပဲ။ မိနျးမဆိုတာ။ လ‌ရညျဝငျရငျ အသခေငျတယျတဲ့။ အမှနျပဲ။ အခုပဲ ကွညျ့လေ။ သူ့အဖုတျကို လိုးတာမှ မဟုတျတာ။ သူ့ပါးစပျကို ဟိုလူက တကျလိုးနတောလေ။ သူ့ရဲ့ထမငျးစားတဲ့ ပါးစပျကို လီးနဲ့တကျလိုးနတောဗြ။ ပါးစပျထဲမှာ မဆနျ့မပွဲ။ ဟိုမိနျးမကလညျး လကျဖြားလေးနဲ့သာ ကိုထှနျးပေါငျကို အသာလေး ဟနျဆောငျတှနျးထားတာ။ ဟိုလူ့လီးကို သူကွိုကျနတော အသိသာကွီး။ တဈအှတျအှတျနဲ့ မကျြရညျတှဝေဲပွီး ပြို့တကျလာတာတောငျ ဆကျအလိုးခံနတော။
တျောတျော နှာထနျတဲ့ မိနျးမဗြာ။ အစကတော့ ရိုးသလိုလို အေးသလိုလိုနဲ့။ အခုကြ အလိုးလညျး ခံရရော စောကျပတျတငျမဟုတျ ပါးစပျနဲ့ပါ အလိုးခံတာ။ တဈခကျြနှဈခကျြလညျးမဟုတျဘူး။ ဟိုလူက သူ့ပါးစပျကို လီးနဲ့လိုးတာ ဆယျမိနဈကြျောနပွေီ။ အဲ့ဒါကိုတောငျ မကျမကျမောမောနဲ့ အောကျကနေ နှုတျခမျးစုပွီး ထပျအလိုးခံနတေုနျး။ ဟိုလူက အသာလေး ဆှဲခြှတျတာတောငျ အခြှတျမခံပဲ ခေါငျးကွှပွီး လိုကျဆှဲစုပျနတော။ ဖလေိုးမ။ စောကျပတျတငျမဟုတျဘူး စောကျပါးစပျပါ ယားတဲ့ဟာမ။ သူစိမျးလိုးတာတောငျ သူ့လငျရှမှေ့ာ အလိုးခံတယျ။ ငါလိုးထဲမှပဲ ကွညျ့လို့ကောငျးလိုကျတာ။ လီးပဲ။ မငျးမစေကျပတျ။ လိုးကှာ လိုး။ အေး ဟုတျတယျ သူ့ခေါငျးကို ကိုငျပွီး လိုးး။ အေး ဟုတျတယျ ငါဖွဈစခေငျြတာ အဲ့လို ကိုငျထား ခေါငျးကို ကိုငျထား။ မလှတျနဲ့ လိုးးး ဆောငျ့လိုးခြ ဆောငျ့လိုးခြ။ ဟာကှာ ဆောငျ့လိုးခပြါဆို။
ဟလေူ့ တဈဆုံးထိ လိုးထညျ့လိုကျလေ။ အဲ့လောကျ အလိုးခံခငျြနတေဲ့ ပါးစပျပေါကျ။ လီးကွိုကျတဲ့ ကောငျမကို နောကျစကေ့ ထုပျခငျြးပေါကျ ပှဲခငျြးပွီးသသှေားအောငျ ဆောငျ့လိုးခြ။ အငျး ဟုတျတယျ လိုးစမျး ကြုပျမိနျးမ ငထနျမကို လိုးး။ ဟိုမသာမက တဈအှတျအှတျ တဈအငျးအငျးနဲ့ ကွညျ့စမျး အနိုငျမခံအရှူံးမပေး မာနျတငျးပွီး အသလှေေးတာ။ တောကျ!! ဟိုလူက စောကျသုံးမကလြိုကျတာ။ ဟလေူ့ လိုးဗြ။ အေး ဟုတျတယျ ကောငျးတယျ အဲ့လိုဆောငျ့ထိုး။ ကောငျမ။ မကျြနှာကို မဲ့ရှဲ့သှားတာပဲ။ ဟိုကောငျက လီးနဲ့ဆောငျ့ထိုးလိုကျတာ။ ဆီးခုံနဲ့ သူ့မကျြနှာနဲ့ ရိုကျတာတောငျ ဖောငျးကနဲပဲ။ အခုမှ ပါးစပျထဲက လီးပွနျခြှတျပွီး တဈအှတျအှတျနဲ့ ပွနျပြို့တကျပွီး ထထိုငျ အနျခငျြယောငျဆောငျနတေယျ။ ဖလေိုးမ နောကျဆုံးတဈခကျြတော့ မှတျသှားပွီ။ ကိုထှနျးရေ ခငျဗြား တျော‌တယျဗြို့။ ကွာတော့ ကြုပျ အားမရတော့ဘူးဗြာ။ ပါးစပျက “ဟလေူ့ ကိုထှနျး” “ဗြာ ” “ဒေါ့ဂီဆှဲဗြာ မရပျနဲ့။ ” “ဟုတျ ဟုတျ လုပျပွီ။ ဖွဈစရေမယျ” ဟိုလူက ကြုပျကို ပွနျပွောရငျး ‌ကှိုငျတဈခုထပျဖောကျပွီး သူ့လီးမှာ ထပျစှပျတယျ။ ပွီးတာနဲ့ အေးမို့ကို ဖငျဆှဲထောငျပွီး ခါးကို လကျနဲ့ အသာဖိခတြယျ။ အေးမို့က ဒူးထောကျပွီး ကုနျးကုနျးလေး။
ဟိုလူက အနောကျကနေ တဈခကျြတသှေ့ငျးပွီး ဆကျတိုကျလိုးတော့တာပဲ။ ဖွနျ ဖွနျး ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ဖွောငျး အငျ့ အငျ့ အှနျ့ အာ အာ့ အာ့ အာ အအားးးးဖောငျ ဖွောငျ့ အငျ့ အား ကွညျ့စမျးဗြာ။ ဟိုလူက အနောကျကနေ ဆကျတိုကျလိုးတာ။ အရှိနျရနပွေီ။ အေးမို့ရဲ့ ခါးကဉျြကဉျြလေးကို လကျနဲ့ဆှဲပွီး အသလေိုးနတော။ ဆကျတိုကျ တရစပျ။ အေးမို့ဖငျလေးကလညျး ဟိုလူ့ဆီးခုံနဲ့ရိုကျခတျတိုငျး လှိုငျးတှနျ့လေးတှထေသှားတာ ဖငျဖှေးဖှေးလေး ကွညျ့လို့ သိပျကောငျးတာပဲဗြာ။ ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး ဖောငျး အား အား ရှီးးအငျ့ အှနျ့ အှနျ့ အှနျ့ အှနျ့ အား အား ဖောငျး ဖွောငျး အငျ့ အားးး လိုးနတောဗြာ။ ဖာသညျမတဈယောကျကို ကွေးကွီးပေးထားရလို့ တနျအောငျ လိုးနသေလိုပဲ။ လိုးစမျး။
ခငျဗြား လိုးနိုငျသလောကျ လိုးစမျး။ ကြုပျမိနျးမ အကောငျးကွီးကောငျးနပွေီ။ ခငျဗြား လီးကို ကွိုကျနပွေီဗြ။ ခငျဗြား လိုးတာကို ကွိုကျနှဈသကျနပွေီ။ ဆောငျ့စမျးဗြာ စကျပတျကို အသားနီလနျအောငျ သာ လိုးပရေော့ ကိုယျ့လူရေ။ ဖောငျး ဖွောငျး ဖနျးဖနျး အငျ့ အား အငျဟငျ့ အားးး ဟိုလူလိုးနတော မိနှဈနှဈဆယျကြျောနပွေီ။ နှဈယောကျလုံးလညျး ခြှေးတှေ ရှဲနဈနတော။ ဟိုမိနျးမ မပွီးတာမဟုတျဘူး။ ပွီးရဲ့သားနဲ့ ဆကျပွီး အလိုးခံနတောနမှော။ တျောတျော ဟနျဆောငျကောငျးတဲ့မိနျးမ။ ဖောငျး အငျ့ ဖွောငျး အားးအိုး လိုး ဆောငျ့ ဆောငျ့ ဆောငျ့ အငျးးး ပာ အားးး နောကျထပျ ဆယျ့ငါးမိနဈလောကျကွာတော့ နှဈယောကျလုံး တဈဇတျဇတျတုနျပွီး ဝမျးလြားမှောကျ ထပျလကျြလဲကသြှားပါတယျ။ ဒီတဈခါတော့ နှဈယောကျသား မောဟိုကျပွီး စကားတောငျ မပွောနိုငျပါဘူး။ ခဏကွာတော့ နှဈယောကျသား ဖုတျဖကျခါပွီး ထလာတယျ။ ကြှနျတေျာ့နားရောကျတော့ အေးမို့က ခေါငျးငုံ့ထားတယျ။
ကြှနျတျောက “ကဲ ကိစ်စပွီးရငျ ခဏနား။ အမောလေးဘာလေး ဖွပွေီး ဆကျသောကျကွတာပေါ့ဗြာ။ “ဆိုတော့ “ဒါပေါ့ အကိုရာ” တဲ့။ ကိုထှနျးက ပွနျပွောတာ။ သူလညျး တျောတျော အားရသှားတော့ ကနြေပျနတေဲ့ပုံ။ ကြှနျတေျာ့တို့လညျး ဒီလိုနဲ့ အရကျဝိုငျး ထပျဆကျခဲ့ကွပါတယျ။ ခုနက သောကျထားတဲ့ အရှိနျတှလေညျး သူတို့လိုးပှဲကို ကွညျ့ရငျး အကုနျခြှေးစေးတှနေဲ့အတူ ပြောကျကုနျပွီ။ ကဲ လာ အိမျထဲ ပွနျဝငျကွမယျ။ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကတော့ ပေါငျလေးနညျးနညျး ကှနသေလိုပဲ။ ကြှနျတျောနဲ့ကိုထှနျးနဲ့ အရကျဝိုငျးမှာပွနျထိုငျတော့ ကိုထှနျးက နညျးနညျးကွမျးသှားလား အကို တဲ့။ ကြှနျတျောက ခငျဗြား ထပျကွမျးလို့ ရသေးလား ဆိုတော့ ဒီလူက ဟငျကနဲ တဈခကျြ ကွောငျသှားတယျ။ပွီးမှ နှဈယောကျသား ထရယျကွတာ တဈဟားဟားနဲ့။ ဟူး ရငျထဲပေါ့သှားတာပဲဗြာ။ ကွညျ့ခငျြတာ ကွညျ့လိုကျရတော့ ကနြေပျမိပါတယျ။
အေးမို့လေ ကိစ်စပွီးလို့ ဝိုငျးမှာ ပွနျထိုငျတော့ ကိုကို့ကို ရှကျလိုကျတာဆိုတာ ပွောမနပေါနဲ့တော့။ ကိုကိုက အေးမို့ရှကျနတော သိလို့နဲ့တူတယျ။ သူ့အနားချေါထားပွီး အေးမို့ရဲ့ ခါးလေးကို ပှဖေ့ကျထားတာ နှေးထှေးလှပါတယျ။ အေးမို့လေ ခုနက ကုနျဆုံးသှားတဲ့အားအငျတှဟော ကိုကို့ရဲ့ ကိုယျငှလေ့ေးတှကွေောငျ့ အားပွနျပွညျ့ဖွိုးလာသလို ခံစားရမိပါတယျ။ အေးမို့လညျး ကိုကို့ပါးကို ရှတျကနဲ နမျးလိုကျတော့ ကိုကိုက အေးမို့နှာဖူးလေးကို ဖှဖှလေးနမျးပွီး ဆံပငျလေးတှေ သပျတငျကာ သူ့ရငျခှငျထဲ ပွနျလညျ ဆှဲသှငျးထားပါတယျ။ အေးမို့ရဲ့ဘဝလေး ပွနျလညျ လုံခွုံသှားသလို ခံစားမိသလို ခုနက အသိစိတျလှတျသှားတဲ့ အဖွဈသနဈတှကွေောငျ့ အေးမို့လေ ကိုကို့အပျေါ အားတုံ့အားနာလညျး ဖွဈမိသလို နားလညျပေးနိုငျစှမျးကွီးမားတဲ့ ကိုကို့ကို ပို၍ပို၍ မွတျနိုးတှယျတာမိရပါတယျရှငျ။ အေးမို့လေ ပေါငျတှနောကငျြပွီး ပိပိလေးလညျး ကြိနျးနပေါပွီ။
ရငျဘတျက အေးမို့ရဲ့ နုနုနယျနယျ နို့အုံလေးလညျး နီရဲပွီး လကျယောငျလိုကျနပေါပွီ။ အဲ့ဒီ့လူကွီးပေါ့။ ကိုကိုနဲ့ပါလာတဲ့လူကွီးလေ။ ဟှနျး သူမြားမယားကို အားမနာလြှာမကြိုး လိုးတာ လိုးတာဆိုတာ အားနဲ့မာနျနဲ့ ပဈပဈဆောငျ့တာ။ အေးမို့ရငျထဲ နငျ့ကနဲပဲ။ ပွီးတော့ သူ့ဟာကွီးက ကိုကို့လောကျလညျး မရှညျပဲနဲ့ ခွောကျလကျမ မပွညျ့တပွညျ့ တုတျတုတျခဲခဲကွီး။ အေးမို့ရဲ့အဖုတျလေးထဲ တငျးနတော။ အေးမို့ ပွနျညှဈလို့တောငျမရဘူး။ တျောသေးတာပေါ့ အေးမို့ရဲ့ ကိုကိုက အရငျတုနျးက လိုးပေးနစေ ရှိနလေို့ အေးမို့အဖုတျမကှဲတာ။ တကယျပဲ။သူလိုးတာက လူကို မြော့နတောပဲ။
အေးမို့မှာ ဘယျနှခြီ ဘယျနှခါ ပွီးမှနျးတောငျ မသိဘူး။ ပထမတဈခါ သူအပျေါကနေ တကျလိုးတုနျးက အေးမို့ နှဈခါ တိတိပွီးတယျ။ နောကျ သူ အေးမို့ကို ဖငျကုနျးခိုငျးပွီး အနောကျက ဆောငျ့လိုးတာ။ အေးမို့လညျး မကျြလုံးတှေ ဝဝေါးပွီး အသိစိတျလှတျသှားတာနဲ့ ဘယျနှဈခါပွီးမှနျးကို မသိတော့တာ။အာကာသဟငျးလငျးပွငျ လဟောနယျထဲ လှငျ့မြောနသေလိုကွီး။ အေးမို့ရဲ့ကိုယျပျေါ သူ့ကိုယျလုံးကွီး အိကလြာပွီး တကျဖိထားမှ အေးမို့အသိစိတျပွနျဝငျလာတာ။ ကောငျးတာလညျး ဆိမျ့နတောပဲ။ ကိုကိုလိုးတာနဲ့ သူလိုးတာနဲ့ မတူဘူး။ ဒါပမေယျ့ သူလိုးတာလညျး ကောငျးသလို ဟိုးတုနျးက အေးမို့ကို ကိုကိုလိုးတုနျးကလညျး ကောငျးတာပဲ။ ကိုကိုလိုးတာက ခြိုအီအေးခမျြးသလိုခံစားရတယျ။ အဲ့ဒီ့လူ လိုးတာက‌ကတြော့ အရိုငျးဆနျတယျ။
သမနျးဝံပုလှတေဈကောငျလိုပဲ။ အေးမို့ကို မညှာမတာ တကျလိုးပဈတာ။ အေးမို့အသိစိတျပြောကျအောငျကို လိုးပဈတာ။ အဲ့ဒါကိုတောငျ ကိုကိုက ဘေးနားကနေ ကွညျ့နနေိုငျတယျနျော။ ကိုကို့ရှမှေ့ာ လိုးရတာ တမြိုးကွီးပဲ။ လိငျစိတျပိုကွှသလိုမြိုး ခံစားရတာ ဒူးတှပေါ မခိုငျခငျြတော့ဘူး။ အခုတော့ ကိုကို့ရငျခှငျထဲ မှိနျးနရေတာ သူတို့နှဈယောကျရဲ့ စကားပွောသံတှကေို ကွားတဈခကျြ မကွားတဈခကျြပဲ။ အေးမို့ အမောလညျးပွရေော ကိုကိုက သူသောကျနတေဲ့ အရကျခှကျကို အေးမို့ကို လာတိုကျတယျ။ တဈခါတညျး မော့သောကျလိုကျတဲ့။ အေးမို့လညျး ကိုကိုပေးတဲ့ခှကျကို ယူပွီး ဂလု ဂလုနဲ့ ဆကျတိုကျကို မော့သောကျပဈလိုကျတယျ။ အရသာက တဈမြိုးကွီးပဲ။ သှေးဆူသှားအောငျ နောကျတဈခှကျ ထပျမော့တဲ့။ ကိုကိုက လှမျးပေးပွနျတယျ။ အေးမို့က ယူပွီး သောကျတော့မယျလုပျမှ ခဏလေးဆိုပွီး အေးမို့ရဲ့ဖနျခှကျထဲ အမှုနျ့ ပနျးရောငျလေးတှေ ဖွူးခပြေးတယျ။
အနံ့ကတော့ သငျးသငျးလေး။ မှေးနတောပဲ။ အေးမို့လညျး ခှကျကို တဈရှိနျထိုး မော့သောကျခလြိုကျပါတော့တယျ။ ပွီးမှ ကိုကို့ရငျခှငျထဲ ပွနျမှိနျးနမေိတယျ။ ကိုကိုတို့ကတော့ စကားတဈပွောပွောနဲ့ ဟိုလူက ကြှနျမကို လုပျရတာ ဘယျလောကျကောငျးကွောငျး၊ အသားလေးတှကေ အိစကျနူးညံ့နကွေောငျး၊ အေးမို့ရဲ့အဖုတျအတှငျးသားလေးတှကေ သိပျကိုဆှဲဆောငျမှုရှိလို့ သူစိတျမထိနျးနိုငျပဲ အသားကုနျလြှကျမိကွောငျး၊ အေးမို့ရဲ့ စောကျဖုတျကို သူဘယျလောကျနှဈခွိုကျကွောငျး ကိုကို့ကို ပွောပွနပေါတယျ။
ကိုကိုကလညျး သူ့ကိုအားနာဖို့မလိုကွောငျး၊ ကွုံ တုနျး အားရအောငျ တဈဝလိုးသှားသငျ့ကွောငျး၊ အေးမို့သာ အလိုးခံရငျ ညလုံးပေါကျ မိုးလငျးတဲ့အထိ တရစပျလိုးနိုငျကွောငျး၊ သူလညျး ဘေးနားက ကွညျ့ရတာ အငျမတနျကွညျ့ကောငျးပွီး အေးမို့ကို ခကျြခငျြးထလိုးပဈခငျြကွောငျး၊ အေးမို့ လီးနှဈခြောငျးနဲ့သာ အလိုးခံရရငျ အငျမတနျပငျပနျးနှမျးနယျသှားမှာ စိုးရိမျမိကွောငျး၊ သူသာ ရတုံးရခိုကျ တဈသကျစှဲသှားအောငျ အေးမို့ကို လိုးပေးဖို့လိုအပျကွောငျး အစရှိသဖွငျ့ ပွောဆိုနကွေတာ အေးမို့လေ ရငျထဲကို ဗလောငျဆူပွီး စိတျတှေ ကွှလာသလိုလို မွူးလာသလိုလိုနဲ့ ခေါငျးထဲလညျး ရီဝပွေီး အားအငျတှေ ထကွှ သောငျးကနျြးလာပါတော့တယျ။
သူတို့ပွောတာကို နားထောငျရငျး ကွာတော့ အေးမို့ ဘယျလိုမှ မခံစားနိုငျတော့ဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အဖုတျလေးလညျး ကြိနျးပွီး ယားယံလာတာ အရညျတှလေညျးရှဲနလေို့ ပေါငျနှဈခြောငျးကို လိမျထားရတာ။အားးမရတော့ဘူး အေးမို့ ပေါကျကှဲထှကျခငျြနပွေီ။ “ရှငျတို့ ဒီတဈညလုံး စကားတှေ‌ပဲ ထိုငျပွောနမှောလား။” “အမျ ” “အှနျ၊ အေးမို့ ဘာ ဘာလို့လဲ။” “ဒီမှာ ဟိုလူ ရှငျ့နာမညျ ဘယျသူ။” “ကို ကိုထှနျးပါ မမလေး။ ” “ဟုတျပွီ ကိုထှနျး ရှငျဒီကိုလာတာ ဘာကိစ်စလဲ” “မမလေးနဲ့ ဟိုဟို” “လိုးဖို့မဟုတျလား။ သူမြားမိနျးမရဲ့ စောကျပတျကို နငျအငမျးမရလိုးခငျြလှနျးလို့ ငနျ့ငနျ့တကျ တဏှာစိတျကွှပွီး စဈကိုငျးကနေ ဒီမှျောဘီ အထိတောငျ လာလိုးတာမဟုတျလား။ ” “ဟို ဟိုလေ” “ဘာ ဟိုလေ လဲ။ ဒီမှာ ယောကျြားလုပျတဲ့သူကလညျး ကိုယျ့မိနျးမကိုယျနိုငျအောငျမလိုးဘဲ သူမြားကို တကူးတကချေါပွီး လိုးခိုငျးရတယျလို့။ စောကျဖွဈကိုမရှိဘူး။ လီးကရှညျသလောကျ စောကျသုံးတဈစကျမှ မကဘြူး။ ဒီမှာ ဟိုလူ။ ရှငျဘာလုပျမှာလဲ။ ရှငျပွနျမှာလား မပွနျဘူးလား။”
“ဗြာ။” “မ‌ဗြာနဲ့။ ရှငျမပွနျရငျ ရှငျ့လီးကြိုးအောငျ ကြှနျမဒီည လိုးပဈမယျ။ လာခဲ့စမျး။ ဖလေိုးမသားကွီး။ ငါစကျပကျကို လာလိုးတဲ့လူကွီး။ လာခဲ့စမျး။” ကြှနျမလညျး ပွောပွောဆိုဆို အျောဟဈသောငျးကနျြးရငျး အဲ့ဒီ့လူဆီသှားကာ အရကျသောကျနတေဲ့ သူ့ကို တှနျးလှဲပဈလိုကျတယျ။ ပွီးတာနဲ့ ပကျလကျလနျသှားတဲ့ သူ့မကျြနှာပျေါ ထဘီကိုလှနျပွီး တကျဖိထိုငျပဈမိတယျ။ ပွီးတာနဲ့ အတှငျးခံဘောငျးဘီတောငျ ခြှတျမနတေော့ဘဲ သူ့သောကျခှကျကို ကြှနျမစောကျပတျနဲ့တကျထိုငျပွီး ပှတျခပြဈလိုကျတယျ။ သူ့နှာခေါငျးနဲ့ ကြှနျမရဲ့အစိနဲ့ဖိကွိတျပှတျခမြေိတယျ။ ရငျထဲ နညျးနညျးပေါ့ထှကျသှားသလို ခံစားရမိတယျ။ တဈခါတလေ သူ့သှားတှနေဲ့ ကြှနျမ စောကျပတျနဲ့တောငျ ခုတျမိတယျ။ ကြှနျမလေ ခါးကို နှဲ့နှဲ့ပွီး တကျပှတျပဈတာ။ ကောငျးလညျးကောငျးတယျ။
ရှီးးး အဲ့လူကတော့ အောကျကနေ မှနျးလို့နဲ့တူတယျ၊ တအငျးအငျး တဈအူးအူးညညျးညူရငျး အတငျးကိုရုနျးကနျနတော။ သူ့ခေါငျးကို စုံကိုငျပွီးတော့ ကြှနျမ တကျပှတျပဈတာ။ သူမြားမိနျးမကို လိုးတဲ့လူစားမြိုးက အဲ့လို စောကျခှကျကို စောကျပတျနဲ့တကျပှတျပဈမှ တျောကာကတြာ။ ကိုကိုကတော့ “ကိုထှနျးရေ။ ငါ့မိနျးမတော့ ဆေးကွှနပွေီ။ မငျးထိနျးပွီး နိုငျအောငျ ကိုငျတော့ဟေ့” တဲ့ ။ သူလှမျးပွောတာ ကွားလိုကျရတယျ။ ကြှနျမကတော့ အကောငျးကွီးကောငျးနပွေီရှငျ။ ………… အေးမို့အရကျခှကျထဲမှာ ကြှနျတျော ဆေးစပျပေးလိုကျတာက ဟုတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ ဒီလောကျထိ သှေးကွှမယျမှနျး ကြှနျတျာမသိခဲ့ဘူး။ကြှနျတျောဆေးခပျလိုကျတာ တျောတျောကွီး လကျလှနျသှားတယျ။
သူရုတျတရကျကွီး ထသောငျးကနျြးတော့ ကြှနျတျောလညျး ကွောငျသှားတာ အမှနျပဲဗြာ။ ကြှနျတေျာ့ကိုလညျး တဈခါမှ လသေံခပျမာမာနဲ့တောငျ မပွောခဲဖူးတဲ့မိနျးမက အခုလိုရစရာမရှိအောငျပွောတော့ ကြှနျတျော တျောတျောလနျ့သှားတာ။ ကြှနျတျောတောငျ ဒီလောကျဖွဈနရေငျ ဟိုလူ့လိုမြိုး ဘေးသူစိမျးနရောက တှေးသာကွညျ့တော့ဗြာ။ ဘယျလောကျထိ ကွောငျစီစီနိုငျမလဲဆိုတာ။ ဒေါသထှကျရငျတောငျ ကြှနျတေျာ့ရှမေို့ ကြှနျတေျာ့မိနျးမကို ဘာမှလုပျလိျု့ရဘူးလေ။ အေးမို့ရဲ့ပေါငျခှကွားထဲမှာ ‌ပေါငျနှဈခြောငျးနဲ့ရော လကျတှနေဲ့ပါ မကျြနှာကိုအညှပျခံထားရပွီး အပျေါကလညျး ထဘီက အုပျနတေော့ မှနျးတာပေါ့ဗြာ။ တဈအူးအူးနဲ့ အသကျရှုမဝဖွဈနတော တျောသေး‌တယျ အေးမို့ခါးက အငွိမျမနဘေဲ မကျြနှာကို နှဲ့ပှတျပေးနလေို့ တဈခကျြတဈခကျြ အသကျခိုးရှူလို့ရနတော။
ကြှနျတျော‌တို့ သောကျနတေဲ့ အရကျဝိုငျးလညျး ရုတျတရကျကွီးဆိုသလို တဈမဟုတျခငျြး ကာမဝိုငျးအသှငျ ပွောငျးခဲ့ရပါတယျ။ အေးမို့ဟာ ဆယျမိနဈလောကျ သူအားရအောငျ ပှတျပွီး ကိုထှနျးရဲ့ ဘောငျးဘီကို ခကျြခငျြးဆှဲခြှတျကာ ကိုထှနျးရဲ့လီးကို ကြှနျတေျာ့ရှမှေ့ာပဲ အားမနာလြှာမကြိုး ရဲရဲတငျးတငျး မာနျဖီပွီး သတ်တဝါရိုငျးတဈကောငျလို ဆှဲစုပျပဈပါတော့တယျ။ ဟိုလူ့မကျြနှာ တဈအံ့တဈဩနဲ့ မကျြလုံးတှမှေိတျပွီး သူပေးဆပျခဲ့သမြှကို ပွနျဇိမျယူနတောဗြာ မကျြနှာကို ရှုံ့တှနတောပဲ။
ရှီးးး စီး စီးးးးအားပါးပါးးးပွငျးတယျ ဟ ဖွညျး ဖွညျးးးးး ရှီးးပလှတျ ပွှတျ အ ရှီးးမမလေး အ ဖွညျးဖွညျးးသှားနဲ့ ထိကုနျပွီ အာ မကိုကျနဲ့လေးးအာ့းးရှီး။ ပွှတျ စုပျ စုပျ မမလေး အားရအောငျသာစုပျ စုပျ ကြှနျတေျာ့လီးကို ကွိုကျလားးး စုပျ စုပျ ရှီးးး “နငျဘာစကားပွောတာလဲ။ ” ဝုနျးကနဲဆို အေးမို့က မတျတပျ ထရပျတယျ။ သူဒေါသထှကျသှားတယျနဲ့တူတယျ။ ဟိုလူလညျး ကွောငျအမျးအမျးဖွဈသှားတာလေ။ လိငျစိတျကွှအောငျ ပွောကာမှ သောကျပွဿနာထတကျမယျ့အဖွဈ။ မရတော့ဘူး။ ဒီအခွအေနကေိုထိနျးဖို့ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျဝငျပါမှ ဖွဈမယျဗြာ။ အရှကေ့ ကိုထှနျးကို မတျတပျရပျကာ ဒေါသတကွီး ရနျတှနေ့တေဲ့ အေးမို့ကို အနောကျကနေ လကျတှဖေမျးခြုပျလိုကျတယျ။ ပါးစပျကလညျး “ကိုထှနျး၊ မလြှော့နဲ့။ ဒီမိနျးမ ထနျနပွေီ။ မငျးကှိုငျစှပျတော့။ လုပျတော့ မွနျမွနျ။ ” ကြှနျတျောပွောတာကို ကိုထှနျး သဘောပေါကျပါတယျ။
ခကျြခငျြး ကှိုငျတဈထုပျ ဖောကျစှပျတယျ။ ပွီးတာနဲ့ အေးမို့ပေါငျခှကွားထဲကို ဝငျပွီး အောကျကနေ သူ့ဒဈနဲ့တဈခကျြထိုးပွီး ပငျ့ဆောငျ့တော့တာပဲ။ အေးမို့ကို လကျနောကျပွနျ မတျတပျရပျခြုပျထားတဲ့ ကြှနျတျောတောငျ ဟနျခကျြပကျြသှားတယျ။ အေးမို့အဖုတျထဲ လီးဝငျတာ ‌ဗွှတျ ဆိုရငျ အေးမို့ပါးစပျက အား ကနဲပဲ။ ကြှနျတျောလညျး အေးမို့ရဲ့လကျတှကေို ဂုတျပိုးပျေါဘယျညာယှကျပွီး ခြုပျထားလိုကျတယျ။ ကိုထှနျးက အေးမို့ရဲ့ခါး‌နှဈဖကျကို စုံကိုငျပွီး ပငျ့ဆောငျ့တာ ဇောငျ့ ဇောငျ့ ဇောငျ့ကနဲပဲ။ တျောတေျာ့ကို ကွညျ့လို့ကောငျးတာပါဗြာ။ ကျုယျ့မိနျးမကို သူမြားလိုးဖို့ ကိုယျကိုယျတိုငျ ခြုပျပေးထားပွီး ပေးလိုးရတဲ့အဖွဈရဲ့ ရငျခုနျစိတျလှုပျရှားမှုကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုငျဘူး။ “ကိုထှနျး မရပျနဲ့ အဲ့ဒီ့အတိုငျးသာ ဆကျတိုကျလုပျတော့။” ဇောငျ့ ဖောကျ ဖနျး ဖောငျးး အား ရှီး အအား အိုး ဆောငျ့ ဆောငျ့စမျး ဖောငျး အငျ့ ဖနျး ဖနျး ဗွောငျးးအားးခှေးသားနငျ့အာူ ဒါ အကုနျပဲလား။
နငျ့လီးက အဲ့လောကျပဲ သုံးရတာလား ဟတျလား ဖနျး ဖွောငျး ဖွောငျး ဗွောငျးးဗွောငျး ‌ဗွောငျးးးအား ဆောငျ့ လိုးလေ ဖလေိုး အားးး ဖလေိုးမသားရဲ့လိုးစမျး အားးး အေးမို့ဗြာ။ ဒီလောကျထိ လကျကိုအနောကျကခြုပျထားခံရပွီး အရှကေ့နေ ဆှဲလိုးခံနရေတာတောငျ လသေံတဈသံတောငျ မလြှော့ဘူး။ အသာကုနျကို ပွနျအျောဟဈပွီး ထပျလိုးဆောငျ့ခိုငျးနတော။ စဉျးစားကွညျ့ဗြာ ဒီလောကျထိ အလိုးခံနရေတာတောငျ သူက ပမာမခနျ့နဲ့ ပွနျစိနျချေါနတော။ ကြှနျတေျာ့မှာ အနောကျကနေ မနညျးထိနျးခြုပျထားရငျး ကိုထှနျး ပုံမှနျပဲလိုး ကွာရငျမြော့သှားမှာ ဒီအတိုငျးပဲလိုး ဆိုပွီး သတိလှမျးပေးထားရတယျ။
ကိုထှနျးကလညျး တျောတျောသဘောကောငျးပွီး သညျးခံစိတျရှိပါတယျ။ အဲ့ဒီ့အဲ့တိုငျးပဲ တဈဖနျးဖနျးနဲ့ ဆကျတိုကျဆောငျ့တာ မိနှဈနှဈဆယျလောကျလညျးကွာရော တဈအီးအီးနဲ့ ပွီးသှားတယျ။ အေးမို့ကတော့ အျောဟဈပွီး တဈဟငျးဟငျးနဲ့။ လူကွညျ့တော့လညျး မြော့နပွေီ။ မောဟိုကျတုနျရီနတေဲ့လသေံလေးနဲ့ “ရှငျ ဆကျမလိုးနိုငျတော့ဘူးလား။ လိုးမယျ လာ လုပျစမျး။ လာ ဒီမှာ ကြှနျမစောကျပတျကို လိုး၊ လုပျစမျးပါ လာ” ဟူး ဟူး အငျးးရှီးး“ကိုထှနျး ခငျ‌ဗြားရသေးလား။ ရရငျ ကှိုငျယူထပျစှပျပွီး ထပျလုပျဗြာ။” ကြှနျတေျာ့စကားလညျး ကွားရော ကိုထှနျးက သူ့လီးကို ကှငျးထပျတိုကျတယျ။
တျောတျောကွာကွာတိုကျလိုကျမှ ပွနျထလာတယျဗြာ။ ဒီလူလညျး စိတျလှုပျရှားနတော နမှောပေါ့။ ပွနျထလာတာနဲ့ ကြှနျတျောက အေးမို့ကို သူ့ဆီတှနျးလှတျလိုကျတယျ။ ကိုထှနျးက ဆီးပွီး ဖကျထားလိုကျတယျ။ အဲ့ဒါကိုတောငျ အေးမို့က ခကျြခငျြးပွနျရုနျးပွီး ရှငျ သတ်တိမရှိဘူးလား။ လာ ငါကုနျးပေးမယျ။ လာ လိုးစမျးးးဟငျး ဆိုပွီး ဆကျတီလကျတနျးကို လှမျးထောကျပွီး ခါးကုနျးပေးထားတာဗြာ။ သူ့ခါးကိုခှကျထားပွီး ဖငျကို ကော့ပေးထားတာ။ ကိုထှနျးလညျး အနောကျနေ ပဈဆောငျ့တော့တာပေါ့ဗြာ။ ကိုထှနျးပဈဆောငျ့‌လိုကျတိုငျး အသံစုံမွညျတမျးရငျး အရှကေို့ ဟတျထိုးလဲမလို ဖွဈဖွဈသှားတာ။ အေးမို့ရဲ့ အိုးလေးလညျးတုနျတုနျတကျသှားပွီး တဈဖနျးဖနျး ဆီးခုံနဲ့ရိုကျခတျသံ မွညျဟီးနတော။
အား အား အား ဖွောငျး ဖနျး ‌ဗွောငျး အငျ့ အား ဖောငျး ဖနျးးအားးဆောငျ့စမျးပါ ဆောငျ့ အီးဟီးဟီးဟီး ဆောငျ့ အားး အေးမို့ ပွောရငျး ပွောရငျးနဲ့ ငိုသံလေးတှပေါလာတယျဗြာ။ မကျြရညျတှေ ပေါကျပေါကျကလြာတော့ ကြှနျတျောလညျး စိတျမကောငျးဖွဈမိတယျ။ ဖောငျး ဖနျး ဖွောငျးးးဆိုတဲ့ ကိုထှနျးရဲ့ဆောငျ့သံတှလေညျး တဈဖွညျးဖွညျး အားပြော့ပြော့လာတယျ။ သူ့ကို လှမျးကွညျ့တော့ ကြှနျတေျာ့ လီး ကြိနျးစပျနပွေီ အကိုတဲ့။ အကို ဝငျပါတော့။ကြှနျတျော မရတော့ဘူး တဲ့၊ ကြှနျတေျာ့ကို လှမျးပွောတယျ။ ကြှနျတျောလညျး ထိတျလနျ့နတောတော့ ဝနျခံပါတယျ။မိနျးမကို စိုးရိမျနမေိတာပါ။ ဒီလောကျထိ အဆနျးတကွယျကွီး ကြှနျတျော မကွုံဖူးဘူးလဗြော။ ဟိုလူကလညျး ‌ဆကျတိုကျ ဆောငျ့လိုးနရေတာ ခုနှဈကွောငျး ရှဈကွောငျးလောကျရှိတော့ ကြိနျးနလေောကျပွီ။ အေးမို့ကတော့ ဆေးအရှိနျနဲ့ တငျးခံပွီး သှေးကွှနတေုနျးမို့ လူစိတျပြောကျနလေို့သာ ခံနိုငျတာ။
မနကျမိုးလငျးရငျတော့ တဈကိုယျလုံးရစရာမရှိအောငျ ခံစားနရေမှာ။ ကြှနျတျော သောကျထားတဲ့အရှိနျမြားသှားတာ‌ကွောငျ့လား၊ မနကျဖွနျအေးမို့ ဆေးပယျြခြိနျ မခံမရပျနိုငျအောငျ အောငျ့အီးနာကငျြရမှာကို စိုးရိမျလို့လားမသိဘူး ကြှနျတေျာ့ဟာကို ပွနျဆှပွီး စဈကူဝငျမလို့ဟာကို ထူးထူးဆနျးဆနျး ကြှနျတေျာ့ဟာက မထလာတော့ဘူးဗြာ။ကြှနျတျော ခြှေးစေးတှေ ပွနျလာတယျ။တျောတျောကွီးလကျညောငျးအောငျထုလိုကျမှ ထလာတယျ။ ကိုထှနျးကိုဖယျခိုငျးပွီး ကြှနျတျောဝငျလိုးတော့ ပွနျပြော့ခှသှေားတယျဗြာ။ ဟိုလူကလညျး မခံစားနိုငျတော့လောကျအောငျ ကြိနျးစပျနတော။ အေးမို့က ကြှနျတေျာ့ကို တှနျးလှဲတယျ။ ပွီးတာနဲ့ ကြှနျတေျာ့လီးကို အသားကုနျလာစုပျတယျ။
သူတျောတျောစုပျပွီးမှ ကြှနျတေျာ့ဟာ ထောငျလာတယျ။ အဲ့ဒီ့နောကျ အပျေါကနေ တကျခှပွီး ကြှနျတေျာ့ဟာကို သူ့အဖုတျထဲထိုးသှငျးရငျး ပါးစပျက သံစုံအျောဟဈကာ ဆောငျ့ပါတော့တယျ။ ဘယျလောကျထိကွမျးသလဲဆိုရငျ သူ့ရဲ့ မိနျးမကိုယျအဖုတျထဲက သှေးတှတေောငျ စီးကနြပေါပွီ။ အထဲက သားအိမျကို တဈခုခုထိခိုကျသှားတယျ ထငျပါတယျ။ သူကတော့ အသိစိတျပြောကျရငျး အျောဟဈသောငျးကနျြးကာ ကြှနျတေျာ့အပျေါကို တကျဆောငျ့နတေုနျး။ ကြှနျတျောလညျး သုံးလေးခြီပွီးပါပွီ။ ဒါကိုတောငျ မရပျမနား ထပျဆောငျ့နတေုနျး။ ကြှနျတျောပွီးသှားလို့ ညှိုးကသြှားတာနဲ့ ပွနျဆှဲစုပျတယျ။ ကြှနျတေျာ့ဟာမှာလညျး သူ့သားအိမျထဲက စီးကလြာတဲ့သှေးတှနေဲ့။ သူဆှဲစုပျတော့ သူ့ပါးစပျမှာလညျး သှေးတှရေဲနတောပဲ။ အရကျနှဈမြိုးရယျ ‌စိတျကွှဆေးမှုနျ့တှရေယျ ကာမဂုဏျလိငျစိတျတှရေယျ အကုနျရောထှေးသှားတဲ့အခါ အငျမတနျနုနယျတဲ့မိနျးမတဈယောကျ စိတျဖောကျပွနျသှားပွီထငျပါရဲ့။ ကြှနျတျောလညျး စိတျမကောငျးဖွဈနမေိတယျ။
ကိုထှနျးကတော့ ဘယျအခြိနျကတညျးက လဈထှကျသှားတယျမသိ။ အိမျထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ပွနျမာလာတဲ့ ကြှနျတေျာ့ဟာကို အပျေါမှာနငျးကနျဆောငျ့ခရြငျး အျောဟဈသောငျးကနျြးနတေဲ့ ကြှနျတေျာ့ဇနီးသညျလေးကို ကွညျ့ရငျး သကျပွငျးတှခေနြရေတယျ။ နာရီကိုကွညျ့တော့ လေးနာရီကြျောနပေါပွီ။ ဆေးအမွနျပယျြပါတော့။ မိုးမွနျမွနျလငျးပါတော့။ ကိုကို့ကို ခှငျ့လှတျပါ အေးမို့ရယျ။ နုနယျတဲ့မိနျးမတဈယောကျဟာ ကွမျးတမျးတဲ့လိငျအထိအတှနေဲ့မူးယဈဆေးတှရေဲ့ တိုကျစားမှုကွောငျ့ သတ်တဝါရိုငျးတဈကောငျ ဖွဈခဲ့ရပွီ။သားအိမျ‌အတှငျးသား သှေးကွောနံရံတှဟော လိုတာထကျပို ထိခိုကျပါမြားရငျ သှေးကွောပေါကျတာ နံရံပွိုတာတို့၊ သားအိမျခေါငျးကနေ သှေးတှစေီးကလြာတတျတယျ လို့တော့ ကွားဖူးနားဝရှိပါတယျ။
ဒါမှမဟုတျ အေးမို့ ရာသီလာတာလား။ သူခံစားနရေတာတော့ အမှနျပဲ။မနကျကရြငျ ဘယျလောကျထိ အောငျ့နေ နာကငျြနမေလဲ ကြှနျတျောလညျး ရရေရောရာမသိ။ ကွာလာတော့ ကြှနျတေျာ့ဟာလညျး မထောငျမတျနိုငျတော့ဘူးဗြာ။ သူ့ရဲ့မိနျးမကိုယျထဲက သှေးတှလေညျး အောကျမှာ ရှဲလို့။ သူ့ကိုယျလုံးလေးကို အားကုနျဖကျထားရငျး ကြှနျတျော ခြုပျထားလိုကျတယျ။အေးမို့က မိနျးမအားနဲ့ တှနျးထိုးရုနျးကနျပမေယျ့ ကြှနျတျောမလှတျပေးဘူး။ သူ့ပုံစံက ဆံပငျတှရှေုပျပှ၊ မိတျကပျတှပေကျြ၊ ခြှေးတှေ သှေးတှရှေဲနဈလို့ သူရူးတဈယောကျပမာ အျောဟဈနတေယျ။
သူတကယျ ရူးသှားပွီလား။ ဆေး အရှိနျပယျြပါတော့။ အေးမို့မွနျမွနျအိပျပြျောပါတော့။အခြိနျတှေ မွနျမွနျကုနျ မိုးမွနျမွနျလငျးပါတော့။ တကယျတော့ ကာမနှံလမျးအသှားဟာ တရားလှနျ မဆနျးပွားတာပဲ ကောငျးပါတယျ‌ဗြာ။ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးမှာ လိငျစိတျသောငျးကနျြးပွီး ဘေးဥပဒျဖွဈခဲ့တဲ့ ညတဈညကိုတော့ ကြှနျတျော မပြေ့ောကျနိုငျမယျ မထငျဘူး။ ကြှနျတေျာ့ရဲ့မိနျးမ အေးမို့ရောပဲပေါ့။ အေးမို့ကိုကြှနျတျော ဆေးခနျးတော့ ပွပေးရမှာပါ။ လိုအပျရငျလညျး ဆေးရုံတကျ၊ ဘယျလောကျကုနျကုနျဗြာ။ ကြှနျတျော စိတျမကောငျးဖွဈတာပဲသိတယျ။
ကြှနျတေျာ့မိနျးမ အသိစိတျလှတျနတောကို ကြှနျတျော မကွညျ့ရကျတော့ဘူးဗြာ။ ဆရာဝနျတှကေို ဘယျလိုမကျြနှာနဲ့ ပွောရပါ့မလဲဗြာ။ လိငျဆကျဆံရငျးနဲ့ ဒီလိုဖွဈပါတယျဆိုပွီး ဘယျလို သောကျရှကျနဲ့ ပွောရပါ့မလဲ။အေးမို့ရော မနကျမိုးလငျးရငျ ကြှနျတေျာ့မကျြနှာကို ဘယျလိုကွညျ့မလဲ။ ကြှနျတေျာ့ကို နာကညျြးသှားမှာလား။ သူ့အဖအေမအေိမျကိုပဲ ပွနျပွေး‌သှားမှာလား။ ကြျောမကောငျး ကွားမကောငျးတှတေော့ ဖွဈကုနျပါပွီဗြာ။ကြှနျတျောတို့နရောမှာ ခငျ‌ဗြားတို့ လငျမယားဆိုရငျရော ……… ပွီးပါပွီ။
ကျွန်မနာမည်က အေးမို့မို့။ ကျွန်မဟာ ဧရာဝတီတိုင်း ပုသိမ်ခရိုင်က ကျေးရွာလေးတစ်ခုမှာ နေထိုင်ပါတယ်။ အဖေအမေတို့က ဆန်စက်ထောင်ထားတဲ့သူတွေပါ။ ကျွန်မတို့ ဧရာဝတီတိုင်းဟာ တိုင်းပြည်ရဲ့ထမင်းအိုးဟင်းအိုးလို့တော့ လူတွေပြောတာ ကြားဖူးပါတယ်။ နေထိုင်သူအများစုက လယ်ယာစိုက်ပျိုးတယ်။ ငါးဖမ်းထွက်ကြတယ်။ ကန်တွေ အင်းတွေနဲ့ တစ်ခြားကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးတွေ လုပ်ကိုင်စားသောက်ကြတာပါ။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးမှာ ကိုယ်ပိုင်ရဟတ်ယာဉ် စစီးတာလည်း ကျွန်မတို့ ပုသိမ်ခရိုင်က သူဌေးကြီးတစ်ယောက်ပါပဲ။
အဖိုးရှိစဉ်အခါတုန်းက ‌ပြောပြတော့ ကြားဖူးတာပါ။ တကယ် ဟုတ်မဟုတ်ကတော့ ကျွန်မလည်း မမီလို့ မသိလိုက်ဘူးရှင်။ ဆန်စက်သူဌေးတစ်ယောက်ရဲ့ တစ်ဦးတည်းသောသမီးဘဝမှာ ကျွန်မလည်း တော်တော်ကြီးကို အလိုလိုက်ခံရပြီး၊ တစ်မျိုးလုံးမှာလည်း တစ်ဦးတည်းသော မိန်းကလေးမို့ ကျွန်မရဲ့ဝမ်းကွဲအကိုတွေမောင်တွေရဲ့ အသည်းကျော် အချစ်တုံးကြီး ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မဟာ ပညာရေးမှာတော့ ကံမပါပါဘူး။ကျွန်မ ဆယ်တန်းကို သုံးနှစ်ဖြေတာတောင် ကျလို့ နောက်ဆုံး စာမကျက်ချင်တော့တာနဲ့ ကျောင်းပညာရေးကို နားလိုက်ရတယ်။ မြို့မှာ ကျောင်းသွားတက်ပြီးသုံးနှစ်ကျ၊ နောက်ဆုံး ရွာပြန်ရောက်လာတော့ ကျွန်မအသက်က ဆယ့်ရှစ်ကျော်လို့ ဆယ့်ကိုးနှစ်တောင်ပြည့်ပါတော့မယ်။
မြို့မှာ အတန်းထဲက ကောင်လေးတွေနဲ့ ရည်းစားသနာထားခဲ့ဖူးပေမယ့် ရွာရောက်တော့ ကျွန်မဘယ်လိုမှ ရည်းစားထားလို့ မရတော့ပါဘူး။ ကျွန်‌မကို စာလိုက်ပေး ပန်းလိုက်ပေး၊ ရည်းစားစကားလိုက်ပြောတဲ့ ကာလသားတွေမှန်သမျှ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေရဲ့ ဝိုင်းဝန်းထိုးကြိတ်ခြင်းကို ခံရတာနဲ့ အုတ်အော်သောင်းတင်းတွေဖြစ်ကုန်လို့ နောက်ဆုံး ကျွန်မအဖေက ကျွန်မကို အိမ်ထောင်ချပေးမှပဲ အားလုံးငြိမ်ကုန်ကြတော့တယ်ရှင်။ ကျွန်မအိမ်ထောင်ကျတော့ ကျွန်မအသက်က နှစ်ဆယ့်တစ်နှစ်ပဲရှိပါသေးတယ်။ အဖေ့ရဲ့စီမံနေရာချထားပေးမှုအောက်မှာ အဖေနဲ့စီးပွားဖက် လယ်ပိုင်ရှင်ကြီးတစ်ယောက်ရဲ့သားနဲ့ ကျွန်မဖူးစာဆုံခဲ့ရပါတော့တယ်။ ကျွန်မယောက်ျားနာမည်က ကိုညိုမင်းလွင်တဲ့။ နာမည်ကသာ ညိုတာပါ။
လူကတော့ အသားဖြူပြီး အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင်ကောင်းကောင်းနဲ့ပါ။ ဘာကို သဘောကျလို့လဲတော့မသိဘူး၊ သူက ဆံပင်ကို အရှည်ကြီးထားတာမို့ ဆံပင်က ကျောလယ်လောက်နဲ့ဆိုတော့ ခါးအောက်ပိုင်းလောက်ရှိတဲ့ကျွန်မဆံပင်တွေလောက်နီးနီးကို ရှိပါတယ်။ လူက အရပ်ရှည်ရှည် ဒေါင်ကောင်းကောင်း၊ မျက်နှာသွယ်သွယ်၊ နှာတံကလည်း ဖြောင့်စင်းပြီး မျက်ခုံးထူထူနဲ့ဆိုတော့ သူ့ပုံစံနဲ့သူ ကြည့်ကောင်းပါတယ်ရှင်။ ထူးခြားတာက သူ့မျက်လုံးတွေ။ သူ့မျက်လုံးတွေက တကယ့်ကို တည်ငြိမ်ပြီး စူးရဲတယ်။ သိမ်းငှက်မျက်လုံးဆိုတာ ဒါမျိုးကို ပြောတာနေမှာပါ။ နားနှစ်ဖက်မှာလည်း စိန်နားတောင်းနဲ့၊ လူက နှုတ်ခမ်းမွေးစစနဲ့ဆိုတော့ အဖေက သူ့ကို မြန်မာ့ယောက်ျားကောင်းလို့ အသိအမှတ်ပြုပါတယ်။ ဘယ်အချိန်ကြည့်ကြည့် ရှပ်အင်္ကျီလက်ရှည်နဲ့ ပုဆိုးကို ညီနေအောင်‌ဝတ်ထားပြီး သပ်သပ်ရပ်ရပ်နေတတ်တယ်။ စကားပြောလည်း ပြတ်တယ်။ အလုပ်လုပ်ရင်လည်း တိကျပြီး လူကြီးမိဘပေါ်‌လည်း ရိုသေတော့ အဖေတို့အမေတို့က သိပ်ကိုသဘောကျကြပါတယ်။
သူတို့သဘောကျလို့လည်း ကျွန်မနဲ့ လက်ထပ်ပေးခဲ့တာ မဟုတ်လား။ ညားကာစကတော့ ကျွန်မက သူ့ကို ကိုညိုမင်းလွင်လို့ပဲခေါ်တာပါ။ နောက်ကြာလာတော့မှ လင်မယားသံယောဇဉ်ရယ်၊ ကျွန်မက ကိုယ့်ယောက်ျားကိုယ် ပြန်ကြွေနေခဲ့တာကြောင့် ကိုကို လို့ပဲ သူ့ကိုခေါ်ပြီး ‌အမြဲတမ်းချွဲနေရတော့တာပါပဲရှင်။ ကိုကိုဟာ ကျွန်မထက် ခြောက်နှစ်လောက်ကြီးပါတယ်။ ကျွန်မကို သိပ်အလိုလိုက်ပြီး ကျွန်မရဲ့ ဒုတိယဖခင်တစ်ယောက်လို ကျွန်မဆိုးသမျှ အနွံအတာလည်း ခံရှာပါတယ်။ ပညာအရည်အချင်းနဲ့ပက်သက်ရင်လည်း သင်္ချာအထူးပြုနဲ့ ကျောင်းပြီးထားတာပါ။ အဲ့လိုယောက်ဖမျိုးကျတော့ အမြဲတမ်းနီးပါး ထန်းရည်မူးအရက်မူးနေတဲ့ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေဟာ ရန်လုပ်ဖို့နေနေသာသာ သူ့ရှေ့ရောက်ရင် အပိုးကို ကျိုးလို့ပါပဲ။
အမြဲတမ်း ယောက်ဖ၊ ယောက်ဖနဲ့ သူ့တို့သောက်သမျှ အရက်ဖိုးအကြွေးတွေ လာလာဆပ်ခိုင်းတာ။ သူတို့ပိုက်ဆံပြတ်ရင် အိမ်ရောက်လာပြီး ယောက်ဖရေ ဘာညာနဲ့ မျက်နှာချိုသွေး။ ပြီးရင် ပိုက်ဆံချေးတော့တာပဲ။ တစ်ခါမှလည်း ပြန်မရပါဘူး။ ကိုကိုကသာ သဘောကောင်းပြီး တောင်းသမျှပေးနေတာ၊ ကျွန်မကတော့ စိတ်ကို တိုလိုက်တာဆိုတာ။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ကျွန်မကိုကိုက ပိုက်ဆံရှာဖွေနေတာ ကျွန်မအတွက်ပဲလေ။ သူတို့ အရက်သောက်ဖို့မှ မဟုတ်တာ။ ကိုကိုမရှိချိန် ရောက်လာရင် ကျွန်မက အော်လွတ်တာပဲ။ အဲ့ဒီ့ကျရင် “နင်က ငါ့ညီမဖြစ်ပြီးတော့ ငါ့ယောက်ဖလောက်တောင် ငါတို့ကိုမချစ်ဘူး၊ ငယ်ငယ်တုန်းက ငါတို့ ချီပိုးပြီးထိန်းခဲ့သမျှကို ကျေးဇူးကန်းတယ်” ဘာညာနဲ့ ဗျစ်တောက်ဗျစ်တောက်ပြောပြီး ပြန်သွားတာပဲ။
အင်း. . . သူ့ယောက်ဖပြန်ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ တန်းပြီးရောက်ချလာပါလိမ့်မယ် အဲ့ဒီ့မှာ။ ပြီးရင် ကိုကိုကလည်း တောင်းသမျှထုတ်ပေး၊ “အရမ်းကြီးတော့ မသောက်ပါနဲ့အကိုတို့ရာ” လို့တစ်ခွန်းတည်းပြောတာ။ အဲ့ဒီ့အချိန်ကျရင် သူတို့တွေက ” ငါသိပါတယ်ယောက်ဖကြီးရာ၊ အကိုကြီးတို့က နည်းနည်းပါးပါး ပျော်စေပျက်စေသောက်တာပါ။ ငါ့ယောက်ဖကြီးက အဲ့ဒါတွေ ချစ်ဖို့ကောင်းတာ။ ကိုကြီးတို့ကို စိတ်ပူပြီး အမြဲ မှာရှာတယ်။ ဟိုအငယ်မနဲ့များကွာပါ့။ အကိုတွေတစ်ခါတလေ လာလည်တာကို အော်လွတ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေတာ၊ ဟွန်း။ သွားတော့မယ် ယောက်ဖကြီးရေ။ တော်ကြာ ငါအကြာကြီးစကားပြောနေလို့ မကြည်ဘဲ ထလာပြီး ပွစိပွစိလုပ်နေပါဦးမယ်။ နောက်ကျမှ တို့ညီကိုတွေ အေးဆေးစကားပြောကြမယ်။
သွားပြီဟေ့ ယောက်ဖကြီး။ ငါ့ညီကြီးလည်း ကျန်းမာရေးလည်း ဂရုစိုက်ကွာ” ဆိုပြီး ပြောချင်ရာပြော၊ အရည်သောက်ဖို့ တန်းလစ်တော့တာ။ ကျွန်မကိုကိုက ကျန်းမာရေးကောင်းတယ်။ သူတို့သာ အဲ့ဒီ့အရည်တွေသောက်ပြီး အစောကြီးသေမှာ။ ကျွန်မလည်း ကိုကို့ကို အားနာရပါတယ်။ မျက်နှာတွေလည်း ပူပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အခါတိုင်း ကိုကိုက ကျွန်မနှာဖူးလေးကို နမ်းပြီး “အေးမို့လေးရယ်၊ ကိုကိုက ပိုက်ဆံလေး မုန့်ဖိုးပဲဖိုးလောက်ပဲ ပေးတာပါ။ ကိုကိုရှာသမျှက ဟော့ဒီ့က ကိုကို့မိန်းမ အေးမို့လေးအတွက်” ဆိုပြီး ကျွန်မကို ချော့မြှူကာ ကျွန်မနဲ့ ချစ်ရည်လူးတော့တာပဲရှင်။ ကျွန်မလည်း ကျွန်မနွဲ့ဆိုး ဆိုးသမျှ၊ ကျွန်မအကိုဝမ်းကွဲတွေ ညာလှိုင်းဖားလျားပြီး ဆိုးသမျှအတိုးကိုရော ကျွန်မရဲ့အချစ်တွေရော တိုးရင်းပေါင်းပြီး ကိုကို့ရဲ့အလိုကျ ကာမဆန္ဒဖြည့်ဆည်းပေးရပါတော့တယ်ရှင်။ ကိုကို့မှာ အတန်းပညာရေးအပြင် နောက်ထပ် အထူးပြု ကျွမ်းကျင်တာ တစ်ခုရှိပါသေးတယ်။ အဲ့ဒါက ကာမသျှတ္တရပညာ တဲ့။
ရှီးးးးအအာ ကိုကို့ ဟင်းးး အို ကိုကိုရေ အားးး‌ ကောင်းလား ‌မိန်းမ။ အင်း ကောင်းတယ်ကို ဆောင့်။ ကိုကိုနဲ့ကျွန်မ ညဘက်မအိပ်ခင်၊ ခြင်ထောင်ထဲမှာ ဆက်ဆံနေခြင်းဖြစ်သည်။ ကိုကို့ရဲ့ ခုနှစ်လက်မလောက်ရှိတဲ့ လိင်တံကြီးက ကျွန်မရဲ့ အင်္ဂါစပ်ထဲမှာ ဝါးလျားရှည်တစ်လုံးနဲ့ထိုးသွင်းထားသလိုပဲ။ ကျွန်မလည်း ကိုကို့ဟာကြီးကို ခံနိုင်ရည်ရှိနေပါပြီ။ ညားခါစက တစ်ဆုံးထိ မခံနိုင်ဘူး။ အသားကုန် အော်ဟစ်ညည်းညူရင်း သူ့ကို အသနားခံရတာ။ ကိုကိုလည်း ကျွန်မကို သနားလို့နဲ့တူပါတယ်။ တစ်ဝက်လောက် မရှိတရှိလေးပဲထိုးသွင်းရင်း ကျွန်မကို သာသာလေးဆက်ဆံပေးရရှာတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက်ပိုင်း အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတာနဲ့အမျှ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကိုကို့ရဲ့ဟာကြီးကို တစ်နှစ်လောက် အကြာမှာ ခံနိုင်ရည်ရှိလာခဲ့တယ်။
ဒါပေမယ့် ကိုကိုက ကျွန်မနဲ့အခု အိမ်ထောင်သက် လေးနှစ်ကျော်တဲ့အထိ၊ ကျွန်မကို ဖြေးဖြေးပဲလိုးပေးပါတယ်။ တစ်ကိုယ်လုံးကို ကြင်ကြင်နာနာနမ်းရှုံ့ရင်း တစ်အိအိနဲ့လိုးပေးတာမျိုးကို ကျွန်မတစ်ကယ်ကို ကြိုက်နှစ်သက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း ကြာလာတော့ ကျွန်မလည်း တစ်ခြားပုံစံမျိုးနဲ့ခံစားချင်လာတယ်။ ကိုကိုကတော့ ကျွန်မကို ပြောပါတယ်။ သူက နည်းမျိုးစုံနဲ့လုပ်တတ်တယ်တဲ့။ မြို့ပေါ်တက်၊ ရန်ကုန်တက်၊ နယ်တွေခရီးသွားရင် သူ့စီးပွားဖက်တွေနဲ့ကိုကိုဟာ သောက်တတ်စားတတ်ပြီး မိန်းမတွေလိုက်စားပါတယ်။ ရွာပြန်ရောက်ရင်တော့ မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်ထားပြီး ကျွန်မကို ချစ်ချစ်ခင်ခင်ကြင်ကြင်နာနာ ပြန်နေပေးပါတယ်။
ကျွန်မကိုပြောတာတော့ သူ့ရဲ့တင်းနေတဲ့ကာမစိတ်ကို ဖြေလျော့တာပါ၊ ချစ်တာက ညီမကိုပဲချစ်တာတဲ့။ တစ်သက်လုံးရိုးမြေကျပေါင်းသင်းသွားမှာပါ၊ အဲ့ဒီ့ဟာတွေက တစ်ခဏပဲ၊ ပြီးတာနဲ့ ခေါင်းထဲကရှင်းထုတ်လိုက်ပြီး ဘာမှ ပက်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိတော့ပါဘူးတဲ့။ ကျွန်မနဲ့အိမ်ထောင်ရေးကို လုံးဝအစွန်းထင်းမခံဘူးတဲ့။ ကျွန်မတို့အိမ်ထောင်ရေးလည်း ဒီလိုနဲ့ နားလည်မှုရှိရှိ ရှေ့ဆက်ခဲ့ကြပါတယ်။ တစ်ခါတစ်ခါ ကိုကို့ကို အပြင်က ကောင်မတွေနဲ့ဆက်ဆံတာ အလိုမကျစိတ်ဖြစ်မိပေမယ့် သူပြန်ရောက်လာရင် အိပ်ယာထဲမှာ ကျွန်မကို ပွတ်သပ်နှိုးဆွရင်း သူနည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့ဆက်ဆံလာခဲ့တဲ့မိန်းမတွေအကြောင်း ပြန်ပြောပြတော့ ကျွန်မလေ ကိုကိုလိုးတာခံချင်တဲ့စိတ်တွေ ထကြွသောင်းကျန်းလာတာ ထိန်းမနိုင်သိမ်းမရပါပဲ။
ကျွန်မက ကိုကိုရယ် အေးမို့မနေနိုင်တော့ပါဘူး လိုးပေးပါတော့ လို့တောင်းဆိုမှ ကျွန်မကို သူ့ဟာရှည်ရှည်ကြီးနဲ့ တစ်အိအိလိုးပေးပါတော့တယ်။ အရသာ သိပ်ကိုထူးတာပါပဲရှင်။ အိမ်ထောင်စကျကတည်းက အခုချိန်အထိ ပုံမှန်နည်းရိုးကြီးနဲ့ပဲ မှောက်ခုံလုပ်လေ့ရှိပြီး တစ်ခါမှ တစ်ခါတည်းသာ ကျွန်မတောင်းဆိုလွန်းလို နည်းလမ်းအသစ်နဲ့ တစ်ပေါင်ကျော် တစ်ခါလိုးပေးဖူးပါတယ်။ အဲ့ဒီ့တုန်းကဆိုရင်လေ ကျွန်မမှာ ကောင်းလိုက်တာမှ အရည်တွေကို အိုင်ထွန်းပြီး၊ ပြီးသွားတာတောင် ငါးမိနစ်လောက် တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ယင်ပြီး အရသာခံစားနေရတဲ့အထိကို ကောင်းတာရှင်။ နောက်ကျတော့ ကျွန်မတောင်းဆိုပါသေးတယ်။
ကိုကိုက အဲ့လို လိုးမပေးဘူး။ အဲ့ဒီ့အခါကျရင် ကျွန်မက စိတ်ကောက်တော့တာပဲ။ ဟုတ်တယ်လေ။ အပြင်ကဟာမတွေနဲ့ကျ နည်းလမ်းမျိုးစုံအကွက်မျိုးစုံနဲ့အားရအောင်လိုးပြီး အိမ်ကအတိအလင်းယူထားတဲ့မိန်းမကျတော့ အကွက်စုံထုတ်ဖို့နေနေသာသာ တစ်ပေါင်ကျော်တောင် တစ်ခါပဲလိုးပေးရတယ်လို့၊ စိတ်တိုစရာကောင်းလိုက်တာ။ ဒီလိုအခါမျိုးကျရင်တော့ ကိုကိုက သေသေချာချာဖြေရှင်းတတ်ပါတယ်။ “အေးမို့ရယ်၊ ကိုကိုတို့က ခဏတာတွေ့ပြီး ကာမဆက်ဆံတာမှ မဟုတ်တာ။ တစ်သက်လုံးအတူနေသွားရမယ့် လင်မယားတွေလေ” တဲ့။ “နည်းမျိုးစုံနဲ့ဆက်ဆံပေးလို့ လေးငါးခြောက်နှစ်နဲ့ အကုန်စုံပြီးရိုးသွားရင် ကြာလာတဲ့အခါ ကာမစိတ်ခမ်းပြီး နောက်ပိုင်းသိပ်မလုပ်ချင်ဖြစ်သွားတတ်တော့ အိမ်ထောင်ရေးကို တစ်ထောင့်တစ်နေရာက အဖုအထစ်ဖြစ်စေတယ်”တဲ့လေ။ “အိမ်ထောင်သက် ကြာလာတာနဲ့အမျှ တစ်မျိုးတစ်မျိုး တိုးကာပေါင်းစပ်ရင်း အေးမို့ကို တစ်သက်လုံးမရိုးအောင် စွဲစွဲမြဲမြဲလိုးပေးချင်တာပါ။
အဲ့ဒီ့အခါကျရင် သူလည်း တစ်ခြားဟာမတွေနဲ့ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အပြင်ရောက်‌ရင်လည်း အသောက်အစား တစ်ခါ‌တလေတောင်မလုပ်ဘဲ ကျန်းမာရေးလိုက်စားပြီး အေးမို့ကို အတိုးချလိုးပေးပါ့မယ်”တဲ့။ ကျွန်မလေ ကျေနပ်လိုက်တာ။ ကိုကိုက သိပ်ကို အမျှော်အမြင်ကြီးတာပဲရှင်။ လုပ်နည်းပေါင်းစုံကျွမ်းကျင်ပါလျက်နဲ့ ကျွန်မကို အသက်ငယ်တုန်း စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပဲ နှိုးဆွပေးမယ်တဲ့။ နောက်ပိုင်း မရတော့မှ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်တွေနဲ့ တစ်ဖန်ပြန်လည်နှိုးဆွပြီး တစ်သက်မရိုးအောင် ထပ်လိုးပါ့မယ်တဲ့ရှင်။ အဲ့ဒီ့လိုပြောလိုက်တိုင်း ကျွန်မလေ စိတ်တွေအရမ်းဖြစ်ပြီး သူ့ကို ပေးလိုးတော့တာပဲ။အောက်ကနေ ခါးလှုပ်ပြီးပစ်ကော့ပေးမိတာ။ အရမ်းကောင်းတာပါပဲရှင်။ တကယ်တော့ ကိုကိုဟာ ကာမနည်းပညာကို ပါရဂူတန်းအထိ ကျွမ်းကျင်တတ်မြောက်ထားတဲ့ ပညာရှင်စစ်စစ်တစ်ယောက်ပါ။
ကျွန်မကို တစ်သက်တာစီမံကိန်းနဲ့ သေသေချာချာကို လိုးပေးနေတာပဲကြည့်လေ။ ကိုကို့ရဲ့ကာမစိတ်ပညာကို ကျွန်မ အလွန်ပင် ဩချရလောက်ပါတယ်ရှင်။ ဒါပေမယ့်လည်း တစ်ခါ‌တစ်လေ ကိုကိုနဲ့ကျွန်မ လင်နဲ့မယား လျှာနဲ့သွားဆိုသလို အကြောင်းကိစ္စတစ်ခုကြောင့် စကားနည်းနည်းများတဲ့အခါ ကျွန်မက စိတ်တိုရင် နောက်ယောက်ျားနဲ့လင်ငယ်နေပစ်မယ် ဆိုပြီး စကားလုံးနဲ့ တိုက်ခိုက်တော့ ကိုကိုက ကျွန်မလက်ကိုဆွဲပြီး အိမ်ခန်းထဲခေါ်သွားတယ်။ ပြီးရင် သူ့ရဲ့ ငှက်ကြီးတောင်ဓားကြီးကို အရှေ့ချပြီး “ငါမသိဘဲနင်အပြင်မှာ ကလေကဝကောင်‌နဲ့ခံရင် နင့်ကို ဒီဓားနဲ့ ငါကိုယ်တိုင်ခုတ်မယ်။ နင်အလိုးခံချင်ရင်ပြော။ နင် အပြင်ယောက်ျားနဲ့လိုးတာ ခံချင်လား။ ငါခေါ်လာပေးမယ်။ ငါကြည်ဖြူတယ်။ ငါမသိဘဲနဲ့တော့ နင်ဘယ်သူနဲ့မှ မခံနဲ့” တဲ့။ သူ့အပေါ်အချစ်မလျော့နဲ့တဲ့။ သူနဲ့ကျွန်မ အိမ်ထောင်ရေးကို လုံးဝအထိမခံနိုင်ဘူးတဲ့။ “နင်လိုးချင်တာ ဘယ်သူနဲ့လိုးချင်လဲ၊ ဘယ်လိုလီးမျိုးနဲ့လိုးချင်လဲပြော” ဆိုတာနဲ့ ကျွန်မလေ တစ်ကိုယ်လုံးကို ဖျဉ်းတင်းတင်းဖြစ်သွားပြီး ဒေါသတွေဘယ်ရောက်မှန်းမသိ၊ ကျွန်မဟာလေးထဲက အရည်တွေထွက်လာပြီး ကျွန်မမှာ တွန့်လိမ်နေတာပဲ။ အဲ့ဒီ့အချိန် ကိုကိုက ကျွန်မမျက်လုံးကို အရိပ်ဖမ်းတတ်တယ်။
ကျွန်မကို ပွတ်သပ်နမ်းနယ်ရင်း လိုးပေးတော့တာပဲ။ ကျွန်မမှာ ခံလို့ကောင်းလိုက်တာရှင်။ အရှိန်တစ်ဝက်လောက်ရောက်ရင် “အခု မင်းကို ငါမဟုတ်ဘူး အပြင်လူ မင်းမသိတဲ့ သူစိမ်းတစ်ယောက်က လာလိုးပေးနေတာ သိလား” လို့ ပြောတော့ ကျွန်မရင်ထဲ တုန်တုန်ယင်ယင်ကြီးဖြစ်လာပြီး ပါးစပ်ကလည်း ညည်းမိညည်းရာ ‌ညည်းညူလျက်သားနဲ့ အလိုးခံရတာ သိပ်ကောင်းတာပဲ။ အဲ့လိုမျိုးဆို ကျွန်မက နှစ်ချီလောက်ကို တန်းပြီးတတ်တာ။ ဆက်ဆံလို့လည်း အပြီး၊ ကျွန်မတို့ရန်ဖြစ်ထားတာလည်း ဘယ်ပျောက်လို့ပျောက်မှန်းမသိ၊ ကျွန်မထွက်နေတဲ့ဒေါသတွေရော စိတ်ဆိုးတာတွေရော အရာအားလုံးပြေပျောက်ပြီး အားရကျေနပ်လိုက်တာရှင်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ ကျွန်မနဲ့လုပ်ဖြစ်တိုင်း တစ်ခါတစ်ခါ သူမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားသူက လိုးနေပါတယ်ဆိုပြီး ပြောရင်း သူ့ဟာကြီးနဲ့လုပ်တတ်တာ။ အဲ့လိုမျိုးဆို သူ့ဟာကြီးက တင်းမာလာပြီး ရွာမှာငရုတ်ထောင်းတဲ့ ခြေနင်းမောင်းတံက ကျည်ပွေ့ကြီးလို ကျွန်မရဲ့ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကိုကိုင်ကာ၊ တစ်ဇောင့်ဇောင့်နဲ့ ဆောင့်ချတော့တာပါပဲရှင်။ ကျွန်မလေ ကိုကိုမဟုတ်ဘဲ တစ်ခြားလူတစ်ယောက် ကျွန်မကိုဆောင့်ချနေတယ်ဆိုတဲ့ အာရုံတစ်မျိုးရပြီး အရည်တွေပိုရွဲလာတတ်တယ်။
သူ့ကျောကိုအတင်းဆွဲဖက်ကာ အောက်ကကော့ထိုး၊ မချိတင်ကဲ အလိုးခံနေရတော့တာပါပဲရှင်။ ကိုကိုက နောက်ပိုင်းကျတော့ အဆင့်ပိုပိုတိုးလာတယ်။ ကျွန်မကို တစ်ခြားယောက်ျားနဲ့ တစ်ခါလောက် ခံဖူးချင်လားတဲ့။ ကျွန်မ ဘာပြောကောင်းမလဲ လိုးနေတဲ့အချိန်ဆို သူ့ကိုပြန်ပြောပစ်ချင်တာ။ “အခုချက်ချင်း အေးမို့ကို ဆွဲလိုးမယ့်သူရှိရင်ခေါ်လာခဲ့၊ အလိုးခံပါ့မယ်” လို့ စိတ်ထဲကပဲ ကြိတ်‌ပြီးပြောနေရပါတယ်။ တကယ့်အပြင်မှာတော့ “မကောင်းပါဘူး ကိုကိုရယ် မသင့်တော်ပါဘူး” လို့ပဲ ပြန်ပြောမိတယ်။ ကိုကိုက တစ်ခါပဲလေ တဲ့။ အထူးအဆန်းဖြစ်အောင် ဆက်ဆံကြည့်ပါ့လား လို့ ပြောတယ်။ “ကိုယ်တို့အိမ်ထောင်ရေးမထိခိုက်ပါဘူး။ တစ်ခါ‌ပဲတွေ့ပြီး နောက်တစ်သက်လုံးမတွေ့ရတော့မယ့်လူမျိုးဆိုရင် မကောင်းဘူးလား” တဲ့။ အဲ့လိုကျတော့ ကျမစိတ်ဝင်စားသွားတယ်။ ပြီးမှ ကိုကိုက အေးမို့ကို မချစ်လို့လား ဆိုတော့ “ချစ်လို့အေးမို့လေး တစ်သက်မှာ တစ်ခါလောက်အသစ်အဆန်းကြုံဖူးအောင်၊ အေးမို့ကို ‌နောက်ပိုင်းထုတ်သုံးလာမယ့် နည်းလမ်းတွေအတွက် ကြိုပြီး မြေစမ်းခရမ်းပျိုးတာပါ” တဲ့။
သူမက်လုံးပေးနေတာပါ။ ကျွန်မသိသားပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျွန်မစိတ်ထဲကလည်း သူပြောသလို နောက်တစ်ယောက်က လုပ်တာခံချင်လာမိသလို နောက်ပိုင်းသူထုတ်သုံးလာမယ့် ကာမနည်းပညာတွေကို မြန်မြန်ပိုပြီး မျှော်လင့်မိပါတော့တယ်ရှင်။ အဲ့ဒီ့အခါမျိုးကျတော့ သူနဲ့ဆက်ဆံနေလျက်သားကျမကိုယ်လေး အသားကုန်ယားတက်လာကာ ရှီးးးးကိုကိုရယ် မြန်မြန်လုပ်ပါလို့ အာ့ အားးရှီးးး ကောင်းလိုက်တာ ကိုကိုရယ်။ “အေးမို့” “ရှင် ကိုကို” “ကိုကိုပြောတာ လက်ခံလား” “အေးမို့စိတ်ထဲ ဇဝေဇဝါဖြစ်နေတယ် ကိုကိုရယ်” “ဘာလို့လဲ။ အေးမို့ လုံးဝစိတ်မဝင်စားလို့လား။ အေးမို့စိတ်မပါရင် ကိုကိုဘာမှမလုပ်ဘူးနော်။” “အဲ့လိုလည်း မဟုတ်ပါဘူးကိုကိုရယ်။ အေး‌မို့လေ။ အေးမို့ ဟို နည်းနည်း၊ နည်းနည်းတော့ စိတ်ပါပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အေးမို့ ကြောက် ကြောက်နေတယ် ကိုကို။” “ကိုကိုသိပါတယ် အေးမို့ကြောက်နေတယ်ဆိုတာကို။ ဒါပေမယ့် ဟိုရောက်ရင် အစစအရာရာ အဆင်ပြေသွားမှာပါ။ ကိုကို စီစဉ်တာ ဘယ်နှစ်ခါ ဖြစ်ကတတ်ဆန်းလုပ်လို့လဲ။” “ကိုကို့ကို အေးမို့ယုံပါတယ်။
ဒါပေမယ့် ရင်ထဲ တမျိုးကြီးပဲ ကိုကိုရယ်။ အားးကိုကို လုပ်လုပ် လက်ကမြန်မြန်လုပ်ပေး။ ” “အားးအအားးး ဟင်းဟင်း သွက်သွက်လေးကိုကို အေးမို့ ပြီးတော့မယ်။ နမ်းမယ် နမ်းချင်တယ်ကိုကို အားးး ရှီးးး” ပလွတ် ပလွတ် ရှီး အအာအား ကိုကို့ လက် လက်က မြန် မြန်မြန်လေး လေး ရှီး အားးး “ကောင်းလိုက်တာကိုကိုရယ်။” စကားပြောနေရင်း အငြိမ်မနေတတ်တဲ့ ကိုကို့လက်ကြောင့် အေးမို့ရဲ့ပိပိလေး အရည်တွေ ရွမ်းရွမ်းစိုပြီး ပြီးဆုံးခြင်းကို ရောက်ခဲ့ရပြန်တယ်။ ………… “ဖြစ်ပါ့မလား ကိုကိုရယ်။ အေးမို့တော့ လန့်တယ် ကျောချမ်းနေသလိုပဲ။ နောက်ပြီး ဒီလူက ဒီမှော်ဘီဘက်မှာ နေတာဆို ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ ” “အေးမို့ရယ်။ အဲ့လူက စစ်ကိုင်းဘက်ကပါ။ လက်ဖက်ရည်ဆိုင်တစ်ခုမှာ ဒီလူ့ကို ကိုကိုမြင်ဖူးပါတယ်။
နောက်ပြီး လူပျိုကြီးပါ။ ကိုကို သေချာမှ စီစဉ်တာ။ ” “အဲ့လူကရော ကိုကို့ကို သိလား။” “သူကတော့ မသိဘူး။ ဒါပေမယ့် ဒီလူ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုစုံစမ်းထားတာ။ သူ့အကြောင်းတွေကိုလည်း ကိုကို အကုန်သိပြီးသား။ ဖုန်းထဲမှာ ရင်းနှီးတယ်။ ကိုကို့ကိုသာ သူမသိတာ။ ” “အင်းပါ ကိုကို။ အခု ဒီအိမ်က ဘယ်လိုရလာတာလဲ။ ” “အလုပ်ကိစ္စရှိလို့ တစ်လလောက်ပဲနေမှာဆိုပြီး ဈေးလေးနည်းနည်းပိုပေး ငှားထားတာပါ။ ဒါပြီးရင် အေးမို့ကို ကိုကို ရွာပြန်လိုက်ပို့မယ်။ နောက်တစ်ပတ်လောက်နေမှ ကိုကို ဒီပြန်လာပြီး အလုပ်ကိစ္စ၊ တွေ့စရာရှိတဲ့ လူတစ်ယောက်နဲ့တွေ့မယ်။ လေးငါးရက်ပါပဲ။ ဒီမှာ လုပ်စရာတွေပြီးတာနဲ့ ရွာကို ပြန်လာခဲ့မယ်။
အခု ဘယ်လိုလဲ အေးမို့။ ကိုကို သွားခေါ်ရတော့မလား။ ” “အင်း ကိုကို။ ဟို ဟိုလေ မနေ့ကတည်းက ဒီအိမ်ရောက်နေတာ။ ကိုကိုပြောသလို မလုပ်ခင် ဒီ ဒီမှာ ကိုကိုနဲ့ အရင်” “ဟားဟား ငါ့မိန်းမရယ်။ ချစ်စရာလေး။ ပြောနေတာလေးက ကိုကို အသည်းတွေ ယားလာပြီ။ ” ပြွတ် ပြွတ် “အင်း ကိုကိုရယ် ကိုကို့နှုတ်ခမ်းက ပိုချိုလာသလိုပဲ။ အွန့်အွန်း ရှီးးး ကိုကိုရေ ဘယ်လိုလုပ်နေတာလဲ အားးး” ………… ကျွန်တော့်နာမည် ညိုမင်းလွင်ပါ။ ကျွန်တော့်အကြောင်းတော့ ခင်ဗျားတို့ သိလောက်ရောပေါ့။ ကျွန်တော် ကိုယ့်မယား သူများလိုးခြင်းကို စိတ်ဝင်စားတဲ့လူတစ်ယောက်ဖြစ်မှန်းလည်း ရိပ်မိလောက်ပြီ။ အိမ်ထောင်သက်ကြာလာတော့လည်း ကျွန်တော့်မိန်းမ အလုပ်ခံနေရတာမျိုး သေသေချာချာကြည့်ချင်လာတယ်ဗျာ။
ဘေးနားကနေ အပြာကားကြည့်သလိုမျိုး‌ပေါ့။ ပြီးတော့ မင်းသမီးနေရာမှာက ကိုယ့်မိန်းမ၊ မင်းသားနေရာမှာက သူစိမ်းတစ်ယောက်၊ ကျွန်တော်က ဇာတ်ကားကြည့်တဲ့သူပေါ့။ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ ကာမဆက်ဆံအပြီး အဆိပ်တက်နေတဲ့ပုံစံကို ကြည့်နေရတာမျိုး ကျွန်တော်လိုလား လာတယ်။ ကျွန်တော်နဲ့လုပ်နေချိန်ကျ ပွဲကြည့်ပရိသတ်တစ်ယောက်ရဲ့ ခံစားမှုမျိုးမရဘူးလေ။ နောက်ပြီးတော့ ကိုယ်လုံးချင်း အရမ်းနီးကပ်ပူးနေတော့ ဘေးနားက လူတစ်ယောက် ကြည့်ရတဲ့ မြင်ကွင်းလို အစစအရာရာ သေချာပိုင်နိုင်မှု မရှိဘူး။ မိန်းမကို တစ်ဖြည်းဖြည်းနဲ့ ကျုံးသွင်းလာခဲ့ရတာပါ။ နောက်ပိုင်းကျရင်တော့ ကျွန်တော်လည်း ဒီကိစ္စတွေပြန်ပြောနှိုးဆွရင်း သူနဲ့ နည်းမျိုးစုံ ဆက်ဆံမယ်လို့စိတ်ကူးထားတာပဲ။ တစ်ခါတလေကျ အေးမို့ကို ကျွန်တော် ပုံစံအစုံနဲ့လုပ်ချင်ပေမယ့် စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားရတယ်။ ကြာလာရင် လင်မယားချင်း ရိုးသွားမှာစိုးလို့ပါဗျာ။ တစ်သက်လုံး သူနဲ့ ကာမအရသာကို မရိုးအီလှအောင် ခံစားချင်တာပါ။
ဒီနေ့ ကျွန်တော့်မိန်းမ ဝတ်ထားတာလေးကလည်း တော်တော်လေးယဉ်ပြီး မျက်လုံးထဲ စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းနေတာဗျာ။ အေးမို့က အသားဝင်းတယ်။ ဖြူတာလည်းမဟုတ် ညိုလည်းမညို အသားလတ်လတ်လေးနဲ့ ဝင်းနေတာမျိုး။ အဝါခပ်ရင့်ရင့် နနွင်းညိုရောင် ချည်သားဝမ်းဆက်လေးနဲ့၊ ဆံပင်လေးတွေကို သိမ်းစုစည်းပြီး အနောက်ကို လျားချထားတာ။ ဆံပင်လေးက ခါးအောက်ပိုင်းလောက်ရှိတာဆိုတော့ မြင်းမြှီးလေးကျနေတာပဲ။ သူက နှာတံစင်းစင်း မျက်နှာသွယ်သွယ် မျက်ခုံးပါးပါး ရေးရေးလေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားတာပါ။ မျက်ဝန်းသွယ်သွယ် နှုတ်ခမ်းဖူးဖူး မေးချွန်းချွန်းလေးနဲ့ဆိုတော့ သူဝတ်ထားလေးနဲ့က တကယ်ကြည့်လို့ကောင်းပါတယ်။ ခါးလေးက ကျဉ်ပြီး အနောက်ကိုကော့နေတာ၊ သူ့အိုးလေးက ကားနေတာမျိုးမဟုတ်ဘူး။ အိုးကြီးမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူး။ တင်းတင်းပြည့်ပြည့်နဲ့ လုံးလုံးလေး။
အတွင်းခံလေးဝတ်ထားတာရယ် အပေါ်က ထဘီကိုလည်း ကျပ်ကျပ်လေး စည်းနှောင်ထားတော့ အိုးလေးမှာ အစင်းကြောင်းနှစ်ခု ထင်းနေရုံဘယ်ကမလဲဗျာ အပေါ်ဗိုက်သား ခါးသားရည်ကြိုးလေးကအစ ထင်းနေတာပဲ။ အဲ့ဒီ့အပေါ် လက်သုံးလုံးလောက်အကွာကျမှ ထဘီလေးက အထက်ဆင်အနက်လေး ရေးတေးတေးနဲ့ ခါးသိမ်သိမ်လေးထဲ နစ်မြုပ်ဝင်နေပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ်စည်းနှောင်ထားတော့ သူ့အတွင်းခံအောက်က အိုးလေးက လုံးတစ်ပြီး အတွင်းခံအရွယ်အစားကအစ အကုန်လုံး ပုံစံအတိအကျ ပေါ်နေတာပဲဗျာ။ အထဲက အတွင်းခံဝမ်းဆက် မိုးပြာရောင်လေးဟာ ခပ်ရေးရေး မှိန်မှိန်လေးပေါ်နေတာ တကယ့်ကို လိင်စိတ်ကြွဖွယ်ရာလေးပါ။ အဲ့ဒီ့အပေါ်မှာ ခါးလေးက အပေါ်ကို ပြေပြေလေးတက်သွားတာ။
ကျောလယ်ညှပ်ရိုးအောက်နားလေးမှာလည်း သူ့ဘရာအရာလေးကို အင်္ကျီကျပ်ကျပ်လေးက ပုံဖော်ထားတယ်။ နို့လေးကလည်း ဘရာအုံ အမာစားလေးအောက်မှာ လုံးဝန်းဝန်းလေးဆိုတော့ သူ့လက်မောင်းသွယ်သွယ် ပေါင်တံစင်းစင်းလေးတွေနဲ့ တွဲဖက်မြင်ရတာ သိပ်ကို အသည်းယားပြီး ကိုင်ဆောင့်ပစ်ချင်စရာလေး ဖြစ်နေတာပါ။ ကျွန်တော့်မှာ စိတ်ကို မနည်းထိန်းထားနေရတယ်။ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့တော့ ခဏနေရင် အပြင်လူတစ်ယောက် လိုးတာခံရတော့မယ်။ ကျွန်တော်လည်း ဒီရက်ပိုင်း သူ့ကို မဆက်ဆံထားဘူး။ တစ်ပတ်ကျော်လောက်ရှိမယ် ထင်တယ်။ နှုတ်ခမ်းလောက်ပဲ နမ်းပြီး လက်ခလယ်နဲ့ ပြီးအောင် ဆွပေးထားတာ။
အခု အပြင်ထွက်ပြီး ဟိုလူနဲ့ချိန်းထားတာ သွားခေါ်မလို့ကို သူစိတ်နည်းနည်းထနေတာနဲ့ အသာလေး နှုတ်ခမ်းဆွဲစုပ်ပြီး မချင့်မရဲဖြစ်အောင် လက်နဲ့ကလိထားခဲ့ရတယ်။ ဟိုလူကတော့ မှော်ဘီဈေးရုံရှေ့နားမှာ စောင့်နေတယ်လို့ ဖုန်းလှမ်းဆက်ပြောတာပဲ။ ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ လိုးမယ့်လူပေါ့ဗျာ။ ………… နှင်းမို့ ကိုကိုထွက်သွားတော့မှပဲ တစ်ယောက်တည်းပျင်းနေတာနဲ့ ဒီအိမ်အနေအထားကို လိုက်ကြည့်မိတယ်။ ဒီအိမ်လေးက မှော်ဘီဘက်မှာပါ။ ခြံကတော့ ကျယ်ကျယ်ဝန်းဝန်းလေးပါပဲ။ ပေခြောက်ဆယ်ပတ်လည်လောက်ရှိတယ်။ တိုက်ပုလေးတစ်လုံးပဲ ဆောက်ထားတာပါ။ ခြံက အုတ်တံတိုင်းကာထားတာ အမြင့်ခြောက်ပေလောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ အပေါ်မှာ သံဆူးကြိုးခွေတွေနဲ့။ အိမ်ဘေးမှာ စိုက်ခင်းလေးရှိတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးတို့ ချဉ်ပေါင်တို့ စိုက်ပျိုးထားပါတယ်။ ခြေရင်းဘက် ခြံစည်းရိုးနားမှာလည်း မာလကာပင်လေး နှစ်ပင်၊ အနောက်ဘက်ထောင့်မှာ သရက်ပင်ကြီးတစ်ပင်နဲ့ ဗူးစင်ခပ်ကြီးကြီးတစ်ခုရှိ‌ပါတယ်။
အိမ်ရှေ့မှာတော့ သပြေပင်‌ခပ်လတ်လတ်လေးတွေရယ် အလှစိုက်ပန်းအိုးတွေ တွေ့ရတယ်။ ဂမုန်းတို့၊ နှင်းဆီတို့၊ သစ်ခွပန်း လေးငါးမျိုးလောက်နဲ့ တကယ်တော့ ဒီခြံလေးဟာ နေချင်စဖွယ်လေးပါ။ ကိုကိုက စိတ်ကူးသိပ်ကောင်းတာပဲ။ သူလည်း ဒီခြံနဲ့အိမ်ကို ငှားရတာ ဈေးကတော့ ‌တော်တော်ပေးရမယ် ထင်တယ်။ ခြံလေးက သာယာအေးချမ်းသလောက် ကျွန်မရင်ထဲတော့ ဆူပူနေတာပါပဲရှင်။ တစ်လှပ်လှပ်ခံစားမှုမျိုးနဲ့ ရင်တွေတုန်လို့ ကျွန်မရဲ့ ပိပိလေးထဲမှာလည်း အရည်လေးတွေက နည်းနည်း စိုတိုတိုနဲ့ ကျွန်မရင်ထဲ ကာမဂုဏ်မီးအပျိုးတွေ ဖွဲမီးလို တစ်ငွေ့ငွေ့လောင်မြိုက်နေဆဲပေါ့ရှင်။
ခုနှစ်နာရီထိုးကာနီးကျတော့ ကိုကိုနဲ့အတူ လူတစ်ယောက်ပါလာတယ်။ အရပ်ပုပု အသားမည်းမည်းနဲ့ ရုပ်က အညာသားရုပ်လိုပဲ။ ကျွန်မရှက်နေလို့ သူ့မျက်နှာကို သေချာမကြည့်ရဲခဲ့ပါဘူး။ တီရှပ်အနက်ရောင်နဲ့ ဘောင်းဘီကဂျင်းအပျော့သား အုတ်ခဲကျိုးအရောင် ကွာတားဘောင်းဘီလိုမျိုး ဝတ်ထားတယ်။ သူ့ခြေထောက်မှာလည်း ခြေသလုံးမွေးတွေက ထူလပျစ်ကြီး။ လူက ကိုယ်လုံးတုတ်တုတ် သန်သန်မာမာနဲ့ဆိုတော့ ကျွန်မစိတ်ထဲ ဒီလူက ခဏနေရင် ငါ့ကိုလိုးမှာပါ့လား ဆိုတဲ့အတွေးဝင်လာတော့ ကျွန်မဒူးတွေ ညွတ်ခွေကျချင်လာသလိုပဲ ကတုန်ကယင်ကြီးဖြစ်နေတယ်။ ကျွန်မလေ ကျွန်မ. . . …….. ကျွန်တော့်မိန်းမကတော့ ရှက်နေတယ်နဲ့တူပါတယ်။
ဟိုလူကလည်း အစက အိုးတို့အမ်းတမ်းဖြစ်နေပေမယ့် အခုတော့ သောက်ရင်းစားရင်း စကားတော့ နည်းနည်းဖောင်ဖွဲ့လာပါပြီ။ လူကတော့ နည်းနည်းအေးတယ်ဗျ။ “ကိုထွန်း၊ ခင်ဗျားက အခုလူပျိုကြီး‌ဆိုတော့ အရင်တုန်းက ရည်းစားတွေဘာတွေတော့ ထားဖူးမှာပေါ့” “ဟုတ်၊ ထားဖူးတာပေါ့ အကိုရာ။ အားလုံးပေါင်း လေးယောက်အထိကိုထားဖူးတယ်။” “ဟားဟား။ ပြောစမ်းပါဦးဗျ။ ခင်ဗျား ရည်းစားတွေနဲ့ အကြောင်းလေးတွေ” “ကျွန်တော် ပထမရည်းစားဦးနဲ့က ဘာမှ မဖြစ်ခဲ့ဘူးဗျ။ မဖြစ်ခဲ့ဘူး ဆိုတာက ဟိုကိစ္စကို ပြောတာပါ။ အဲ့ဒီ့တုန်းက လူကလည်း ငယ်သေးတော့ သူကလည်းရည်းစားဦးဆိုတော့ အသည်းပေါက်မတတ် ဖူးဖူးမှုတ်ပေါ့ဗျာ။မထိရက် မကိုင်ရက်နဲ့။ အခုများကျတော့ အဲ့ဒီ့မိန်းကလေးလည်း ကလေးသုံးယောက်နဲ့ဗျို့။ အငယ်လေးတောင် လေးနှစ်သားရှိနေပြီ”
“ဟားဟား။ ဟား တကယ်ပဲဗျာ။ အခုတော့ ခင်ဗျားရည်းစားဦးက တစ်ခြားလူကို သွားမှုတ်နေတာပေါ့ ဟားဟား” “ဟား ဆိုပါတော့ဗျာ ဟီး” ဟိုလူက ခေါင်းကုတ်‌ပြီး ရယ်ကျဲကျဲ‌နဲ့ဆိုတော့ ဘေးနားက ကျွန်တော့်မိန်းမလည်း ခွိကနဲ အသံထွက်လာတယ်။ ကျွန်တော်လိုချင်တာ ဒါမျိုးလေ။ “နောက်တစ်ယောက် ကျတော့ရော ” “အင်းနောက်တစ်ယောက်ကျတော့ ဂျပုမလေး။ ဝဝလေးပါ။ သူနဲ့တော့ ဖြစ်ခဲ့တယ်။ သူ့အိမ်ကလည်း အဲ့တုန်းက ပိုက်ဆံရှိတော့ သဘောမတူတာနဲ့ ကွဲခဲ့ရပြန်ပေါ့” “ရင်နာစရာလေးတွေပေါ့” “နောက်တစ်ယောက်ကျတော့ဗျ၊ သူက စိတ်ကြီးတယ်။ တစ်ခုခုဆို အော်ဟစ်သောင်းကျန်းတတ်တော့ ကြာတာနဲ့ ကျွန်တော်လည်း ဒဏ်မခံနိုင်တော့ ထားခဲ့ရပြန်တာပဲ။ နှစ်နှစ်လောက်နဲ့တောင် ဒဏ်မခံနိုင်တာ။ တစ်သက်လုံးဆို ကျွန်တော့်ဘဝ ခါးပြီပေါ့ဗျာ။
“အင်း ဟုတ်ပါတယ် ခင်ဗျားပြောတာ” “လေးယောက်မြောက်ရည်းစားကတော့ဗျာ” “အင်း ဘာဖြစ်လဲ” “ထန်တာ ထန်တာဆိုတာ ကျွန်တော့်မှာ မနည်းဖြိုရတယ်။ သူနဲ့ကျမှပဲ ကျွန်တော်လည်း လုပ်နည်းပေါင်းစုံ အကုန်စုံတော့တယ်။ သူ့ကြောင့် ဘယ်မိန်းမမဆို မကြောက်ဘဲနဲ့ တစ်ဝကြီးလုပ်နိုင်တာဗျ။” ဒီစကားလည်း ကြားရော ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကြည့်လိုက်တော့ မျက်လုံးလေးပြူးပြီး ကြက်သီးမွေးညှင်းလေးတွေထနေတာ အဖုလေးတွေတောင်မြင်ရတယ်။ “ခင်ဗျား သူနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါလောက် လုပ်ဖူးခဲ့လဲ။” “တွဲခဲ့တဲ့သက်တမ်းတစ်လျှောက် မှန်းခြေ အကြိမ် ခုနှစ်ဆယ်ထက်တော့ မနည်းလောက်ဘူးထင်တာပဲ။
သူက ပိုက်ဆံရှိတဲ့ ဗိုလ်တစ်ယောက်နဲ့ညားသွားတာ။ အခုတော့ ကတော်ဖြစ်နေပါပြီ။” “ဟားဟား။ လောကကြီးက ဒီလိုပါပဲဗျာ။ ခင်ဗျား အချစ်နဲ့ကာမကိုရော ဘယ်လိုထင်လဲ။” “ကျွန်တော့်အထင်ကတော့ဗျာ၊ အဲ မှားရင်လည်း မှားမှာပေါ့နော်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်အတွက်ကျတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒီလိုဗျ။ ကျွန်တော်က အချစ်ဆိုတာတော့ မပြောချင်ဘူး။ သူဟာ အင်မတန် နက်ရှိုင်းဆန်းကြယ်တယ်။ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ချင်းစီ တူညီလေ့မရှိဘူး။ ဒီတော့ ကာမရှူ့ထောင့်နဲ့ပဲ ပြောချင်တယ်။ အချစ်ပါသောကာမ နဲ့ အချစ်မပါသောကာမပေါ့ဗျာ။ အချစ်ပါသောကာမဟာ ပိုချိုမြိန်ပြီး အဆုံးသတ်လေ့မရှိဘူး။ အချစ်မပါသောကာမဆိုတာက တုံ့ပြန်မှု အင်မတန်မြန်ဆန်တယ်။
ကျွန်မ ဘေးနားကို ကိုထွန်းဆိုတဲ့လူ လာဝင်ထိုင်ပါတယ်။ သူတို့လည်း သောက်ရင်းစားရင်း အရှိန်တက်နေပြီ‌ဆိုတော့ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းရှိလာကြပါပြီ။ ကျွန်မလည်း ဝိုင်တန်ခိုးကြောင့် သွေးကြောတွေ နွေးထွေးလာပြီး သက်တောင့်သက်သာတော့ ဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ။ ကိုထွန်းက ကျွန်မကို အမ အဆင်ပြေရဲ့လားတဲ့။ “အင်းးး ” လို့ပဲ စကားတစ်လုံးတည်း ပြန်ဖြေရင်း ကျွန်မ သူ့ကို ပြုံးပြလိုက်လား မပြုံးလိုက်ဘူးဆိုတာဇဝေဇဝါပါပဲရှင်။ ခဏကြာတော့ သူက ကျွန်မလက်လေးကို လာကိုင်ပါတယ်။ ကျွန်မလေ မကြောက်ဘူးဆိုပေမယ့် နည်းနည်းလေးတော့ တွန့်သွားပါတယ်။ သူကတော့ ကျွန်မကိုကိုနဲ့ စကားပြောရင်း ‌သူတို့ပါလာတဲ့အရက်တွေကို ရေခဲတုံးလေးတစ်တုံးစီထည့်ရင်း အရသာခံသောက်နေကြပါတယ်။ သူ့လက်က ကျွန်မလက်ကလေးကို မလွတ်ဘဲ ဆက်ကိုင်ထားတော့ ကျွန်မလေ ရင်တွေ တစ်ဒိန်းဒိန်းနဲ့။ သူ့အောက်ကို အသာငုံ့ကြည့်တော့ ဘောင်းဘီထဲက သူ့ဟာကြီးက ဖုထွက်နေတယ်။ ကျွန်မ ရေအရမ်းငတ်တာပဲရှင်။ အာခေါင်တွေ ခြောက်လာသလိုပဲ။ အဲ့ဒါနဲ့ ရှေ့မှာရှိတဲ့ ဝိုင်တစ်ခွက်ကိုပဲ အရသာခံအာရုံစိုက်လို့ အသာမော့လိုက်ရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့ သောက်ရင်းစားရင်းနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ကိုထွန်းက လက်ကိုင်လိုက်တော့ မိန်းမကိုယ်လုံးလေး တစ်ချက်တုန်သွားတာ သတိထားမိလိုက်တယ်ဗျ။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲ ဇာတ်လမ်းတော့ စပြီ ဆိုပြီး ခန္ဓာကိုယ်ထဲလည်း သွေးတွေဆူလာတယ်။ ကာမစိတ်တွေလည်း နိုးကြွလာခဲ့တယ်ဗျာ။ အောက်က ငပဲကလည်း တင်းမာပြီး ခေါင်းထောင်ထလာပြီ။ ဆက်သောက်ရင်း စကားပြောရင်းနဲ့ ကိုထွန်းက ကျွန်တော့်မိန်းမမျက်နှာနားလေးကို တစ်ချက်တိုးကပ်သွားတယ်။ မိန်းမပါးလေးကို တစ်ချက်နမ်းလိုက်တာ တွေ့ရတယ်။ မိန်းမက ခေါင်းလေးငုံ့ပြီး ပါးပြင်မှာ သွေးကြောလေးတွေက ရဲကနဲပဲ။ သူ့ယောက်ျားရဲ့အရှေ့တည့်တည့်မှာ သူစိမ်းတစ်ယောက်က သူ့ကိုနမ်းလိုက်တာဆိုတော့ ရှက်သွားလို့ထင်တယ်။
ခေါင်းလေးငုံ့သွားတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ထဲလည်း ဒိန်းတလိန်းနတ်ဝင်ပူးသလို အသံစုံမြည်ဟီးပြီး ဗလောင်ဆူကာ မိန်းမောတဲ့အရသာတစ်မျိုးကို ခံစားနေရတယ်ဗျာ။ အားအင်တွေ ယုတ်လျော့သွားတာလား ဖိန်းတိန်းရှိန်းတိန်းဖြစ်သွားတာလားတော့ ကွဲကွဲပြားပြား မသိရပေမယ့် ကျွန်တော့်မိန်းမနဲ့ ကိုထွန်း နှစ်ယောက်သား ခရီးထပ်ဆက်‌နိုင်ဖို့ကို ကျွန်တော် ပိုလို့ မျှော်လင့်နေမိတယ်။ ကုန်သွားတဲ့အရက်ခွက်ကို သေသေချာချာထပ်ငှဲ့၊ ရေခဲတစ်တုံးထပ်စပ်ပြီး လက်တစ်ဖက်နဲ့ ခွက်ကိုလှုပ်ရမ်းရင်း အအေးဓါတ်ပျံ့နှံ့သွားအောင် ‌ခလှောက်လိုက်ပါတယ်။ စီးကရက်တစ်လိပ်ထုတ်၊ မီးညှိရင်း ရှိုက်ကာ မီးခိုးငွေ့တွေ ဟူးက‌နဲ မှုတ်ထုတ်ရင်း အပေါ်ကို ခေါင်းပြန်မော့ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ဟာ ကိုထွန်းရဲ့ရင်ခွင်ထဲမှာ ပျော့ခွေနုန်းကျရင်း ကိုထွန်းရဲ့နှုတ်ခမ်းချင်းနမ်းစုပ်မှုတွေအောက်မှာ လူးလွန့်နေတာကို တွေ့လိုက်ရပါတယ်။
တကယ့်ကို စိတ်တွေ ထကြွစရာပါပဲ။ ကိုထွန်းဟာ အေးမို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးကို အားမနာလျှာမကျိုး ကျွန်တော့်ရှေ့တည့်တည့်မှာ နမ်းစုပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့ခါးကိုဖက်ကာ လက်တစ်ဖက်က အေးမို့ရဲ့တင်သားလုံးလုံးလေးကို ဖျစ်ညှစ်နေပါတယ်။ အင်း ဟင်း ဟင်းးအွန်းး ဆိုတဲ့ အေးမို့ရဲ့ညည်းသံလေးတွေရယ် ပြွတ် ပြွတ် ပြွတ် ဆိုတဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်နှုတ်ခမ်းချင်း ဆွဲစုပ်ယူနေတဲ့အသံလေးတွေကြောင့် ကျွန်တော့်ရဲ့လိင်စိတ်တွေ တစ်ရိပ်ရိပ် အရှိန်ထိုးတက်လို့လာပါတယ်။ ကျွန်တော့်ရဲ့ အေးမို့လေးဟာ တစ်ပါးသူရဲ့လက်ထဲမှာ ပျော့ခွေပြီး အရသာတွေခံစားနေပါတယ်။ စပ်ထားတဲ့ ရမ်တစ်ခွက်ကို တစ်ချက်တည်းကျွန်တော်မော့သောက်ချလိုက်ပြီး ပြန်ကြည့်လိုက်တော့ ကျွန်တော့်အမြင်အာရုံတွေဟာ အရက်ကြောင့်လား၊ လိင်စိတ်ကြောင့်လား၊ အေးမို့ရဲ့အရသာခံညည်းညူနေတဲ့ မြင်ကွင်းကြောင့်လား မသိ၊ တစ်ဖြေးဖြေး ရီဝေမှုန်မှိုင်းလို့လာပါတယ်။
အေးမို့ကို ဟိုလူက နို့အုံတွေ ညှစ်နယ်ပေးနေတာ။ အေးမို့လေး လူးလွန့်ပြီး ခပ်သဲ့သဲ့ညည်းညူနေတာပါပဲဗျာ။ ကာမစိတ်တွေ တစ်ဟုန်ထိုးတက်နေတဲ့ သူ့မျက်နှာလေးကို မြင်ရတဲ့အရသာဟာ တကယ့်ကို သွေးသားဆူဝေစရာကြီးပါဗျာ။ ကြည့်နေရင်းနဲ့ အားမရ‌လာတော့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဝင်ပါလာချင်စိတ်တွေ တစ်ဖွားဖွားပေါ်ပေါက်လာပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုလူအရှိန်ပျက်ပြီး တန့်သွားမှာ စိုးရိမ်လို့ အခြေအနေကို ငြိမ်ပြီးစောင့်ရင်း ကိုယ့်စိတ်ကို မနည်းပြန်ထိန်းနေရပါတယ်။ အွန်း အ အ ရှီးးး အေးမို့ရဲ့ထဘီကို မတင်ကာ ထဘီအောက်ထဲလက်နှိုက်ပြီး ကိုထွန်းလက်က အေးမို့ရဲ့ အဖုတ်ကို နှိုက်ကလိနေတာဗျ။ အေးမို့ရဲ့ပေါင်တံစင်းစင်းလေးတွေဟာ တွန့်လိမ်လို့ ကိုထွန်းရဲ့လက်မဲကြီးက ကြားထဲဝင်ကာ တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ အေးမို့ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်လေး တစ်သိမ့်သိမ့်တုန်ပြီး သူ့လက်က ကိုထွန်းရဲ့လည်ဂုတ်ကို ပြန်သိုင်းဖက်ထားပါတယ်။
ပလွတ် ပလွတ် အင့် အား အား အွန့်ဟွန်း အင်း ပြွတ် ဟင်း ဟားးး အပေါ်မှာလည်း နှုတ်ခမ်းတွေ တေ့စုပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့ပါးစပ်ထဲ ကိုထွန်းလျှာကြီးက ထိုးသွင်းကလော်နေတာ နေရာအနှံ့ပါပဲ။ အေးမို့ကလည်း အငမ်းမရ ကိုထွန်းရဲ့လျှာကို ပြန်ဆွဲစုပ်ရင်း တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့လျှာကို ပြန်ထိုးပေးနေပါတယ်။ အောက်ကလည်း ကိုထွန်းရဲ့လက်တွေဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမအေးမို့ရဲ့ အဖုတ်လေးထဲကို အသားကုန်ထိုးဆွပွတ်ဆွဲ နှိုက်ကလော်ရင်း လက်မက တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ အစိလေးကို နှိုးဆွနေသလားမသိပါဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အောက်ခံပန်တီဘောင်းဘီလေး ပေါင်လယ်လောက်လျှောကျပြီး ပေါင်သားစင်းစင်းလေးတွေက တစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ပန်တီမိုးပြာရောင်လေးရဲ့အလယ်မှာ အရည်ကွက်ကလေးတွေ့လိုက်ရတယ်။ သူတို့ကတော့ ကျွန်တော်ရှိတယ်လို့တောင် မထင်တော့ပါဘူး။
တစ်ရှူးရှူးအသက်ရှုသံတွေ၊ တစ်ဟင်းဟင်းညည်းညူသံတွေနဲ့ တကယ့်လင်မယားတွေလို ထိုးနှိုက်ဆွနမ်းစုပ်ကြပြီး ကာမရေယာဉ်ကြောထဲ အစုန်အဆန်မျောနေကြပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း သူတို့အသိစိတ်ပျောက်နေတုန်း အသာလေးလစ်ထွက်ကာ ခြံထဲဆင်း၊ ချဉ်ပေါင်ပျိုးခင်းလေးဘေးနားက မြေကွက်လပ်အလွတ်လေးမှာ ဖျာတစ်ချပ်ခင်း၊ စောင်နှစ်ထည်ခင်းကာ ကျွန်တော့်မိန်းမအလိုးခံဖို့ စစ်တလင်းကို ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြင်ဆင်နေရပါတယ်။ ကိုယ့်မိန်းမကို သူများလိုးဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် အိပ်ယာပြင်ပေးရတာ အရသာကတစ်မျိုးကြီးပဲဗျာ။ ညချမ်းချိန်ခါ လေနုအေးက တစ်သော့သော့အပြေးနှင်လို့ လောကဓာတ်ခွင် အေးချမ်းနေပေမယ့် ဟော့ဒီ့ ကာမစစ်တလင်းခြံလေးကတော့ အပူရှိန်တွေ တစ်ရိပ်ရိပ်တက်နေပါတော့တယ်။
အိမ်ထဲကို ပြန်ဝင်လာတော့ ကျွန်တော်မရှိတော့တာ သိသွားလို့ ပိုရဲတင်းသွားကြတယ်နဲ့တူတယ်။ ကိုထွန်းဟာ ကြမ်းပြင်ပေါ် ဒူးထောက်ဆင်းပြီး နှစ်ယောက်ထိုင် ဆက်တီပေါ်မှာ မျက်စိမှိတ် ပေါင်ကားထားတဲ့ အေးမို့ရဲ့ပေါင်ခွကြားလေးထဲ သူ့မျက်နှာထိုးအပ်ရင်း အေးမို့ရဲ့အဖုတ်ကို သူ့လျှာကြီးနဲ့လျှက်ကာ အဖုတ်အခေါင်းလေးထဲ လက်နဲ့ထိုးဆွ၊ လျှာထိုးသွင်း ကလော်ထုတ်၊ တစ်ရှုးရှုးနဲ့။ အေးမို့ရဲ့စောက်ရည်လေးတွေ ရွဲလာရင်လည်း နှုတ်ခမ်းသားတွေကို တေ့စုပ်ပြီး အားရပါးရ လျှာစွမ်းပြနေပါတော့တယ်။ အေးမို့ဟာ အဲ့ဒီ့လူရဲ့ခေါင်းကို သူ့အဖုတ်ထဲ အသားကုန်ဆွဲကပ်ရင်း ခါးလေးကော့ပျံကာ တစ်အင်းအင်းတစ်အားအား အသိစိတ်လွတ်ညည်းညူးနေပါတယ်။
အအား အား ရှီး ပလွတ် ပြွတ် ဇူးးးးရှီးးး အားယားးအင်းးအွန်ဟွန်း အွန်းးး အားးး အေးမို့ရယ် အစက သင့်တော်ပါ့မလားဆိုပြီးတော့ အခုကျ နင့်အဖုတ်ကို ကိုထွန်းဆီကော့ပေးပြီး ဆွဲကပ်ထားတာ သူ့ခေါင်းတောင် နင့်စောက်ခေါင်းထဲဝင်တော့မယ် အေးမို့ရယ်။ တဏှာတွေ ထန်ပြီး အကောင်းကြီးကောင်းနေတာ။ နင့်မျက်နှာကို ကြည့်ရတာ မာန်ဖီနေတဲ့ ကျားသစ်မလေးလိုပဲ။ ခဏနေရင် နင်တကယ်အလိုးခံရတော့မှာပါ မပူပါနဲ့အေးမို့ရယ်။ ဟိုလူက နင့်ကို တကယ်လိုးမှာပါ။ အာ့အား ထွက်ကုန်တော့မယ်။
ကို ကိုထွန်း အားးး ရှီးးးကောင်းလား အမလေး။ ကောင်း ကောင်းတယ် လုပ်ပါ လျှာနဲ့ အထဲကိုမွေပေး အား အာ့အို ရှီးးး တစ်ပြိုင်နက်တည်းမှာပဲ ကိုထွန်းက မတ်တပ်ထရပ်ပြီး ဘောင်းဘီဇစ်ဆွဲ အောက်လျှောချကာ သူ့လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်ဘက်ကတော့ သူ့ကိုယ်လုံးနဲ့ ကွယ်နေလို့ မမြင်ရပါဘူး။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ရဲ့ ပါးစပ်နားကိုထိုးပေးတယ်။ အေးမို့က “ဟင့်အင်း ” တဲ့။ငြင်းတယ်။ “လုပ်ပါ ဘယ်သူမှ မရှိပါဘူး။ အမယောက်ျားမသိပါဘူး ခဏလေးပါ”တဲ့။ ကိုထွန်းက ပြန်ပြောတာ။ အေးမို့က ပတ်ဝန်းကျင်ကို တစ်ချက်အကဲခတ်တယ်။ ကျွန်တော်လည်း အိမ်ထဲမဝင်ဘဲ တံခါးအကွယ်က ချောင်းကြည့်နေတာဆိုတော့ သူမမြင်ရအောင် အုတ်နံရံနဲ့ ပြန်ကွယ်လိုက်တယ်။ စိတ်ထဲမှာ တစ်ဒိန်းဒိန်းနဲ့ ရင်တွေ ခုန်လိုက်တာ‌ဗျာ။
ခဏကြာတော့ ကျွန်တော်လည်း အဆင်ပြေလောက်ပြီအထင်နဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမတို့ရှိရာကို ပြန်ချောင်းကြည့်လိုက်တော့၊ ကျွန်တော့်မိန်းမအေးမို့ဗျာ၊ ဟိုလူ့လီးကို အသားကုန်ဆွဲစုပ်ရင်း တဖြည်းဖြည်းနဲ့ သူပါးစပ်အတွင်းထဲထိ မြွေတစ်ကောင်အစာမျိုသလိုကို ရှိုက်ပြီးဆွဲစုပ်နေတာဗျာ။ ခေါင်းကရှေ့‌တိုးနောက်ဆုတ်နဲ့ တစ်ချက်တစ်ချက် သူ့မျက်နှာက ဇက်ကလေးစောင်းရင်း လည်လည်ထွက်သွားတယ်။ အပြာဇာတ်ကားတွေထဲက မင်းသမီးတစ်ယောက်လို တကယ့်ကိုပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်စုပ်နေတာ။ သူဒါတွေ ဘယ်လိုတတ်နေတာလဲ။ ငါလည်း တစ်ခါမှ မစုပ်ခိုင်းသေးပါဘူး။ ဟိုလူသင်ပေးလိုက်လို့လား။ ဟိုလူသင်ပေးရင်လည်း ချက်ချင်းကြီး အခုလောက် ကျွမ်းကျင်ပါ့မလား။ ဒါဆို ရွာမှာလင်ငယ်နေတာလား။ မဖြစ်နိုင်။ ရွာနီးချုပ်စပ် ဆယ့်ငါးရွာလောက်ကို ဩဇာတိက္ကမကြီးမားတဲ့ အသိုင်းအဝိုင်းတောင့်တင်းလွန်းလှတဲ့ သူဌေးကြီးတစ်ယောက်သမီးကို ဘယ်သူမှ လက်ဖျားနဲ့တောင် မထိတို့ရဲ။ ဒါ ဒါဆို သူကျောင်းသွားတက်တုန်းက ရည်းစားထားရင်း လုပ်တတ်လာတာပေါ့။
ငါနဲ့ယူတုန်းက အပျိုစစ်လို့ သွေးတွေထွက်တာ တော်သေးတယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ငါခွင့်လွတ်ပါတယ်။ သူအပျိုရည်မပျက်ဘဲ ငါနဲ့ညားတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမှာ။ နောက်ဆိုရင်တော့ ငါလည်း သူ့ကို စုပ်ခိုင်းရမယ်။ အေးမို့ကလည်းလေ ဒီလောက်ထိလီးစုပ်ကျွမ်းတာ ကိုယ့်လင်ကို မပြောဘဲ ငြိမ်နေရတယ်လို့။ ကြည့်စမ်းပါဦးအခုတော့ ဟိုလူကိုထွန်းရဲ့လီးကို အငမ်းမရစုပ်နေလိုက်တာ။ လက်ကလည်း ကွင်းထုပေးရင်းနဲ့ ကာမဂုဏ် မာန်ဟုန်ထနေလိုက်တာ ရေခဲမုန့်မစားဖူးတဲ့ အပျိုမလေးတစ်ယောက် အားရပါးရစုပ်ယူလျှက်နေသလိုပဲ ဟိုလူ့လီးကို မက်မက်မောမော စုပ်ယူနေလိုက်တာ တော်တော်အားရနေတယ်ထင်တယ်။
လိုးစမ်းကွာကိုထွန်း။ အဲ့လောက် ငါးစမန်ထနေတဲ့ မိန်းမကို မင်းလိုးနိုင်သလောက် လိုးသွားစမ်း။ ငါကြည်ဖြူတယ် မနှမျောဘူး။ ပြီးမှ မင်းလိုးတာထက် ခိုက်အောင် ငါပြန်လိုးပြမယ်။ စောက်ကလေးမလေး ကြည့်စမ်းပါဦး သူများလီးကို စုပ်နေလိုက်တာ။ “ကိုထွန်းရေ ခြံထဲဆင်းမယ်ဟေ့။” “ဟုတ် ဟုတ် အကို။ လာပါပြီ။ ” ကျွန်တော်လည်း ခြံထဲကနေ လှမ်းအော်သလို အသံပြုလိုက်တယ်။ သူတို့နှစ်ယောက် ကပျာကယာထွက်လာပါတယ်။ ခြံထဲဆင်းဖို့ အိမ်တံခါးဝက အထွက် ကျွန်တော်နဲ့ အေးမို့မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့တော့ သူခေါင်းလေးငုံ့ထားပါတယ်။
ကျွန်တော့်ဘေးနားကဖြတ်အသွား ကိုယ်နံ့သင်းသင်းလေးကို ရလိုက်တော့ ကျွန်တော့်ညီတော်မောင်မှာ တင်းကနဲပဲ။ သက်ပြင်းတွေ ဆက်တိုက်ချရင်း အိမ်ထဲဝင် အရက်ထပ်စပ်၊ တစ်ရှိန်ထိုးမော့ချကာ ကုလားထိုင် တစ်လုံးယူပြီး ခြံထဲကို ပြန်ဆင်းလာခဲ့ပါတယ်။ ခြံထဲရောက်တော့ ကိုထွန်းဟာ ကျွန်တော့်မိန်းမအင်္ကျီကို ချွတ် ဘရာတွေ ပင့်တင်ပြီး မိန်းမရဲ့နို့အုံတွေကိုညှစ်နယ်ကာ နို့သီးခေါင်းတွေကို သူ့လျှာနဲ့သိမ်းလျှက် တစ်ပြွတ်ပြွတ်နဲ့စုပ်နေပါတယ်။ အောက်ကလည်း အေးမို့ရဲ့ ထဘီလေးကို လှန်တင်ရင်း အဖုတ်လေးကို သူ့လီးနဲ့ထောက်ထားပါတယ်။လီးကတော့ ကွန်ဒုံးစွပ်ထားတာ တွေ့ရပါတယ်။
အေးမို့ရဲ့အဖုတ်လေးဟာ ပြောင်ရှင်းချောမွေ့နေပြီး ကိုထွန်းရဲ့လီးကတော့ မဲနက်လို့ တုတ်တုတ်ခဲခဲနဲ့အမွေးတွေက အုံလိုက်ကျင်းလိုက်။ ကျွန်တော့်ထက်တော့ တစ်လက်မလောက် တိုမယ်ထင်တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျွန်တော့်မိန်းမ ကောင်းကောင်းအလိုးခံရဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ အင်း ဟင်းဟင်းးအိုး အာ့အားးး မိန်းမရဲ့ညည်းညူသံလေးဟာ အင်မတန် နားဝင်ပီယံရှိလှပါတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ကုလားထိုင်ချကာ ချဉ်ပေါင်ပျိုးခင်းနားက သူတို့ရဲ့ နှစ်ကိုယ်တူလိုးကြမယ့် မြင်ကွင်းကို အားရပါးရ စောင့်မျှော်ရှု့စားနေပါတော့တယ်။
အို့ အို အားးးးကျွတ် ကျွတ် ရှီးးးးအရမ်းလုပ်တာပဲ အေးမို့က ကိုထွန်းရဲ့ရင်ဘတ်ကို လက်သီးလေးဆုပ်ပြီးထုကာပြောသည်။ ဟာ ဒီလူတော့ ငါ့မိန်းမကို စလိုးပြီနဲ့တူတယ်။ အေးမို့ကို ကြည့်လိုက်တော့ ကိုထွန်းရဲ့ကျောကုန်းကို ဆွဲဖက်ကာ အောက်ကနေ ဟင်းဟင်း ဟင်းဟင်းနဲ့ နှာသံပေးညည်းညူရင်း ကိုထွန်းရဲ့လီးဒဏ်ကို ခံစားနေရရှာသည်။ ကိုထွန်းကလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်းချင်းပြန်နှုတ် အသာလေး စီးစီးပိုင်ပိုင်ပြန်ထိုးထည့်ကာ မျက်လုံးမှေးစင်းလျက် ခေါင်းမော့လျက်သားနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမရဲ့ စောက်ဖုတ်အရသာကို အဆိပ်တက်နေသလို ခံစားနေတယ်။ အေးမို့ကိုကြည့်ပြန်တော့လည်း ရှေ့သွားတွေစိကာ နှုတ်ခမ်းလေး ထော်ထားရင်း ပါးပါးလျလျ ညည်းညူးနေတယ်။
အင်း ငါ့မိန်းမတော့ ‌အလိုးခံရတာ ကောင်းနေပြီ။ ကိုထွန်းဖင်ကြီးကလည်း မဲလို့ တင်ပါးကြီးတစ်လှုပ်လှုပ်နဲ့ ခါးကိုညှောင့်ပြီးလိုးနေတာ ဂွေးဥကြီးနှစ်လုံးက တွဲလဲကျပြီး အေးမို့ရဲ့ ပေါင်ခွကြားကို တစ်ဖတ်ဖတ်ရိုက်ခတ်နေတယ်။ အေးမို့ရဲ့ဖြူဖြူဖွေးဖွေး ကိုယ်လုံးလေးကို အပေါ်ကနေ သူ့ခန္ဓာကိုယ်ကြီး မဲမဲသဲသဲနဲ့ တက်လိုးနေတာဟာ တော်တော့်ကို အားမနာလျှာမကျိုးနိုင်လွန်းတယ်။ ဟော ဟော အေးမို့ရဲ့ နို့တွေကို ဆွဲစို့ပြန်ပြီ။ နို့သီးခေါင်းတွေကို လျှာနဲ့ထိုးပြီး ရှေ့သွားနဲ့ကိုက်နေတာ ငါလိုးတဲ့မှပဲ။ ငါတောင် ပြေးစို့ချင်လာပြီ။ နယ်နေပြီ။ နယ်နေပြီဟ ငါ့မိန်းမရဲ့ နို့အုံဖွေးဖွေးလေးကို သူ့လက်ကြမ်းကြီးနဲ့ ဖိပြီးနယ်ဖတ်နေတာကွာ အေးမို့ကော့လူးနေတာပဲ ခေါင်းလေးတောင် ဘယ်ညာရမ်းလို့။ တောက်! ညဘက်လရောင်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် နေ့ဘက်လို သိပ်ပြီး‌လင်းလင်းချင်းချင်း မမြင်ရတာ နာတယ်ကွာ။
အား ရှီးရှီးးး ဖောက် ဖောက် ဖတ် အင့် အင့် ကှိုကလြားးး အင်းးအာ ဘာတွေပြောနေတာလဲ လုပ်မှာဖြင့် မလုပ်ဘူးးအို နည်းနည်း ထပ်မြန်ပြီနော် ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်းးအင်းးအားးအဟာ့အာ ရှီးးး ကောင်းလားးး အမလေးးး အားးကောင်းတယ် ဆောင့် အင့် အင့် အောက်ကပြန်ကော့ပေးလေ အဲ့ဒါမှ အပေါ်ကလိုးတဲ့လူ အားရမှာ အင်း ဟုတ်တယ် အဲ့လိုကော့ ရော့ အင့် အားးး အအားးအာ အို့ အင်း ဟင်း ဟင်းးး ပြီးတော့မလားး မပြီးနဲ့ဦးနော် လိုးလို့ကောင်းနေတုန်းးမင်းစောက်ပတ်က စီးပိုင်ပြီး လိုးလို့ကောင်းတယ်ဟာ မပြီးနဲ့ဦးလေ ဟာ ကွာ ဒီလောက်ဖြစ်တာ ရော့ကွာ ရော့ကွာ ဖောင်း ဖြောင်း ဗြောင်းးရော့ အင့် အားးးးကျွတ် ကျွတ် အမလေးးး အားးအွန်း အွန်း အွန်း အွန်း အင့် အားးး ကျွန်တော့်မိန်းမပြီးသွားပြီနဲ့တူတယ် ဟိုလူက လိုးလို့ကောင်းနေတုန်း။
အေးမို့ကတော့ ကော့ပျံနေတာပဲ။ ကိုထွန်းရဲ့အလိုကျ အောက်ကနေ ပြန်ကော့ပေးတာကို ဟိုလူကလည်း မာန်တွေတက်ပြီး အေးမို့တစ်ချီပြီးသွားတာတောင် ဆက်တိုက် လိုးနေတာ တစ်ဖြောင်းဖြောင်းနဲ့။ ငါ့မိန်းမ စက်ဖုတ်တော့ ဆုံထဲထည့်ထောင်းခံနေရသလိုပဲကွာ။ လီးထဲမှပဲ။ တစ်အားအားနဲ့ အကောင်းကြီးကောင်းပြီး လီးဒဏ်ခံနေရတာ။ အသိစိတ်လွတ်ပြီး လုပ်မိလုပ်ရာ လုပ်တယ်နဲ့တူပါတယ်၊ ကိုထွန်းကျောကုန်းကို လက်သည်းတွေနဲ့ ဆွဲကုပ်ထားတာ အစင်းရာကြီးတွေ ထင်းနေတာပဲ သွေးတွေတောင် စို့လို့။ ဟိုလူက အသား‌နာလေ မာန်တွေတင်းပြီး အသားကုန်စွတ်လိုးမှာကို ငါ့မိန်းမ မသိဘူးလား။
အား အား အားးအိုး ဖြောင်း ဗြောင်း အင့် အား ဖတ်ဖတ် ဖတ်ဖတ် ဖောက် ဗြောင်း အင့် အား အရှိန်တက်လာပြီ ‌ပြီးတော့မယ်။ အောက်က ကြိတ်ခံတော့ ရော့ အင့် အားးဆောင့် ဆောင့် အမလေးလေး ဆောင့် အား အား ဟိုလူက မိန်းမရဲ့လည်ဂုတ်ကို သိုင်းဖက်ပြီး တရစပ်ကို ဆက်တိုက်ဆက်တိုက်ဆောင့်တော့တာ အေးမို့တော့ မရှု့မလှပဲ။ ပထမအချီနဲ့တင် မျက်ဖြူလန်နေပြီ။ အချက် ခြောက်ဆယ်ကျော်လောက်လဲ ထပ်ဆောင့်ချအပြီး ကိုထွန်းတစ်ယောက် တွန့်လိမ့်ပြီး ပြီးသွားတယ်ဗျာ။ အောက်က ‌ကျွန်တော့်မိန်းမ အေးမို့ကတော့ တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ယင်နေတာ။
ဟိုလူက ပြန်ဆွဲနှုတ်ပြီး ကွန်ဒုံးကို ချွတ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ပေါင်ပြန်ဖြဲပြီး စောက်ပတ်ကို မျက်နှာအပ်၊ တစ်ပျက်ပျက်နဲ့ လျှာကိုပင့်ကော်ထိုးလျှက်တော့တာပဲဗျာ။ အမလေး လေ။ အားးအအားးရှီးးး ကျွတ် ကျွတ် ကျွတ် အာဟာအာ ရှီးးး မိန်းမခမျာ အောက်ကခင်းထားတဲ့ စောင်တွေကို လက်နဲ့ကုပ်ဆွဲ တွန့်လိမ်ပြီး ညည်းညူနေတာ။ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပဲဗျာ။
ကျွန်တော့်မိန်းမက သိပ်ကို လိုးချင်စရာကောင်းတာပါပဲလား။ ဟိုလူက အေးမို့ရဲ့ စောက်ပတ်က အရည်တွေကို အကုန်ပြောင်စင်အောင်လျှက်ပြီးမှ အေးမို့ပါးစပ်ပေါ် တက်ခွပြီး နှုတ်ခမ်းကို လီးနဲ့ထိုးတယ်။ အေးမို့က သူ့ဒစ်ကို လျှာနဲ့ဝိုက်ပြီး လျှက်ပေးနေတယ်‌ဗျာ။ ကြည့်လို့ ကောင်းလိုက်တာ။ အေးမို့ရဲ့နှုတ်ခမ်းဖူးဖူးလေးထဲကို အဖုတ်ကို လိုးသလို သူ့လီးတုတ်တုတ်ခဲခဲနဲ့ လိုးနေတယ်ဗျာ။ ကဲ ကြည့်တော့။ အဲ့ဒါပဲ။ မိန်းမဆိုတာ။ လ‌ရည်ဝင်ရင် အသေခင်တယ်တဲ့။ အမှန်ပဲ။ အခုပဲ ကြည့်လေ။ သူ့အဖုတ်ကို လိုးတာမှ မဟုတ်တာ။ သူ့ပါးစပ်ကို ဟိုလူက တက်လိုးနေတာလေ။ သူ့ရဲ့ထမင်းစားတဲ့ ပါးစပ်ကို လီးနဲ့တက်လိုးနေတာဗျ။ ပါးစပ်ထဲမှာ မဆန့်မပြဲ။ ဟိုမိန်းမကလည်း လက်ဖျားလေးနဲ့သာ ကိုထွန်းပေါင်ကို အသာလေး ဟန်ဆောင်တွန်းထားတာ။ ဟိုလူ့လီးကို သူကြိုက်နေတာ အသိသာကြီး။ တစ်အွတ်အွတ်နဲ့ မျက်ရည်တွေဝဲပြီး ပျို့တက်လာတာတောင် ဆက်အလိုးခံနေတာ။
တော်တော် နှာထန်တဲ့ မိန်းမဗျာ။ အစကတော့ ရိုးသလိုလို အေးသလိုလိုနဲ့။ အခုကျ အလိုးလည်း ခံရရော စောက်ပတ်တင်မဟုတ် ပါးစပ်နဲ့ပါ အလိုးခံတာ။ တစ်ချက်နှစ်ချက်လည်းမဟုတ်ဘူး။ ဟိုလူက သူ့ပါးစပ်ကို လီးနဲ့လိုးတာ ဆယ်မိနစ်ကျော်နေပြီ။ အဲ့ဒါကိုတောင် မက်မက်မောမောနဲ့ အောက်ကနေ နှုတ်ခမ်းစုပြီး ထပ်အလိုးခံနေတုန်း။ ဟိုလူက အသာလေး ဆွဲချွတ်တာတောင် အချွတ်မခံပဲ ခေါင်းကြွပြီး လိုက်ဆွဲစုပ်နေတာ။ ဖေလိုးမ။ စောက်ပတ်တင်မဟုတ်ဘူး စောက်ပါးစပ်ပါ ယားတဲ့ဟာမ။ သူစိမ်းလိုးတာတောင် သူ့လင်ရှေ့မှာ အလိုးခံတယ်။ ငါလိုးထဲမှပဲ ကြည့်လို့ကောင်းလိုက်တာ။ လီးပဲ။ မင်းမေစက်ပတ်။ လိုးကွာ လိုး။ အေး ဟုတ်တယ် သူ့ခေါင်းကို ကိုင်ပြီး လိုးး။ အေး ဟုတ်တယ် ငါဖြစ်စေချင်တာ အဲ့လို ကိုင်ထား ခေါင်းကို ကိုင်ထား။ မလွတ်နဲ့ လိုးးး ဆောင့်လိုးချ ဆောင့်လိုးချ။ ဟာကွာ ဆောင့်လိုးချပါဆို။
ဟေ့လူ တစ်ဆုံးထိ လိုးထည့်လိုက်လေ။ အဲ့လောက် အလိုးခံချင်နေတဲ့ ပါးစပ်ပေါက်။ လီးကြိုက်တဲ့ ကောင်မကို နောက်စေ့က ထုပ်ချင်းပေါက် ပွဲချင်းပြီးသေသွားအောင် ဆောင့်လိုးချ။ အင်း ဟုတ်တယ် လိုးစမ်း ကျုပ်မိန်းမ ငထန်မကို လိုးး။ ဟိုမသာမက တစ်အွတ်အွတ် တစ်အင်းအင်းနဲ့ ကြည့်စမ်း အနိုင်မခံအရှူံးမပေး မာန်တင်းပြီး အသေလွေးတာ။ တောက်!! ဟိုလူက စောက်သုံးမကျလိုက်တာ။ ဟေ့လူ လိုးဗျ။ အေး ဟုတ်တယ် ကောင်းတယ် အဲ့လိုဆောင့်ထိုး။ ကောင်မ။ မျက်နှာကို မဲ့ရွဲ့သွားတာပဲ။ ဟိုကောင်က လီးနဲ့ဆောင့်ထိုးလိုက်တာ။ ဆီးခုံနဲ့ သူ့မျက်နှာနဲ့ ရိုက်တာတောင် ဖောင်းကနဲပဲ။ အခုမှ ပါးစပ်ထဲက လီးပြန်ချွတ်ပြီး တစ်အွတ်အွတ်နဲ့ ပြန်ပျို့တက်ပြီး ထထိုင် အန်ချင်ယောင်ဆောင်နေတယ်။ ဖေလိုးမ နောက်ဆုံးတစ်ချက်တော့ မှတ်သွားပြီ။ ကိုထွန်းရေ ခင်ဗျား တော်‌တယ်ဗျို့။ ကြာတော့ ကျုပ် အားမရတော့ဘူးဗျာ။ ပါးစပ်က “ဟေ့လူ ကိုထွန်း” “ဗျာ ” “ဒေါ့ဂီဆွဲဗျာ မရပ်နဲ့။ ” “ဟုတ် ဟုတ် လုပ်ပြီ။ ဖြစ်စေရမယ်” ဟိုလူက ကျုပ်ကို ပြန်ပြောရင်း ‌ကွိုင်တစ်ခုထပ်ဖောက်ပြီး သူ့လီးမှာ ထပ်စွပ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အေးမို့ကို ဖင်ဆွဲထောင်ပြီး ခါးကို လက်နဲ့ အသာဖိချတယ်။ အေးမို့က ဒူးထောက်ပြီး ကုန်းကုန်းလေး။
ဟိုလူက အနောက်ကနေ တစ်ချက်တေ့သွင်းပြီး ဆက်တိုက်လိုးတော့တာပဲ။ ဖြန် ဖြန်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖြောင်း အင့် အင့် အွန့် အာ အာ့ အာ့ အာ အအားးးးဖောင် ဖြောင့် အင့် အား ကြည့်စမ်းဗျာ။ ဟိုလူက အနောက်ကနေ ဆက်တိုက်လိုးတာ။ အရှိန်ရနေပြီ။ အေးမို့ရဲ့ ခါးကျဉ်ကျဉ်လေးကို လက်နဲ့ဆွဲပြီး အသေလိုးနေတာ။ ဆက်တိုက် တရစပ်။ အေးမို့ဖင်လေးကလည်း ဟိုလူ့ဆီးခုံနဲ့ရိုက်ခတ်တိုင်း လှိုင်းတွန့်လေးတွေထသွားတာ ဖင်ဖွေးဖွေးလေး ကြည့်လို့ သိပ်ကောင်းတာပဲဗျာ။ ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း ဖောင်း အား အား ရှီးးအင့် အွန့် အွန့် အွန့် အွန့် အား အား ဖောင်း ဖြောင်း အင့် အားးး လိုးနေတာဗျာ။ ဖာသည်မတစ်ယောက်ကို ကြေးကြီးပေးထားရလို့ တန်အောင် လိုးနေသလိုပဲ။ လိုးစမ်း။
ခင်ဗျား လိုးနိုင်သလောက် လိုးစမ်း။ ကျုပ်မိန်းမ အကောင်းကြီးကောင်းနေပြီ။ ခင်ဗျား လီးကို ကြိုက်နေပြီဗျ။ ခင်ဗျား လိုးတာကို ကြိုက်နှစ်သက်နေပြီ။ ဆောင့်စမ်းဗျာ စက်ပတ်ကို အသားနီလန်အောင် သာ လိုးပေရော့ ကိုယ့်လူရေ။ ဖောင်း ဖြောင်း ဖန်းဖန်း အင့် အား အင်ဟင့် အားးး ဟိုလူလိုးနေတာ မိနှစ်နှစ်ဆယ်ကျော်နေပြီ။ နှစ်ယောက်လုံးလည်း ချွေးတွေ ရွဲနစ်နေတာ။ ဟိုမိန်းမ မပြီးတာမဟုတ်ဘူး။ ပြီးရဲ့သားနဲ့ ဆက်ပြီး အလိုးခံနေတာနေမှာ။ တော်တော် ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့မိန်းမ။ ဖောင်း အင့် ဖြောင်း အားးအိုး လိုး ဆောင့် ဆောင့် ဆောင့် အင်းးး ပာ အားးး နောက်ထပ် ဆယ့်ငါးမိနစ်လောက်ကြာတော့ နှစ်ယောက်လုံး တစ်ဇတ်ဇတ်တုန်ပြီး ဝမ်းလျားမှောက် ထပ်လျက်လဲကျသွားပါတယ်။ ဒီတစ်ခါတော့ နှစ်ယောက်သား မောဟိုက်ပြီး စကားတောင် မပြောနိုင်ပါဘူး။ ခဏကြာတော့ နှစ်ယောက်သား ဖုတ်ဖက်ခါပြီး ထလာတယ်။ ကျွန်တော့်နားရောက်တော့ အေးမို့က ခေါင်းငုံ့ထားတယ်။
အေးမို့လေ ကိစ္စပြီးလို့ ဝိုင်းမှာ ပြန်ထိုင်တော့ ကိုကို့ကို ရှက်လိုက်တာဆိုတာ ပြောမနေပါနဲ့တော့။ ကိုကိုက အေးမို့ရှက်နေတာ သိလို့နဲ့တူတယ်။ သူ့အနားခေါ်ထားပြီး အေးမို့ရဲ့ ခါးလေးကို ပွေ့ဖက်ထားတာ နွေးထွေးလှပါတယ်။ အေးမို့လေ ခုနက ကုန်ဆုံးသွားတဲ့အားအင်တွေဟာ ကိုကို့ရဲ့ ကိုယ်ငွေ့လေးတွေကြောင့် အားပြန်ပြည့်ဖြိုးလာသလို ခံစားရမိပါတယ်။ အေးမို့လည်း ကိုကို့ပါးကို ရွတ်ကနဲ နမ်းလိုက်တော့ ကိုကိုက အေးမို့နှာဖူးလေးကို ဖွဖွလေးနမ်းပြီး ဆံပင်လေးတွေ သပ်တင်ကာ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ပြန်လည် ဆွဲသွင်းထားပါတယ်။ အေးမို့ရဲ့ဘဝလေး ပြန်လည် လုံခြုံသွားသလို ခံစားမိသလို ခုနက အသိစိတ်လွတ်သွားတဲ့ အဖြစ်သနစ်တွေကြောင့် အေးမို့လေ ကိုကို့အပေါ် အားတုံ့အားနာလည်း ဖြစ်မိသလို နားလည်ပေးနိုင်စွမ်းကြီးမားတဲ့ ကိုကို့ကို ပို၍ပို၍ မြတ်နိုးတွယ်တာမိရပါတယ်ရှင်။ အေးမို့လေ ပေါင်တွေနာကျင်ပြီး ပိပိလေးလည်း ကျိန်းနေပါပြီ။
ရင်ဘတ်က အေးမို့ရဲ့ နုနုနယ်နယ် နို့အုံလေးလည်း နီရဲပြီး လက်ယောင်လိုက်နေပါပြီ။ အဲ့ဒီ့လူကြီးပေါ့။ ကိုကိုနဲ့ပါလာတဲ့လူကြီးလေ။ ဟွန်း သူများမယားကို အားမနာလျှာမကျိုး လိုးတာ လိုးတာဆိုတာ အားနဲ့မာန်နဲ့ ပစ်ပစ်ဆောင့်တာ။ အေးမို့ရင်ထဲ နင့်ကနဲပဲ။ ပြီးတော့ သူ့ဟာကြီးက ကိုကို့လောက်လည်း မရှည်ပဲနဲ့ ခြောက်လက်မ မပြည့်တပြည့် တုတ်တုတ်ခဲခဲကြီး။ အေးမို့ရဲ့အဖုတ်လေးထဲ တင်းနေတာ။ အေးမို့ ပြန်ညှစ်လို့တောင်မရဘူး။ တော်သေးတာပေါ့ အေးမို့ရဲ့ ကိုကိုက အရင်တုန်းက လိုးပေးနေစ ရှိနေလို့ အေးမို့အဖုတ်မကွဲတာ။ တကယ်ပဲ။သူလိုးတာက လူကို မျော့နေတာပဲ။
အေးမို့မှာ ဘယ်နှချီ ဘယ်နှခါ ပြီးမှန်းတောင် မသိဘူး။ ပထမတစ်ခါ သူအပေါ်ကနေ တက်လိုးတုန်းက အေးမို့ နှစ်ခါ တိတိပြီးတယ်။ နောက် သူ အေးမို့ကို ဖင်ကုန်းခိုင်းပြီး အနောက်က ဆောင့်လိုးတာ။ အေးမို့လည်း မျက်လုံးတွေ ဝေဝါးပြီး အသိစိတ်လွတ်သွားတာနဲ့ ဘယ်နှစ်ခါပြီးမှန်းကို မသိတော့တာ။အာကာသဟင်းလင်းပြင် လေဟာနယ်ထဲ လွင့်မျောနေသလိုကြီး။ အေးမို့ရဲ့ကိုယ်ပေါ် သူ့ကိုယ်လုံးကြီး အိကျလာပြီး တက်ဖိထားမှ အေးမို့အသိစိတ်ပြန်ဝင်လာတာ။ ကောင်းတာလည်း ဆိမ့်နေတာပဲ။ ကိုကိုလိုးတာနဲ့ သူလိုးတာနဲ့ မတူဘူး။ ဒါပေမယ့် သူလိုးတာလည်း ကောင်းသလို ဟိုးတုန်းက အေးမို့ကို ကိုကိုလိုးတုန်းကလည်း ကောင်းတာပဲ။ ကိုကိုလိုးတာက ချိုအီအေးချမ်းသလိုခံစားရတယ်။ အဲ့ဒီ့လူ လိုးတာက‌ကျတော့ အရိုင်းဆန်တယ်။
သမန်းဝံပုလွေတစ်ကောင်လိုပဲ။ အေးမို့ကို မညှာမတာ တက်လိုးပစ်တာ။ အေးမို့အသိစိတ်ပျောက်အောင်ကို လိုးပစ်တာ။ အဲ့ဒါကိုတောင် ကိုကိုက ဘေးနားကနေ ကြည့်နေနိုင်တယ်နော်။ ကိုကို့ရှေ့မှာ လိုးရတာ တမျိုးကြီးပဲ။ လိင်စိတ်ပိုကြွသလိုမျိုး ခံစားရတာ ဒူးတွေပါ မခိုင်ချင်တော့ဘူး။ အခုတော့ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ မှိန်းနေရတာ သူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ စကားပြောသံတွေကို ကြားတစ်ချက် မကြားတစ်ချက်ပဲ။ အေးမို့ အမောလည်းပြေရော ကိုကိုက သူသောက်နေတဲ့ အရက်ခွက်ကို အေးမို့ကို လာတိုက်တယ်။ တစ်ခါတည်း မော့သောက်လိုက်တဲ့။ အေးမို့လည်း ကိုကိုပေးတဲ့ခွက်ကို ယူပြီး ဂလု ဂလုနဲ့ ဆက်တိုက်ကို မော့သောက်ပစ်လိုက်တယ်။ အရသာက တစ်မျိုးကြီးပဲ။ သွေးဆူသွားအောင် နောက်တစ်ခွက် ထပ်မော့တဲ့။ ကိုကိုက လှမ်းပေးပြန်တယ်။ အေးမို့က ယူပြီး သောက်တော့မယ်လုပ်မှ ခဏလေးဆိုပြီး အေးမို့ရဲ့ဖန်ခွက်ထဲ အမှုန့် ပန်းရောင်လေးတွေ ဖြူးချပေးတယ်။
အနံ့ကတော့ သင်းသင်းလေး။ မွေးနေတာပဲ။ အေးမို့လည်း ခွက်ကို တစ်ရှိန်ထိုး မော့သောက်ချလိုက်ပါတော့တယ်။ ပြီးမှ ကိုကို့ရင်ခွင်ထဲ ပြန်မှိန်းနေမိတယ်။ ကိုကိုတို့ကတော့ စကားတစ်ပြောပြောနဲ့ ဟိုလူက ကျွန်မကို လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ကောင်းကြောင်း၊ အသားလေးတွေက အိစက်နူးညံ့နေကြောင်း၊ အေးမို့ရဲ့အဖုတ်အတွင်းသားလေးတွေက သိပ်ကိုဆွဲဆောင်မှုရှိလို့ သူစိတ်မထိန်းနိုင်ပဲ အသားကုန်လျှက်မိကြောင်း၊ အေးမို့ရဲ့ စောက်ဖုတ်ကို သူဘယ်လောက်နှစ်ခြိုက်ကြောင်း ကိုကို့ကို ပြောပြနေပါတယ်။
ကိုကိုကလည်း သူ့ကိုအားနာဖို့မလိုကြောင်း၊ ကြုံ တုန်း အားရအောင် တစ်ဝလိုးသွားသင့်ကြောင်း၊ အေးမို့သာ အလိုးခံရင် ညလုံးပေါက် မိုးလင်းတဲ့အထိ တရစပ်လိုးနိုင်ကြောင်း၊ သူလည်း ဘေးနားက ကြည့်ရတာ အင်မတန်ကြည့်ကောင်းပြီး အေးမို့ကို ချက်ချင်းထလိုးပစ်ချင်ကြောင်း၊ အေးမို့ လီးနှစ်ချောင်းနဲ့သာ အလိုးခံရရင် အင်မတန်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်သွားမှာ စိုးရိမ်မိကြောင်း၊ သူသာ ရတုံးရခိုက် တစ်သက်စွဲသွားအောင် အေးမို့ကို လိုးပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်း အစရှိသဖြင့် ပြောဆိုနေကြတာ အေးမို့လေ ရင်ထဲကို ဗလောင်ဆူပြီး စိတ်တွေ ကြွလာသလိုလို မြူးလာသလိုလိုနဲ့ ခေါင်းထဲလည်း ရီဝေပြီး အားအင်တွေ ထကြွ သောင်းကျန်းလာပါတော့တယ်။
သူတို့ပြောတာကို နားထောင်ရင်း ကြာတော့ အေးမို့ ဘယ်လိုမှ မခံစားနိုင်တော့ဘူး။ အေးမို့ရဲ့ အဖုတ်လေးလည်း ကျိန်းပြီး ယားယံလာတာ အရည်တွေလည်းရွဲနေလို့ ပေါင်နှစ်ချောင်းကို လိမ်ထားရတာ။အားးမရတော့ဘူး အေးမို့ ပေါက်ကွဲထွက်ချင်နေပြီ။ “ရှင်တို့ ဒီတစ်ညလုံး စကားတွေ‌ပဲ ထိုင်ပြောနေမှာလား။” “အမ် ” “အွန်၊ အေးမို့ ဘာ ဘာလို့လဲ။” “ဒီမှာ ဟိုလူ ရှင့်နာမည် ဘယ်သူ။” “ကို ကိုထွန်းပါ မမလေး။ ” “ဟုတ်ပြီ ကိုထွန်း ရှင်ဒီကိုလာတာ ဘာကိစ္စလဲ” “မမလေးနဲ့ ဟိုဟို” “လိုးဖို့မဟုတ်လား။ သူများမိန်းမရဲ့ စောက်ပတ်ကို နင်အငမ်းမရလိုးချင်လွန်းလို့ ငန့်ငန့်တက် တဏှာစိတ်ကြွပြီး စစ်ကိုင်းကနေ ဒီမှော်ဘီ အထိတောင် လာလိုးတာမဟုတ်လား။ ” “ဟို ဟိုလေ” “ဘာ ဟိုလေ လဲ။ ဒီမှာ ယောက်ျားလုပ်တဲ့သူကလည်း ကိုယ့်မိန်းမကိုယ်နိုင်အောင်မလိုးဘဲ သူများကို တကူးတကခေါ်ပြီး လိုးခိုင်းရတယ်လို့။ စောက်ဖြစ်ကိုမရှိဘူး။ လီးကရှည်သလောက် စောက်သုံးတစ်စက်မှ မကျဘူး။ ဒီမှာ ဟိုလူ။ ရှင်ဘာလုပ်မှာလဲ။ ရှင်ပြန်မှာလား မပြန်ဘူးလား။”
“ဗျာ။” “မ‌ဗျာနဲ့။ ရှင်မပြန်ရင် ရှင့်လီးကျိုးအောင် ကျွန်မဒီည လိုးပစ်မယ်။ လာခဲ့စမ်း။ ဖေလိုးမသားကြီး။ ငါစက်ပက်ကို လာလိုးတဲ့လူကြီး။ လာခဲ့စမ်း။” ကျွန်မလည်း ပြောပြောဆိုဆို အော်ဟစ်သောင်းကျန်းရင်း အဲ့ဒီ့လူဆီသွားကာ အရက်သောက်နေတဲ့ သူ့ကို တွန်းလှဲပစ်လိုက်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ ပက်လက်လန်သွားတဲ့ သူ့မျက်နှာပေါ် ထဘီကိုလှန်ပြီး တက်ဖိထိုင်ပစ်မိတယ်။ ပြီးတာနဲ့ အတွင်းခံဘောင်းဘီတောင် ချွတ်မနေတော့ဘဲ သူ့သောက်ခွက်ကို ကျွန်မစောက်ပတ်နဲ့တက်ထိုင်ပြီး ပွတ်ချပစ်လိုက်တယ်။ သူ့နှာခေါင်းနဲ့ ကျွန်မရဲ့အစိနဲ့ဖိကြိတ်ပွတ်ချေမိတယ်။ ရင်ထဲ နည်းနည်းပေါ့ထွက်သွားသလို ခံစားရမိတယ်။ တစ်ခါတလေ သူ့သွားတွေနဲ့ ကျွန်မ စောက်ပတ်နဲ့တောင် ခုတ်မိတယ်။ ကျွန်မလေ ခါးကို နှဲ့နှဲ့ပြီး တက်ပွတ်ပစ်တာ။ ကောင်းလည်းကောင်းတယ်။
ရှီးးး အဲ့လူကတော့ အောက်ကနေ မွန်းလို့နဲ့တူတယ်၊ တအင်းအင်း တစ်အူးအူးညည်းညူရင်း အတင်းကိုရုန်းကန်နေတာ။ သူ့ခေါင်းကို စုံကိုင်ပြီးတော့ ကျွန်မ တက်ပွတ်ပစ်တာ။ သူများမိန်းမကို လိုးတဲ့လူစားမျိုးက အဲ့လို စောက်ခွက်ကို စောက်ပတ်နဲ့တက်ပွတ်ပစ်မှ တော်ကာကျတာ။ ကိုကိုကတော့ “ကိုထွန်းရေ။ ငါ့မိန်းမတော့ ဆေးကြွနေပြီ။ မင်းထိန်းပြီး နိုင်အောင် ကိုင်တော့ဟေ့” တဲ့ ။ သူလှမ်းပြောတာ ကြားလိုက်ရတယ်။ ကျွန်မကတော့ အကောင်းကြီးကောင်းနေပြီရှင်။ ………… အေးမို့အရက်ခွက်ထဲမှာ ကျွန်တော် ဆေးစပ်ပေးလိုက်တာက ဟုတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီလောက်ထိ သွေးကြွမယ်မှန်း ကျွန်တ်ာမသိခဲ့ဘူး။ကျွန်တော်ဆေးခပ်လိုက်တာ တော်တော်ကြီး လက်လွန်သွားတယ်။
သူရုတ်တရက်ကြီး ထသောင်းကျန်းတော့ ကျွန်တော်လည်း ကြောင်သွားတာ အမှန်ပဲဗျာ။ ကျွန်တော့်ကိုလည်း တစ်ခါမှ လေသံခပ်မာမာနဲ့တောင် မပြောခဲဖူးတဲ့မိန်းမက အခုလိုရစရာမရှိအောင်ပြောတော့ ကျွန်တော် တော်တော်လန့်သွားတာ။ ကျွန်တော်တောင် ဒီလောက်ဖြစ်နေရင် ဟိုလူ့လိုမျိုး ဘေးသူစိမ်းနေရာက တွေးသာကြည့်တော့ဗျာ။ ဘယ်လောက်ထိ ကြောင်စီစီနိုင်မလဲဆိုတာ။ ဒေါသထွက်ရင်တောင် ကျွန်တော့်ရှေ့မို့ ကျွန်တော့်မိန်းမကို ဘာမှလုပ်လို့်ရဘူးလေ။ အေးမို့ရဲ့ပေါင်ခွကြားထဲမှာ ‌ပေါင်နှစ်ချောင်းနဲ့ရော လက်တွေနဲ့ပါ မျက်နှာကိုအညှပ်ခံထားရပြီး အပေါ်ကလည်း ထဘီက အုပ်နေတော့ မွန်းတာပေါ့ဗျာ။ တစ်အူးအူးနဲ့ အသက်ရှုမဝဖြစ်နေတာ တော်သေး‌တယ် အေးမို့ခါးက အငြိမ်မနေဘဲ မျက်နှာကို နှဲ့ပွတ်ပေးနေလို့ တစ်ချက်တစ်ချက် အသက်ခိုးရှူလို့ရနေတာ။
ကျွန်တော်‌တို့ သောက်နေတဲ့ အရက်ဝိုင်းလည်း ရုတ်တရက်ကြီးဆိုသလို တစ်မဟုတ်ချင်း ကာမဝိုင်းအသွင် ပြောင်းခဲ့ရပါတယ်။ အေးမို့ဟာ ဆယ်မိနစ်လောက် သူအားရအောင် ပွတ်ပြီး ကိုထွန်းရဲ့ ဘောင်းဘီကို ချက်ချင်းဆွဲချွတ်ကာ ကိုထွန်းရဲ့လီးကို ကျွန်တော့်ရှေ့မှာပဲ အားမနာလျှာမကျိုး ရဲရဲတင်းတင်း မာန်ဖီပြီး သတ္တဝါရိုင်းတစ်ကောင်လို ဆွဲစုပ်ပစ်ပါတော့တယ်။ ဟိုလူ့မျက်နှာ တစ်အံ့တစ်ဩနဲ့ မျက်လုံးတွေမှိတ်ပြီး သူပေးဆပ်ခဲ့သမျှကို ပြန်ဇိမ်ယူနေတာဗျာ မျက်နှာကို ရှုံ့တွနေတာပဲ။
ရှီးးး စီး စီးးးးအားပါးပါးးးပြင်းတယ် ဟ ဖြည်း ဖြည်းးးးး ရှီးးပလွတ် ပြွတ် အ ရှီးးမမလေး အ ဖြည်းဖြည်းးသွားနဲ့ ထိကုန်ပြီ အာ မကိုက်နဲ့လေးးအာ့းးရှီး။ ပြွတ် စုပ် စုပ် မမလေး အားရအောင်သာစုပ် စုပ် ကျွန်တော့်လီးကို ကြိုက်လားးး စုပ် စုပ် ရှီးးး “နင်ဘာစကားပြောတာလဲ။ ” ဝုန်းကနဲဆို အေးမို့က မတ်တပ် ထရပ်တယ်။ သူဒေါသထွက်သွားတယ်နဲ့တူတယ်။ ဟိုလူလည်း ကြောင်အမ်းအမ်းဖြစ်သွားတာလေ။ လိင်စိတ်ကြွအောင် ပြောကာမှ သောက်ပြဿနာထတက်မယ့်အဖြစ်။ မရတော့ဘူး။ ဒီအခြေအနေကိုထိန်းဖို့ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝင်ပါမှ ဖြစ်မယ်ဗျာ။ အရှေ့က ကိုထွန်းကို မတ်တပ်ရပ်ကာ ဒေါသတကြီး ရန်တွေ့နေတဲ့ အေးမို့ကို အနောက်ကနေ လက်တွေဖမ်းချုပ်လိုက်တယ်။ ပါးစပ်ကလည်း “ကိုထွန်း၊ မလျှော့နဲ့။ ဒီမိန်းမ ထန်နေပြီ။ မင်းကွိုင်စွပ်တော့။ လုပ်တော့ မြန်မြန်။ ” ကျွန်တော်ပြောတာကို ကိုထွန်း သဘောပေါက်ပါတယ်။
ချက်ချင်း ကွိုင်တစ်ထုပ် ဖောက်စွပ်တယ်။ ပြီးတာနဲ့ အေးမို့ပေါင်ခွကြားထဲကို ဝင်ပြီး အောက်ကနေ သူ့ဒစ်နဲ့တစ်ချက်ထိုးပြီး ပင့်ဆောင့်တော့တာပဲ။ အေးမို့ကို လက်နောက်ပြန် မတ်တပ်ရပ်ချုပ်ထားတဲ့ ကျွန်တော်တောင် ဟန်ချက်ပျက်သွားတယ်။ အေးမို့အဖုတ်ထဲ လီးဝင်တာ ‌ဗြွတ် ဆိုရင် အေးမို့ပါးစပ်က အား ကနဲပဲ။ ကျွန်တော်လည်း အေးမို့ရဲ့လက်တွေကို ဂုတ်ပိုးပေါ်ဘယ်ညာယှက်ပြီး ချုပ်ထားလိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက အေးမို့ရဲ့ခါး‌နှစ်ဖက်ကို စုံကိုင်ပြီး ပင့်ဆောင့်တာ ဇောင့် ဇောင့် ဇောင့်ကနဲပဲ။ တော်တော့်ကို ကြည့်လို့ကောင်းတာပါဗျာ။ က်ုယ့်မိန်းမကို သူများလိုးဖို့ ကိုယ်ကိုယ်တိုင် ချုပ်ပေးထားပြီး ပေးလိုးရတဲ့အဖြစ်ရဲ့ ရင်ခုန်စိတ်လှုပ်ရှားမှုကို ဘာနဲ့မှ မလဲနိုင်ဘူး။ “ကိုထွန်း မရပ်နဲ့ အဲ့ဒီ့အတိုင်းသာ ဆက်တိုက်လုပ်တော့။” ဇောင့် ဖောက် ဖန်း ဖောင်းး အား ရှီး အအား အိုး ဆောင့် ဆောင့်စမ်း ဖောင်း အင့် ဖန်း ဖန်း ဗြောင်းးအားးခွေးသားနင့်အာူ ဒါ အကုန်ပဲလား။
နင့်လီးက အဲ့လောက်ပဲ သုံးရတာလား ဟတ်လား ဖန်း ဖြောင်း ဖြောင်း ဗြောင်းးဗြောင်း ‌ဗြောင်းးးအား ဆောင့် လိုးလေ ဖေလိုး အားးး ဖေလိုးမသားရဲ့လိုးစမ်း အားးး အေးမို့ဗျာ။ ဒီလောက်ထိ လက်ကိုအနောက်ကချုပ်ထားခံရပြီး အရှေ့ကနေ ဆွဲလိုးခံနေရတာတောင် လေသံတစ်သံတောင် မလျှော့ဘူး။ အသာကုန်ကို ပြန်အော်ဟစ်ပြီး ထပ်လိုးဆောင့်ခိုင်းနေတာ။ စဉ်းစားကြည့်ဗျာ ဒီလောက်ထိ အလိုးခံနေရတာတောင် သူက ပမာမခန့်နဲ့ ပြန်စိန်ခေါ်နေတာ။ ကျွန်တော့်မှာ အနောက်ကနေ မနည်းထိန်းချုပ်ထားရင်း ကိုထွန်း ပုံမှန်ပဲလိုး ကြာရင်မျော့သွားမှာ ဒီအတိုင်းပဲလိုး ဆိုပြီး သတိလှမ်းပေးထားရတယ်။
ကိုထွန်းကလည်း တော်တော်သဘောကောင်းပြီး သည်းခံစိတ်ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒီ့အဲ့တိုင်းပဲ တစ်ဖန်းဖန်းနဲ့ ဆက်တိုက်ဆောင့်တာ မိနှစ်နှစ်ဆယ်လောက်လည်းကြာရော တစ်အီးအီးနဲ့ ပြီးသွားတယ်။ အေးမို့ကတော့ အော်ဟစ်ပြီး တစ်ဟင်းဟင်းနဲ့။ လူကြည့်တော့လည်း မျော့နေပြီ။ မောဟိုက်တုန်ရီနေတဲ့လေသံလေးနဲ့ “ရှင် ဆက်မလိုးနိုင်တော့ဘူးလား။ လိုးမယ် လာ လုပ်စမ်း။ လာ ဒီမှာ ကျွန်မစောက်ပတ်ကို လိုး၊ လုပ်စမ်းပါ လာ” ဟူး ဟူး အင်းးရှီးး“ကိုထွန်း ခင်‌ဗျားရသေးလား။ ရရင် ကွိုင်ယူထပ်စွပ်ပြီး ထပ်လုပ်ဗျာ။” ကျွန်တော့်စကားလည်း ကြားရော ကိုထွန်းက သူ့လီးကို ကွင်းထပ်တိုက်တယ်။
တော်တော်ကြာကြာတိုက်လိုက်မှ ပြန်ထလာတယ်ဗျာ။ ဒီလူလည်း စိတ်လှုပ်ရှားနေတာ နေမှာပေါ့။ ပြန်ထလာတာနဲ့ ကျွန်တော်က အေးမို့ကို သူ့ဆီတွန်းလွတ်လိုက်တယ်။ ကိုထွန်းက ဆီးပြီး ဖက်ထားလိုက်တယ်။ အဲ့ဒါကိုတောင် အေးမို့က ချက်ချင်းပြန်ရုန်းပြီး ရှင် သတ္တိမရှိဘူးလား။ လာ ငါကုန်းပေးမယ်။ လာ လိုးစမ်းးးဟင်း ဆိုပြီး ဆက်တီလက်တန်းကို လှမ်းထောက်ပြီး ခါးကုန်းပေးထားတာဗျာ။ သူ့ခါးကိုခွက်ထားပြီး ဖင်ကို ကော့ပေးထားတာ။ ကိုထွန်းလည်း အနောက်နေ ပစ်ဆောင့်တော့တာပေါ့ဗျာ။ ကိုထွန်းပစ်ဆောင့်‌လိုက်တိုင်း အသံစုံမြည်တမ်းရင်း အရှေ့ကို ဟတ်ထိုးလဲမလို ဖြစ်ဖြစ်သွားတာ။ အေးမို့ရဲ့ အိုးလေးလည်းတုန်တုန်တက်သွားပြီး တစ်ဖန်းဖန်း ဆီးခုံနဲ့ရိုက်ခတ်သံ မြည်ဟီးနေတာ။
အား အား အား ဖြောင်း ဖန်း ‌ဗြောင်း အင့် အား ဖောင်း ဖန်းးအားးဆောင့်စမ်းပါ ဆောင့် အီးဟီးဟီးဟီး ဆောင့် အားး အေးမို့ ပြောရင်း ပြောရင်းနဲ့ ငိုသံလေးတွေပါလာတယ်ဗျာ။ မျက်ရည်တွေ ပေါက်ပေါက်ကျလာတော့ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ ဖောင်း ဖန်း ဖြောင်းးးဆိုတဲ့ ကိုထွန်းရဲ့ဆောင့်သံတွေလည်း တစ်ဖြည်းဖြည်း အားပျော့ပျော့လာတယ်။ သူ့ကို လှမ်းကြည့်တော့ ကျွန်တော့် လီး ကျိန်းစပ်နေပြီ အကိုတဲ့။ အကို ဝင်ပါတော့။ကျွန်တော် မရတော့ဘူး တဲ့၊ ကျွန်တော့်ကို လှမ်းပြောတယ်။ ကျွန်တော်လည်း ထိတ်လန့်နေတာတော့ ဝန်ခံပါတယ်။မိန်းမကို စိုးရိမ်နေမိတာပါ။ ဒီလောက်ထိ အဆန်းတကြယ်ကြီး ကျွန်တော် မကြုံဖူးဘူးလေဗျာ။ ဟိုလူကလည်း ‌ဆက်တိုက် ဆောင့်လိုးနေရတာ ခုနှစ်ကြောင်း ရှစ်ကြောင်းလောက်ရှိတော့ ကျိန်းနေလောက်ပြီ။ အေးမို့ကတော့ ဆေးအရှိန်နဲ့ တင်းခံပြီး သွေးကြွနေတုန်းမို့ လူစိတ်ပျောက်နေလို့သာ ခံနိုင်တာ။
မနက်မိုးလင်းရင်တော့ တစ်ကိုယ်လုံးရစရာမရှိအောင် ခံစားနေရမှာ။ ကျွန်တော် သောက်ထားတဲ့အရှိန်များသွားတာ‌ကြောင့်လား၊ မနက်ဖြန်အေးမို့ ဆေးပျယ်ချိန် မခံမရပ်နိုင်အောင် အောင့်အီးနာကျင်ရမှာကို စိုးရိမ်လို့လားမသိဘူး ကျွန်တော့်ဟာကို ပြန်ဆွပြီး စစ်ကူဝင်မလို့ဟာကို ထူးထူးဆန်းဆန်း ကျွန်တော့်ဟာက မထလာတော့ဘူးဗျာ။ကျွန်တော် ချွေးစေးတွေ ပြန်လာတယ်။တော်တော်ကြီးလက်ညောင်းအောင်ထုလိုက်မှ ထလာတယ်။ ကိုထွန်းကိုဖယ်ခိုင်းပြီး ကျွန်တော်ဝင်လိုးတော့ ပြန်ပျော့ခွေသွားတယ်ဗျာ။ ဟိုလူကလည်း မခံစားနိုင်တော့လောက်အောင် ကျိန်းစပ်နေတာ။ အေးမို့က ကျွန်တော့်ကို တွန်းလှဲတယ်။ ပြီးတာနဲ့ ကျွန်တော့်လီးကို အသားကုန်လာစုပ်တယ်။
သူတော်တော်စုပ်ပြီးမှ ကျွန်တော့်ဟာ ထောင်လာတယ်။ အဲ့ဒီ့နောက် အပေါ်ကနေ တက်ခွပြီး ကျွန်တော့်ဟာကို သူ့အဖုတ်ထဲထိုးသွင်းရင်း ပါးစပ်က သံစုံအော်ဟစ်ကာ ဆောင့်ပါတော့တယ်။ ဘယ်လောက်ထိကြမ်းသလဲဆိုရင် သူ့ရဲ့ မိန်းမကိုယ်အဖုတ်ထဲက သွေးတွေတောင် စီးကျနေပါပြီ။ အထဲက သားအိမ်ကို တစ်ခုခုထိခိုက်သွားတယ် ထင်ပါတယ်။ သူကတော့ အသိစိတ်ပျောက်ရင်း အော်ဟစ်သောင်းကျန်းကာ ကျွန်တော့်အပေါ်ကို တက်ဆောင့်နေတုန်း။ ကျွန်တော်လည်း သုံးလေးချီပြီးပါပြီ။ ဒါကိုတောင် မရပ်မနား ထပ်ဆောင့်နေတုန်း။ ကျွန်တော်ပြီးသွားလို့ ညှိုးကျသွားတာနဲ့ ပြန်ဆွဲစုပ်တယ်။ ကျွန်တော့်ဟာမှာလည်း သူ့သားအိမ်ထဲက စီးကျလာတဲ့သွေးတွေနဲ့။ သူဆွဲစုပ်တော့ သူ့ပါးစပ်မှာလည်း သွေးတွေရဲနေတာပဲ။ အရက်နှစ်မျိုးရယ် ‌စိတ်ကြွဆေးမှုန့်တွေရယ် ကာမဂုဏ်လိင်စိတ်တွေရယ် အကုန်ရောထွေးသွားတဲ့အခါ အင်မတန်နုနယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက် စိတ်ဖောက်ပြန်သွားပြီထင်ပါရဲ့။ ကျွန်တော်လည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်နေမိတယ်။
ကိုထွန်းကတော့ ဘယ်အချိန်ကတည်းက လစ်ထွက်သွားတယ်မသိ။ အိမ်ထဲမှာ မရှိတော့ဘူး။ ပြန်မာလာတဲ့ ကျွန်တော့်ဟာကို အပေါ်မှာနင်းကန်ဆောင့်ချရင်း အော်ဟစ်သောင်းကျန်းနေတဲ့ ကျွန်တော့်ဇနီးသည်လေးကို ကြည့်ရင်း သက်ပြင်းတွေချနေရတယ်။ နာရီကိုကြည့်တော့ လေးနာရီကျော်နေပါပြီ။ ဆေးအမြန်ပျယ်ပါတော့။ မိုးမြန်မြန်လင်းပါတော့။ ကိုကို့ကို ခွင့်လွတ်ပါ အေးမို့ရယ်။ နုနယ်တဲ့မိန်းမတစ်ယောက်ဟာ ကြမ်းတမ်းတဲ့လိင်အထိအတွေ့နဲ့မူးယစ်ဆေးတွေရဲ့ တိုက်စားမှုကြောင့် သတ္တဝါရိုင်းတစ်ကောင် ဖြစ်ခဲ့ရပြီ။သားအိမ်‌အတွင်းသား သွေးကြောနံရံတွေဟာ လိုတာထက်ပို ထိခိုက်ပါများရင် သွေးကြောပေါက်တာ နံရံပြိုတာတို့၊ သားအိမ်ခေါင်းကနေ သွေးတွေစီးကျလာတတ်တယ် လို့တော့ ကြားဖူးနားဝရှိပါတယ်။
ဒါမှမဟုတ် အေးမို့ ရာသီလာတာလား။ သူခံစားနေရတာတော့ အမှန်ပဲ။မနက်ကျရင် ဘယ်လောက်ထိ အောင့်နေ နာကျင်နေမလဲ ကျွန်တော်လည်း ရေရေရာရာမသိ။ ကြာလာတော့ ကျွန်တော့်ဟာလည်း မထောင်မတ်နိုင်တော့ဘူးဗျာ။ သူ့ရဲ့မိန်းမကိုယ်ထဲက သွေးတွေလည်း အောက်မှာ ရွဲလို့။ သူ့ကိုယ်လုံးလေးကို အားကုန်ဖက်ထားရင်း ကျွန်တော် ချုပ်ထားလိုက်တယ်။အေးမို့က မိန်းမအားနဲ့ တွန်းထိုးရုန်းကန်ပေမယ့် ကျွန်တော်မလွတ်ပေးဘူး။ သူ့ပုံစံက ဆံပင်တွေရှုပ်ပွ၊ မိတ်ကပ်တွေပျက်၊ ချွေးတွေ သွေးတွေရွဲနစ်လို့ သူရူးတစ်ယောက်ပမာ အော်ဟစ်နေတယ်။
သူတကယ် ရူးသွားပြီလား။ ဆေး အရှိန်ပျယ်ပါတော့။ အေးမို့မြန်မြန်အိပ်ပျော်ပါတော့။အချိန်တွေ မြန်မြန်ကုန် မိုးမြန်မြန်လင်းပါတော့။ တကယ်တော့ ကာမနွံလမ်းအသွားဟာ တရားလွန် မဆန်းပြားတာပဲ ကောင်းပါတယ်‌ဗျာ။ သာယာတဲ့မိသားစုဘဝလေးမှာ လိင်စိတ်သောင်းကျန်းပြီး ဘေးဥပဒ်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ ညတစ်ညကိုတော့ ကျွန်တော် မေ့ပျောက်နိုင်မယ် မထင်ဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့မိန်းမ အေးမို့ရောပဲပေါ့။ အေးမို့ကိုကျွန်တော် ဆေးခန်းတော့ ပြပေးရမှာပါ။ လိုအပ်ရင်လည်း ဆေးရုံတက်၊ ဘယ်လောက်ကုန်ကုန်ဗျာ။ ကျွန်တော် စိတ်မကောင်းဖြစ်တာပဲသိတယ်။
ကျွန်တော့်မိန်းမ အသိစိတ်လွတ်နေတာကို ကျွန်တော် မကြည့်ရက်တော့ဘူးဗျာ။ ဆရာဝန်တွေကို ဘယ်လိုမျက်နှာနဲ့ ပြောရပါ့မလဲဗျာ။ လိင်ဆက်ဆံရင်းနဲ့ ဒီလိုဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီး ဘယ်လို သောက်ရှက်နဲ့ ပြောရပါ့မလဲ။အေးမို့ရော မနက်မိုးလင်းရင် ကျွန်တော့်မျက်နှာကို ဘယ်လိုကြည့်မလဲ။ ကျွန်တော့်ကို နာကျည်းသွားမှာလား။ သူ့အဖေအမေအိမ်ကိုပဲ ပြန်ပြေး‌သွားမှာလား။ ကျော်မကောင်း ကြားမကောင်းတွေတော့ ဖြစ်ကုန်ပါပြီဗျာ။ကျွန်တော်တို့နေရာမှာ ခင်‌ဗျားတို့ လင်မယားဆိုရင်ရော ……… ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ကြှမျးကငျြပညာရှငျ